ဒုတိယလူ – My Blog
အိဖွူသဇငျကတြော့လညျး ဇာတျလမျးက တမြိုး အဖရေော အမရေောက စညျးကမျးကွီးသဖွငျ့ သူ့အတှကျက ဟိုဒီကိစ်စဆိုသညျမှာ မင်ျဂလာဆောငျပွီးမှ လုပျရမညျ့ အရာလို့ထငျသညျ၊ ညီညီ မှာသူ့ရီးစားလေး ကိုသူမြားတှလေို ဟိုကိုငျ ဒီကိုငျ လုပျခငျြသညျ၊ အိဖွူက လကျမခံ၊ အမှိုကျက ပွဿဒျ မီးလောငျဆိုသလို စကားခနခန မြားလာပွီး နောကျဆုံးတော့ ညီညီက ဟိုကောငျမလေးလိုလို ဒီကောငျမလေးလိုလို လုပျလာရမှ အိဖွူက ဒီလောကျ သစှာမရှိတာ သူ့အိမျထောငျဖကျအဖွဈမရှေးခငျြတော့ ဆိုတာ ရီးစားအဖွဈမှ ပွတျစဲလိုကျသညျ၊ နောကျအခဈြလညျး မရှာခငျြတော့၊ စာကိုသာ ဖိကကျြနတေော့သညျ၊ နိုငျနိုငျကတော့ ထညျလဲ တှဲနတေော့သညျ၊ အခုဆို ကြောငျးပိတျလို့ အိမျပွနျလညျး သူ့အဖို့ မပငျြးတော့ပွီ၊ သူ့အဖို့တော့ ယောကျြားလေး တျောတျောမြားမြားကိုလညျး မွညျးစမျးဖူးလပွေီ၊ သူ့ ပထှေး ဦးခဈြဆှကွေောငျ့လားမသိ၊ သူက သူ့ထကျကွီးသော ဘဲကွီးတှကေို ပိုကွိုကျတတျလာသညျ၊
ကြောငျးမှာလညျး မုဆိုးဖို ကြောငျးဆရာမြား နှငျ့ ဘာညာကှိကှလေးတှေ အမွညျးတို့စားရငျး၊ က ကြောငျးစာမြားမှာ စာအရမျးကွညျ့နသေော အိဖွူနှငျ့ ဂရိတျတူတူ ရနသေညျ။ ဤသို့ဖွငျ့ သူတို့၏ ပထမအရှယျပညာရှာခွငျးပွီးဆုံးပွီမို့ နှဈဦးသား လမျးခှဲသှားကွရသျောလညျး အဆကျအသှယျမှာ မပွတျကွခြေ၊ တဦးနှငျ့တဦး အမွဲတမျးလိုလို အဆကျအသှယျရှိပွီး အနညျးဆုံးတနှဈတခါလောကျတော့ ဆုံမိကွလသေညျ။ နောကျတော့ နိုငျနိုငျမှာ သူ၏ လညျပတျကြှမျးကငျြမှုကွောငျ့ သူ့ထကျ အသကျ ၅နှဈမြှကွီးသူ ဗိုလျမူးအောငျနိုငျ နှငျ့ အိမျထောငျကခြဲ့လသေညျ၊ အိဖွူသဇငျကမူ မိဘ ပွောစကားနားထောငျပွီး မိဘခငျြး စစေ့ပျသဘောတူခဲ့သူ ကိုမြိုးဆှေ ဆိုသော အာအိုငျတီကြောငျးဆငျး၊ သူနှငျ့အသကျတူ ရှယျတူ တဦးနှငျ့ အိမျထောငျကခြဲ့ရလသေညျ။
အိဖွူသဇငျ၏ ယောကျခမ မြားမှာ ဟိုတယျတညျးခိုခနျးမြားပိုငျဆိုငျပွီး သားလေး တယောကျတညျးရှိရာ သူတို့ စီးပှားရေးကို ဆကျလကျလုပျကိုငျစလေိုသျောလညျး ကိုမြိုးဆှကေ သူငယျခငျြးမြား လညျး အလုပျလုပျနသေော စင်ျကာပူကို သှားရောကျလုပျကိုငျကွညျ့ခငျြနလေသေညျ၊ သူက အဆငျပွရေငျ အိဖွူကိုပါ ချေါသှားပွီး အတူတူ နခေငျြပမေဲ့ သူကိုယျတိုငျလညျး အလုပျရှာရအုနျးမှာမို့ တနှဈလောကျသာ ညားထားရသေးသော မယားလေးကို သူတို့ မွို့မှာ ခနထားခဲ့ရလသေညျ၊ အိဖွူမှာလညျး အီကိုက ဆငျးသူမို့ ငှစောရငျး မြားကိုငျတှယျရာတှငျ ကြှမျးကငျြသူမို့ သူ့မိဖမြားမှာလညျး သူတို့ အလုပျတှငျ စပွီး အားကိုးနရေပွီဖွဈရာ၊ အိဖွူမှာ သူ့ယောက်ခမ မြားနှငျ့ ကနျြနခေဲ့ရလသေညျ။ နိုငျနိုငျမှာ တော့ အရာရှိရိပျသာ မှာ အခြှေရေံ အသငျးအပငျး တှနေဲ့ နထေိုငျရငျး ဘာအလုပျမှ မလုပျတော့ပဲ ဘဝစညျးစိမျ ကောငျးကောငျးခံစားနရေ လသေညျ။
တခုသော နှရောသီမှာ သူ့ယောကျြား ဗိုလျမူးအောငျနိုငျ အထူးစဈဆငျရေးဖွငျ့ နယျကို သှားနရေသဖွငျ့ တယောကျထညျးပငျြးလာရာ၊ အိဖွူသဇငျ ဆီသို့ ဖုနျးဆကျမိလသေညျ၊ အိဖွူသဇငျကလညျး သူ့ယောကျြား စင်ျကာပူသှားအလုပျလုပျနသေညျမှာ တနှဈနီးပါးရှိနပွေီး သူလညျး အခုတော့ ယောက်ခမ အလုပျနဲ့ ခွခြေူပျမိသလိုဖွဈနတေော့ ၊ ကြောငျးတုနျးက အခငျဆုံးသူငယျခငျြး လာလညျမယျဆိုတော့ ဝမျးသာအားရ ဖိတျချေါလိုကျလသေညျ။ နဖေို့က သူ့အတှကျက သူတို့ပိုငျဟျောတယျခနျးတခနျးကို ပွငျပေးလိုကျရုံပငျ။ သို့နှငျ့ နိုငျနိုငျတယောကျ အိဖွူရှိရာ မွနျမာပွညျအလယျပိုငျး မွို့ကွီးဆီသို့ ရောကျလာခဲ့ရလတေော့သညျ။ နိုငျနိုငျ ရောကျလာတော့ အိဖွူက သူ့ယောက်ခထီးယောက်ခမ ဦးအောငျအောငျဆှေ၊ဒျေါနီလာ တို့ နှငျ့ မိတျဆကျပေးလိုကျလသေညျ၊ ဦးအောငျအောငျဆှတေို့ကလညျး အိဖွူသူငယျခငျြးဆိုတော့ သူတို့ ခြှေးမလေးကို ခဈြသလိုပငျ ခဈြခငျမိကွပွီး လိုလသေေးမရှိ ပွုစုလသေညျ။ သို့နှငျ့ သူငယျခငျြး နှဈယောကျ၊ သူတို့ မွို့လေး အနားတဝိုကျ ဘုရားစုံဖူး၊ ဟိုနရောဒီနရောသှား၊ ဟိုအစားဒီအစား စားဖွငျ့ ပြျောရှငျနကွေလသေညျ။
တနေ့ သူတို့ သူငယျခငျြးနှဈယောကျ အစားအသောကျသောငျးကမျြးလိုကျတာ၊ အိဖွူဇငျတယောကျ အစားအသောကျတခုခု က မသနျ့၍လားမသိ အထကျလှနျအောကျရှောဖွဈကာ ဖြားတော့သညျ။ သူ့ကို ဆရာဝနျက အစားမစားခိုငျးသေးပဲ အရညျပဲသောကျနရေလရော၊ အိဖွူခမြာ အိပျယာထဲ နားနရေလတေော့သညျ၊ သူဆီလာလညျသော သူငယျခငျြးကို ပငျြးနမှောစိုး၍ နိုငျနိုငျ့အတှကျ ခရီးစဉျမြားကို လုပျပေးဖို့ သူ့ယောက်ခမ မြားကို ပွောကွားပေးလသေညျ၊ သို့နှငျ့ ဦးအောငျအောငျဆှကေ အနီးနားရှိတောငျပျေါမွို့လေးသို့ သူ့ကားနှငျ့လိုကျပို့ပေးမညျဟု ပွောလသေညျ၊ နိုငျနိုငျက ငွငျးသျောလညျး အိဖွူက အတငျးအကပျြတိုကျတှနျးသောကွောငျ့ နိုငျနိုငျက သဘောတူလိုကျလသေညျ။ ဒျေါနီလာက အိဖွူကို စိတျမခတြာနှငျ့ ဟျောတယျ အလုပျမြားလညျး ရှိတာကွောငျ့ နခေဲ့ပွီး ဦးအောငျအောငျဆှေ နှငျ့ နိုငျနိုငျ သာ ကားလေးတစီးဖွငျ့ စောစောစီးစီး ထထှကျလာခဲ့ကွလတေော့သညျ။ ဦးအောငျအောငျဆှမှော အသကျ ၅၀ ကြျောကြျော သာရှိသေးပွီး အားကစားလညျး လုပျသူမို့လားမသိ အရပျက လညျးမွငျ့မွငျ့၊ ရငျအုပျကယျြကယျြနှငျ့ လကျမောငျးကွှကျသားမြားလညျး တငျးတငျးရငျးရငျး ရှိသညျ၊
မကျြနှာကလညျးအငျမတနျခနျ့ညားပွီး ပွပွေဈသူဖွဈလရော၊ နိုငျနိုငျ့ အဖို့ ရငျခုံခငျြစရာ ဖွဈလာရလသေညျ၊ သူ့ယောကျြား၊ စဈဆငျရေးသှားနတောလညျး ကွာပွီမဟုတျလား၊ ကြောငျးမှာထညျးက ယောကျြားလေး မြားစှာ အတှအေ့ကွုံရှိဘူးသူ၊ ဦးခဈြဆှမှေ အစ ကိုယျ့ထကျ အသကျကွီးသူ အမြိုးသားမြား အပျေါမှာ ပို၍ တပျမကျမှုရှိနသေော နိုငျနိုငျ အဖို့၊ ငတျနတောလညျးကွာပွီမဟုတျလား၊ အိမျထောငျကပြွီးကထဲက တခြောငျးကိုငျဖွဈနရေတာ ပငျြးသလိုလိုရှိရသညျ့ကွားက အဲဒီတခြောငျးကလညျး မစားရတာကွာပွီ မဟုတျပါလား၊ နိုငျနိုငျ့ စိတျထဲ မှာတော့ ဒီလို အခှငျ့အရေးမြိုးဆိုတာ တျောတေျာ့ကို ကံသီလို့ရတာပဲလို့တှေးနမေိသညျ၊ အငျး ဒီခရီးစဉျအတှငျး မှာ ကိုယျလိုခငျြတာကို ရအောငျမလုပျနိုငျလို့ကတော့ နငျတျောတျောညံ့တယျပွောရမှာပဲ လို့ ကိုယျ့ကိုကိုယျပွနျပွောနမေိလတေော့သညျ။
ဦးအောငျအောငျဆှမှောလညျး ခသေူမဟုတျခွေ၊ နဂိုထဲက မိနျးမ ဝါသနာပါသူဖွဈပွီး ဟျောတယျလုပျငနျး လညျး လုပျလာခဲ့သူမို့၊ မိနျးမပေါငျးမြားစှာနှငျ့ အတှအေ့ကွုံရှိဘူးပွီး၊ ယခုထိလညျး ကဲနသေူဖွဈလသေညျ။ အခုလညျး သူတို့ ဟျောတယျ သုံးခု အနကျ၊ တခုမှာ ခနျ့ထားသညျ့ ဟျောတယျမနျနဂြောမလေး မသေူစိုး နှငျ့ ညှိ နေ လသေညျ၊ တခါတလေ ဟျောတယျ သှားစဈသလိုနှငျ့ ထိုဟျောတယျက အခနျးတခုမှာ မသေူစိုးကို ဖွုတျလရှေိ့လသေညျ၊ သို့သျောလညျး ဝနျထမျးမြား ရိပျမိသှား နိုငျသညျ့ အန်တရာယျရှိသောကွောငျ့ သူတို့ မိသားစု ရဲ့ ဗကေေးရှငျးဟုနျးမျ လို့ချေါလို့ရတဲ့ ၊တောငျပျေါမွို့ကလေး က အိမျကို ချေါသှားပွီး ဗွငျးလရှေိ့သညျ။
ဦးအောငျအောငျဆှကေ ကားကို တောငျတကျလမျးကှကှေ့ကေ့ောကျကောကျတှမှော ကြှမျးကငျြစှာ မောငျးလာရငျးက နိုငျနိုငျကြော့နှယျနှငျ့ စကားစမွီ ပွောလာခဲ့လသေညျ။ နိုငျနိုငျ ၏ အမူအယာပုံပနျး သဏ်ဍနျကို လလေ့ာလိုကျတာနှငျ့ သူကွံရငျ ရနိုငျမညျဆိုတာကို ဦးအောငျအောငျဆှေ ကသိနပွေီ။ နိုငျနိုငျ့ ပုံစံကလညျး မဆှတျခငျက ညှတျနတေဲ့ပုံမြိုး၊ သူ့ကို စကားပွောတာက အစ၊ ပေါငျပုတျလိုကျ၊ ပုခုံးစှနျးလေး တိုကျလိုကျနှငျ့၊ ဆိုတော့၊ စားနကွေကွောငျပါးကွီး ဦးအောငျအောငျဆှေ တယောကျ ပုဆိုးအောကျမှ လီးက အတှငျးခံဘောငျးဘီထဲမှာကို အတငျး ရုနျးထနရေသညျ။ လမျးကလညျး တောငျတကျလမျး၊ ကှကှေ့ကေ့ောကျကောကျ ဆိုတော့ ဂီယာကလညျး တခြိနျလုံးခြိနျးနရေ သညျ၊ သူ့လကျတှကေ နိုငျနိုငျ့ပေါငျလုံလေးကို ထိမိနသေျောလညျး နိုငျနိုငျက နရောအကယျြကွီးရှိရဲ့သားနဲ့ မလှုပျ၊ ဦးအောငျအောငျဆှကေ နိုငျနိုငျ့ကို သူတို့ အပနျးဖွေ အိမျလေး သို့ တနျးချေါသှားပွီး လုပျရငျတောငျ ရနပွေီဆိုတာသိနသေျောလညျး ၊
ဒီတခါတော့ သူ မုဆိုးမလုပျပဲ နှငျ့ သားကောငျ အနဖွေငျ့ လှုပျရှားလိုကျအုနျးမညျဟု၊ တှေးရငျး သဘောကနြမေိသညျ။ ဒီလောကျတောငျ ဆာနတေဲ့ ကောငျမလေးကို ငါ မလုပျတတျမကိုငျတတျ အဖိုးကွီးပုံ ဖမျးနလေိုကျအုနျးမညျ၊ အဲဒါမှ သူလညျး ပိုပွီး စိတျတကျကွှမညျဟု တှေးလိုကျ၏၊ လမျးမှာ ခနတဖွုတျနား ၊ လဘကျရညျရေးဘာလေးသောကျတော့လညျး ငွုတုတု ဟိုထိဒီထိ လုပျလာသော နိုငျနိုငျ့ကို အားနာသလို၊ မခုပျတတျသညျ့ကွောငျအိုကွီးလို လုပျနလေိုကျသဖွငျ့၊ နိုငျနိုငျတယောကျ ပိုအတငျ့ရဲလာ၏၊ ဦးအောငျအောငျဆှလေညျး အဲလို ကစားရတာကို ပြျောနမေိသညျ။ နိုငျနိုငျ့ ကိုယျလုံးလေးကို မသိမသာခိုးကွညျ့ရငျးလညျး သှားရညျကနြရေသညျ၊
အငျး သူအခု လုပျနရေသော မသေူစိုး ကတောငျ နိုငျနိုငျထကျ ၅နှဈလောကျတော့ ကွီးအုနျးမညျ၊ နောကျပွီး မသေူစိုးက ခလေးတယောကျအမေ၊ နိုငျနိုငျက ရုပျအခြောစားကွီးမဟုတျသျောလညျး အသားညိုညို ဖွငျ့ စှဲဆောငျမှုတော့ ရှိသညျ၊ ခလေးလညျး မမှေးဘူးသေး၊ နို့ထှားထှား၊ ဖငျကားကား ဆိုတော့ အားမနာ တမျးလုပျလို့ရမညျ့ ဘျောဒီမြိုး မဟုတျလား။ ဦးအောငျအောငျဆှကေ တောငျပျေါမွို့ကလေးရောကျတော့ နာမညျကွီး ရတေံခှနျရှိရာကို ပထမဆုံး သှားလိုကျသညျ၊ ရှုခငျးတှကေ လှ ရသေံလေးတှနေဲ့ သာယာလှသဖွငျ့ နိုငျနိုငျတယောကျ အတျောပြျောမိသညျ၊ ကွိုးတံတားလေးကို ဖွတျလြှောကျတော့ နိုငျနိုငျ တယောကျကွောကျသဖွငျ့ ဦးအောငျအောငျဆှေ၏ လကျမောငျးကို တှယျဖကျ ၍ လြှောကျသညျ၊ သူ့နို့ကွီးတှကေ ဦးအောငျအောငျဆှေ လကျမောငျးကို အိနအေောငျ ဖိထားသညျ။
ဦးအောငျအောငျဆှေ ၏ သနျမာသော ကွှကျသား မြား၏ အထိအတှကေ့ နိုငျနိုငျ့ ကို ရငျထဲ တလှပျလှပျဖွဈစသေညျ၊ ကွိုးတံတားလေး လှခေါးမှ ဆငျးတော့ ရတှေေ ရှဲနသေညျ့သဈသား လှခေါးထဈမြားမှာ ဒေါကျဖိနပျဖွငျ့ ခြျောကမြညျ စိုးသဖွငျ့ ဦးအောငျအောငျဆှကေ နိုငျနိုငျ့ လကျကလေးကို ဆှဲ၊ ခါးကလေးကို ထိနျးကာ ဆငျးလာရသညျ၊ နိုငျနိုငျ့မှာ ဒူးတှေ မခိုငျခငျြတော့၊ ပေါငျခှဆုံမှာတောငျ အရညျတှေ စို့နရေပွီ။ ဦးအောငျအောငျဆှကေလညျး အရပျကွီးမှာ မွငျ့မားလှသဖွငျ့ နိုငျနိုငျ့မှာ သူ့ကိုယျကို လှဲပွိုမသှားအောငျထိနျးရငျး ပွနျလညျတှယျဖကျထားရာ၊ သူ့မကျြနှာလေးမှာ ဦးအောငျအောငျဆှေ၏ ရငျခှငျထဲ ရောကျနရေလသေညျ။ ဦးအောငျအောငျဆှကေ သူ့ရငျခှငျထဲ မှာ ကိုယျလုံးလေးတုနျတုနျရီရီ ဖွဈနရှောသော နိုငျနိုငျ ကို အသာဖကျထားရငျး ကြောပွငျလေးကို ပှတျပေးလို့၊ ..ဟငျ..နိုငျနိုငျ ကိုယျလုံးလေးလညျး တုနျလို့ပါလား၊ အမွငျ့ကို ကွောကျတယျထငျတယျ.. ..
ဟုတျ..ဟုတျ..ဦးဦးအောငျ….နိုငျ့ရငျထဲ ဘယျလိုဖွဈသှားမှနျးမသိဘူး အောကျကို ငုံ့ကွညျ့လိုကျမိလို့ထငျတယျ… ..အငျး ခနနားလိုကျအုနျးလေ နိုငျနိုငျ..မလှုပျနဲ့အုနျး၊ နောကျတဆငျ့ကို ဦး တှဲချေါသှားမယျ နိုငျနိုငျ မကျြစမှေိ့တျခငျြမှိတျထားလိုကျပေါ့… ထိုကဲ့သို့ပွောနစေဉျမှာပငျ ဦးအောငျအောငျဆှေ၏ ရငျဘတျတှငျနိုငျနိုငျ ၏ နို့ကွီးမြားမှာလညျး ဖိကပျမိနပွေီး၊ ဦးအောငျအောငျဆှကေ နိုငျနိုငျ့ကြောပွငျလေးကို သူ့လကျဖဝါးကွီးဖွငျ့ ပှတျသပျပေးနလေသေညျ။ နိုငျနိုငျမှာ သူ့ ပေါငျရငျးပျေါသို့ ထိုးထောကျလာသညျ့ ပူပူနှေးနှေး ကွီးမှာ ဦးအောငျအောငျဆှေ၏ ပုဆိုးအောကျမှ လီးကွီးမှနျး သိနသေဖွငျ့ တိတျတခိုးလေး ပြျောနမေိလသေညျ။ နောကျဆုံးအဆငျ့ လှခေါးထဈမြားကို ဆငျးကွတာတှငျတော့ ဦးအောငျအောငျဆှကေ နိုငျနိုငျ့ခါးလေးကိုသိုငျးဖကျပွီး ဆငျးလာခဲ့ကွလတေော့သညျ၊
အောကျခွမှေ လဘကျရညျဆိုငျလေးတှငျထိုငျပွီး ခနနားကွတော့ ဦးအောငျအောငျဆှမှော ဘောတောငျ အောငျ့ခငျြသလိုဖွဈလာရလသေညျ၊ ထို့ကွောငျ့ အခြိနျသိပျမဆှဲခငျြတော့ပဲ။ ..နိုငျနိုငျ..ဦးတို့ ဒီမွို့တကျလာရငျ အနားယူဖို့ ဆိုပွီး ဝယျထားတဲ့ အိမျလေးရှိတယျ..အဲဒီမှာ ခနသှားနား ကွရအောငျလား၊ အဲဒီက ဦးတို့ ခိုငျးတဲ့သူတှကေို စားစရာသှားဝယျခိုငျးပွီး အဲမှာပဲ စားကွမယျလေ.. ..ကောငျးသားပဲ ဦးဦးအောငျ…. ဦးအောငျအောငျဆှတေို့ အိမျလေးရှိရာသို့ရောကျသညျနှငျ့ သူတို့၏ ခွံကို စောငျ့ပေးသော ဦးသိနျး ကထှကျလာပွီး တံခါးဖှငျ့ပေးသညျ၊ ဦးသိနျးမှာ ဦးအောငျအောငျဆှေ ၏ တပညျ့ရငျးဖွဈပွီး ဦးအောငျအောငျဆှေ မိနျးမတှေ ချေါချေါလာပွီး ဖွုတျသညျမှာ ရိုးနပွေီ မို့ ထူးထူးဆနျးဆနျး မပွောတော့ပေ။
ဦးအောငျအောငျဆှကေ နိုငျနိုငျ က ကိုယျ့ဘာသာ လြှောကျနိုငျနပွေီ ဖွဈသျောလညျး စိုးရိမျသလိုလိုဖွငျ့ ခါးလေးကို ကိုငျပွီး အိပျခနျးရှိရာသို့ လိုကျပို့လသေညျ၊ အိပျခနျးထဲမှာ ရခြေိုးခနျး၊ အိမျသာလညျး ရှိသဖွငျ့ နိုငျနိုငျ့ကို သုံးခငျြက သုံးဖို့၊ သူ အစားအသောကျတှအေတှကျ စီစဉျလိုကျအုနျးမညျဆိုကာ ထှကျသှားလိုကျလတေော့သညျ။ ဦးအောငျအောငျဆှေ က ဦးသိနျးကို အစားအသောကျမြား ဝယျဖို့နှငျ့ ပွီးပါက နောကျဖေးမီးဖိုထဲတှငျ ပွငျထားပေးဖို့၊ အိမျရှနှေ့ငျ့ အိပျခနျးဖကျကို မလာဖို့ မှာလိုကျလသေညျ၊ ဦးသိနျးကလညျး သဘောပေါကျပါသညျ၊ နောကျဖေးပေါကျမှာပငျ အစားအသောကျမြား ဝယျဖို့ ထှကျသှားလတေော့သညျ။ ဦးအောငျအောငျဆှေ အိပျခနျးတံခါးကို အသာတှနျးကွညျ့ရာ ဂလနျ့မခထြားသဖွငျ့ ဝငျလာခဲ့လိုကျရာ ကုတငျပျေါ၍ နဖူးပျေါလကျတငျလြှကျ ပကျလကျလေး လှဲနသေော နိုငျနိုငျ့ကို တှရေ့လသေညျ၊
ဦးအောငျအောငျဆှကေ လိုရမယျရ တံခါးကို အသံမကွားအောငျစပွေီ့း ဂလနျ့ခလြိုကျလသေညျ၊ နောကျတော့ ကုတငျစောငျး နိုငျနိုငျ့ အနားထိုငျလိုကျပွီး၊ ..ဘယျလိုနသေေးလဲ နိုငျနိုငျ.. ..အငျး..သကျသာသှားပါပွီ၊ ကြေးဇူးပဲနျော ဦးဦးအောငျ… ..အမလေးကှာ ဒါလေးမြား ကြေးဇူးတငျစရာမလိုပါဘူး၊.. နိုငျနိုငျ က မကျြစပေ့ျေါမှ လကျကို ဖယျပွီး ကွညျ့လိုကျရာ သူ့ကို ငုံ့မိုးကွညျ့နသေော ဦးအောငျအောငျဆှကေို တှလေို့ကျရလသေညျ၊ ဦးအောငျအောငျဆှမှော အတျောပငျ တဏှာကွောက တငျးနပွေီ ဖွဈရာ ညိုခြောလေးခြောနသေော နိုငျနိုငျ့ကို ငုံ့ကာ နမျးလိုကျမိလသေညျ၊ ပထမတော့ နဖူးလေးကို ဖွဈသညျ၊ သို့သျောလညျး နိုငျနိုငျက စိတျဆိုးပုံမပွပဲ၊ ..အို့…မတျောဘူးထငျတယျ ဦးရယျ…. လို့ပွောနတောနဲ့ နူတျခမျးကို ပွောငျးနမျးလိုကျလသေညျ၊
နိုငျနိုငျက ခကျြခွငျးပငျ တုနျ့ပွနျအနမျးတှေ ပေးလာတော့သညျ၊ ကုတငျပျေါမှာ နှဈယောကျသား လူးလိမျ့နမျးရငျးက အဝတျအစားတှကေို တစမကနျြခြှတျပွဈလိုကျကွလသေညျ။ ဦးအောငျအောငျဆှေ၏ အတှအေ့ကွုံရှိနသေော၊ လကျတှေ ပါးစပျတှေ၊ လြှာတှကေ နိုငျနိုငျ့တကိုယျလုံးက ကာမခလုပျတှေ ရှိသမြှကို အကုနျဖှငျ့ပေးနသေလိုပဲ၊ နိုငျနိုငျ့ခမြာ သူ့စောကျဖုတျကလေးမှာ ဒီလောကျ အရညျရှမျးရှမျး မစိုဖွဈတာကွာလှပွီကော။ သူ့ပထှေး ဦးခဈြဆှနှေငျ့တုနျးက လိုမြိုး အရသာတှေ ပွနျတှနေ့ရေလသေညျ။ ဦးအောငျအောငျဆှကေ နိုငျနိုငျ့ ပေါငျတနျ ဖွောငျ့စငျးစငျးလေး နှဈခြောငျးကို ဒူးထောငျလြှကျကားစပွေီး သူ့မကျြနှာကို နိုငျနိုငျ့စောကျဖုတျလေးပျေါအပျကာ နိုငျနိုငျ၏ စောကျဖုတျနူတျခမျးသားလေးမြားကို ရကျပေးလသေညျ။
နိုငျနိုငျက အိပျယာပျေါမှာ ကော့ပွနျတကျနပွေီး တခြီပွီးသှားရှာလသေညျ၊ ဦးအောငျအောငျဆှကေ ဆကျပွီး ရကျနသေေးသဖွငျ့၊ နိုငျနိုငျခမြာ မနနေိုငျရှာတော့ပဲ ဦးအောငျအောငျဆှေ၏ လကျမောငျးနှဈဘကျကို အတငျးဆှဲမရငျး၊ …ဦးဦးအောငျ..နိုငျ့ကို ..လုပျပေးပါတော့.. ဟုပွောလိုကျရှာတော့သညျ။ ဦးအောငျအောငျဆှေ၏ လိငျတနျထှားထှားကွီးက နိုငျနိုငျ့ ကို အားရ ကနြေပျစခေဲ့သလို၊ နိုငျနိုငျ့၏ ပွညျ့တငျးတငျးနို့ကလေးမြား၊နှငျ့ စေးကပျြသော စောကျဖုတျကလေးက ဦးအောငျအောငျဆှကေို လိုးလို့ မဝအောငျ ဖွဈခဲ့ရပါသညျ၊ နိုငျနိုငျကလညျး ဦးအောငျအောငျဆှေ၏ လိငျခြောငျးကွီးကို အားရပါးရ စုပျပေးခဲ့သလို၊ ဦးအောငျအောငျဆှကေလညျး နိုငျနိုငျ့ စောကျဖုတျကို ကောငျးကောငျးရကျပေးခဲ့ပါသညျ။ သို့ဖွငျ့ သူတို့ နှဈဦး၏ ခရီးစဉျမှာ ရတေံခှနျတခုထညျးဖွငျ့ အဆုံးသတျခဲ့ကွပါသညျ။ …ကောငျးလိုကျတာ နိုငျလေးရယျ… ..နိုငျတော့ ဦးဦးကို ဆှဲသှားပွီ ထငျတာပဲ၊
ဦးဦးက အရမျးကြှမျးတာပဲ..ခဈခဈ… နိုငျနိုငျနှငျ့ ဦးဦးတို့ ဇာတျလမျးက သူတို့ မွို့ပွနျရောကျသညျအထိဆကျလာသညျ၊ ဦးအောငျအောငျဆှေ အဖို့ကလညျး နိုငျနိုငျတညျးနတောက သူတို့ပိုငျတဲ့ ဟျောတညျဆိုတော့ သော့အပိုတခြောငျးယူထားလိုကျရုံပငျ၊ နိုငျနိုငျကလညျး အမွဲကွိုဆိုလြှကျ။ အိဖွူကလညျး သူ့သူငယျခငျြးနှငျ့ သူ့ယောက်ခထီး တို့ ဆကျဆံရေးကို ရိပျမိသညျ၊ သူ့သူငယျခငျြးအကွောငျးလညျး သူသိသညျမို့၊ ..နိုငျနိုငျရယျ..နငျကတော့ တကယျပဲ.. ဟုသာပွောမိရှာသညျ၊ သူ့သူငယျခငျြး ရောကျတုနျး ပြျောနရေငျပွီးတာပဲလဟေု လှတျပေးထား လိုကျလသေညျ။ အိဖွူ တယောကျ တိမျတိုကျတှကွေားမှာ လှဲလှောငျးလို့ ၊ တိမျတှကေလညျး ဖွညျးဖွညျးခငျြး လှငျ့မြှောလို့ ငွိမျ့ငွိမျ့ကလေး သူ့ကို ပုခကျလှဲပွီး ခြော့သိပျနသေလိုပဲ၊
အဲဒီအခြိနျမှာ တယောကျယောကျက သူ့ပေါငျနှဈလုံးကို လာခှဲလိုကျသညျ၊ သူငုံ့ကွညျ့လိုကျတော့ ကိုမြိုးဆှေ၊ အို ကိုမြိုး ဘာတှလေုပျနတောလဲ၊ သူ့ အတှငျးခံဘောငျးဘီလေးကိုလညျး ဆှဲခြှတျသှားပွီ အို့၊ ကိုမြိုးနျော တျောတျော ကဲနေ၊ ဘယျကနဘေယျလိုပျေါလာသလဲ ကိုမြိုးရယျ၊ အိဖွူလှမျးနတောကွာလှပေါ့၊ အို အိဖွူ အဖုတျလေးကို သူနမျးနတေယျ၊ ဟှနျ့ သူတခါမှလညျး မလုပျဘူးပဲနဲ့၊ အိဖွူကွညျ့ဖူးတဲ့ ဟိုရုပျရှငျကားတှမှော ပါပါနတောလေ၊ အမြိုးသမီးတှရေဲ့ အဲဒီနရောတှကေို အမြိုးသားတှေ အားရပါးရ လြှကျပေးတာလေ၊ အိဖွူကွညျ့ကွညျ့ပွီး ကွကျသညျးထမိတယျ၊ ကိုမြိုးမြား သူ့ကို လုပျပေးလမေလားလို့ စိတျကူးလညျး ခနခန ယဉျမိတယျ၊ ဒါပမေဲ့ ကိုမြိုးက မလုပျပေးဘူးလေ။
အိဖွူ ပါးစပျက ဘယျလိုပွောလို့ထှကျမှာလဲလို့။ ခုတော့ အိဖွူရဲ့ ပေါငျနှဈလုံးကွားမှာ သူ့ခေါငျးကွီးဝငျလို့ အိဖွူအဖုတျလေးကို အားရပါးရ သူ့လြှာစိုစို နှေးနှေးကွီးနဲ့ လြှကျနလေိုကျတာ၊ အိဖွူ ဖငျကလေးပါ ကော့ပေးလိုကျမိတယျ၊ အိဖွူ သူ့ကိုယျအောကျက တိမျစိုငျတှကေိုလညျး လကျနဲ့ ဆုပျကိုငျထားလိုကျမိတယျ၊ သူ့လြှာကွီးက အိဖွူရဲ့ အစလေ့ေးကို ဖိပွီးထိုးပေးရငျးက အိဖွူရဲ့ စောကျခေါငျးနံရံလေးတှကေို ပါမှီသလောကျ လှမျးရကျလိုကျတော့၊ အိဖွူကိုယျလုံးလေး တဆတျဆတျတုံခါပွီးတော့ ကာမ အရသာကို အထှတျအထိတျရောကျသှားခဲ့ရတယျ၊ အိဖွူမောလိုကျတာ ကိုမြိုးရယျ။ နောကျတော့ အိဖွူ အမောဖွနေလေို့မှ မဆုံးသေးဘူး အိဖွူရဲ့ ပေါငျနှဈလုံးကို ထပျဖွဲပွီးတော့ သူ့ကိုယျကွီးဝငျလာတယျ၊ နောကျတော့ အိဖွူ စောကျဖုတျလေး အဝမှာ ပူနှေးနှေး မာမာ အခြောငျးကွီး တပွေီ့း အသာဖိသှငျးလာတယျ၊
အား နာတယျ ကိုမြိုးရယျ၊ ကိုမြိုး အရငျကလိုမဟုတျပါလား အရမျးကပျြနတေယျ၊ အို့၊ အိဖွူအိပျယာကလနျ့နိုးလာတယျ၊ သူ့အိပျမကျကလညျး တကယျလိုပဲလို့တှေးနတေုနျးပဲ သူ့စောကျဖုတျလေးထဲ တငျးတငျးကပျြကပျြကွီးခံစားလိုကျရတယျ၊ ဟငျဒါဆိုရငျ တကယျပေါ့၊ အို၊ ကိုမြိုးဘယျတုနျးကပွနျရောကျနတောလညျး၊ တခါထဲဘာမပွောညာမပွောနဲ့၊ အိဖွူပွုံးတော့မလိုဖွဈသှားရာက တခြိနျထညျးမှာ ထိပျလနျ့သှားခဲ့ရသညျ။ ဟငျ၊ ငါ၊ ငါ၊ အိပျနတော ငါ့အိပျယာမှ မဟုတျတာ၊ ဒါဆိုရငျ၊ ဟောတော့။ ဦးအောငျအောငျဆှေ ရမေိုးခြိုး အမှေးနံ့သာ ဆှတျဖွနျးပွီးတော့ ဘလကျလဘေယျလေး လကျနှဈလုံးလောကျကို ရခေဲလေးနဲ့ အသာလှုပျခပျဖြျောရငျး ဇိမျခံစုပျလိုကျသညျ၊ တခှကျကုနျသှားတော့ နာရီကို လှမျးကွညျ့လိုကျသညျ၊
အငျး သှားဖို့တော့ အခြိနျကပြွီ၊ အခုန ရမေခြိုးခငျတုနျးက သောကျထားတာနဲ့ ဆိုတျောတျောတော့ရခြေိနျကိုကျနပွေီ မဟုတျလား၊ ဒီညမှာ သူ့သူငယျခငျြး နိုငျငံခွားမှာ ပွနျလာလညျတုနျးလကျဆောငျပေးသှားတဲ့ ဆီယားလာ့ ကို စမျးဖို့ စဉျးစားထားလို့ ရငျနညျးနညျးခုံနသေညျ၊ အဲဒီကောငျအပွောအရတော့၊ မငျးစိတျလာလို့ကတော့ လီးက နှဈရကျလောကျ ဆကျတိုကျထောငျနိုငျတယျ ဆိုပဲ၊ ဟ မငျးဟာက အဲလောကျလီးအကွာကွီးတောငျရရငျသပွေီပေါ့ကှလို့ ပွောလိုကျတော့၊ သူငယျခငျြးက အားရပါးရရီမောပွီး၊ အဲလို မဟုတျဘူးကှ၊ သူက မငျးစိတျထလာတာနဲ့တောငျပွီး လုပျဖို့ရယျဒီဖွဈတာ၊ မငျးတခြီပွီးသှားရငျခနပြော့သှားရော၊ မငျးစိတျပွနျထလာမှ ပွနျတောငျတာ၊ မငျးစိတျပွနျမထတော့ဘူးဆိုရငျလညျး မတောငျတော့ဘူး၊တဲ့။
ဆိုတော့စိတျဝငျစားစရာပဲ၊ ဦးအောငျအောငျဆှမှော လီးတောငျဖို့က ပွဿနာမရှိ၊ သို့သျောလညျး အခု အသကျအရှယျမှာ က ငယျငယျကလိုမဟုတျတော့ တခြီပွီးသှားရငျ နောကျတခါပွနျတောငျဖို့ဆိုတာ တျောတျောနှငျ့မလှယျတော့ ကံကောငျးရငျတော့ နတေ့ဝကျလောကျနှငျ့ပွနျထနိုငျသညျ၊ သို့သျော နိုငျနိုငျ့ လိုမြိုးကောငျမလေး မြိုးက ကိုယျ့ဘေးမှာ တခြိနျလုံးမရှိ၊ ငယျငယျတုနျးကလို တညထဲ နှငျ့ လေးခြီလောကျဆှဲဖို့ဆိုတာက ဆေးမပါရငျမဖွဈနိုငျတော့၊ သူဒီည နိုငျနိုငျနှငျ့ တညလုံးနမေညျဟု မှနျးထားသဖွငျ့ သူ့သူငယျခငျြးပေးသော ဆေးကို အိမျအထှကျမှာ သောကျလာခဲ့ခွငျးဖွဈတော့သညျ။ ဟျောတယျရောကျတော့ ဟိုလိုလို ဒီလိုလိုနှငျ့ နိုငျနိုငျရှိသော အထပျသို့ တကျသှားပွီး သူ့မှာပါလာသညျ့သော့ဖွငျ့ အသာဖှငျ့ဝငျလိုကျလသေညျ၊
အခနျးတခုလုံးလညျး မှောငျနပွေီး နိုငျနိုငျတယောကျ ကုတငျပျေါမှာ အသကျမှနျမှနျရှုရငျး အိပျပြျောနသေညျကို မှောငျထဲမှာ မှနျးလို့ရလိုကျသညျ၊ နိုငျနိုငျ့ကိုလညျး စခငျြတာနှငျ့ အသံမကွားအောငျ ခွဖြေားထောကျပွီး ကုတငျဘေးကိုလာလိုကျသညျ၊ မှောငျထဲမှာပဲ လကျဖွငျ့အသာစမျးပွီး အတှငျးခံဘောငျးဘီလေးကို ရအောငျခြှတျလိုကျသညျ၊ ထမိနျကို ပေါငျရငျးနားထိလှနျတငျရငျး ဘာဂြာ ကောငျးကောငျးစပေးလိုကျသညျ၊ သူ့စိတျထဲမှာ တခုခုတော့ မှားနသေညျဟု ထငျမိသျောလညျး ဘာမှနျး သခွောမသိ၊ စောကျဖုတျအနံ့နှငျ့ အရသာက သူ့ဦးနှောကျကိုလညျး တှေးချေါစဉျးစားဆငျခွငျသညျ့အလုပျကို ခန အနားယူခိုငျးထားလိုကျတာလညျးဖွဈနိုငျသညျ၊ ဘာမှ တှေးလို့မရ၊ လြှကျကောငျးကောငျးနှငျ့ စောငျ့ဖုတျတပွငျလုံးနှငျ့ ပေါငျတှငျးသားလေးတှပေါ ရကျပွဈလိုကျမိသညျ၊ စောကျစလေ့ေးနရောကို လြှာထိပျဖွငျ့ထိုးထိုးဆှရငျးက စောကျဖုတျနူတျခမျးတှနျ့တှနျ့လေးတှကေိုပါ ဆှဲစုပျလိုကျတော့ နိုငျနီုငျ သူ့ခေါငျးကိဆံပငျတှကေို ဆှဲဆုပျကိုငျရငျး တခြီပွီးသှားခဲ့ရသညျ။
ထိုအခါမှာတော့ ဦးအောငျအောငျဆှေ၏ လီးကွီးမှာလညျး မတရားကို တောငျ့တငျး နပွေီ ဖွဈရာ သူ့ပုဆိုးကို ဖွညျခရြငျး နိုငျနိုငျ့ ပေါငျနှဈလုံးကွားမှာ နရောယူလိုကျသညျ၊ နိုငျနိုငျတယောကျ တခြီသာပွီးသှားသညျခုထိ အိပျမကျလို့ထငျနသေေးလားမသိ အဲလောကျတောငျ ဇိမျခံတဲ့ကောငျမလေး ကောငျးကောငျးလိုးထညျ့လိုကျအုနျးမယျဟု စိတျကူးနှငျ့ ဦးအောငျအောငျဆှေ တယောကျ၊ သူ့လီးကွီးကို အဖုတျဝမှာ စမျးတရေ့ငျး အသာဖိသှငျးခလြိုကျလတေော့သညျ။ ..အာ့..အီး..အမေ့… ထိုအခါကမြှ ညီးသံထှကျလာတော့သညျ၊ ထိုညီးသံကို ကွားလိုကျရသောခန ဦးအောငျအောငျဆှေ နညျးနညျးကွောငျသှားသညျ၊ ဟငျ နိုငျနိုငျ့အသံမဟုတျပါလား၊ သို့ပမေဲ့ သူ့လီးက အဖုတျထဲ ဒဈမွုပျနပွေီ၊ ဒီလိုအခြိနျမှာတော့ ဘယျယောကျြားမှ နောကျပွနျဆုပျမညျမထငျတော့၊ သူက ရှကေို့သာတိုး၍ လီးတခြောငျးလုံးဝငျအောငျဖိသှငျးခလြိုကျသညျ။
..ဖှတျ…ဗြိ… ..အား….. ညနခေငျး အိဖွူက စာရငျးတှပေိတျနသေဖွငျ့ အလုပျရှုတျနပွေီး နိုငျနိုငျ့ကို ညကမြှ ငါနငျ့လာချေါမယျဟု ပွောထားသဖွငျ့ နိုငျနိုငျကလညျး အေးဆေးပါ ငါဒီနားဟိုနား ရှောကျသှားလိုကျအုနျးမယျဟု ပွောထားခဲ့လသေညျ။ နိုငျနိုငျတယောကျ ဟျောတယျပွနျရောကျတော့ သူ့သူငယျခငျြးတယောကျက သူရောကျနတေယျကွား၍ လှမျးဖုနျးဆကျထားသညျ၊ သူက ဖုနျးပွနျချေါတော့ သူ့ကို လာချေါမညျ၊ တခုခု ကြှေးမညျ ရုပျရှငျသှားကွညျ့ကွမညျဟု အစီအစဉျဆှဲသညျ၊ အငျး အိဖွူကို နောကျမှ ပွောတော့မယျဟု ဆုံးဖွတျကာ လာချေါသော သူ့သူငယျခငျြးနှငျ့လိုကျသှားခဲ့လသေညျ။ ရုပျရှငျကွညျ့၊ စားသောကျ၊ စကားတှပွေောနှငျ့ တျောတျောညနကျမှ သူ့သူငယျခငျြးက ဟျောတယျရှမှေ့ာ ပွနျလာခပြေးသှားခဲ့လသေညျ၊ နိုငျနိုငျလညျး မနကျကမြှ အိဖွူကို ပွောပွတော့မညျဟု တှေးကာ သူ့အခနျးရှိရာသို့တကျလာခဲ့လသေညျ၊
သူ့အခနျးတံခါးကို သော့ဖှငျ့ပွီး တံခါးကို တှနျးလိုကျသညျနှငျ့အခနျးထဲမှ အသံက သူ့လကျတှကေို တုနျ့ဆိုငျးသှားစခေဲ့သညျ၊ ဟငျ၊ ဘယျသူတှလေဲ၊ သူခကျြခွငျးတံခါးကို ပွနျစလေို့ကျသညျ၊ သို့သျောလညျး အဆုံးထိမပိတျပဲ နညျးနညျးလေးခနျြထားပွီး အသံကို နားနှငျ့ကပျနားထောငျလိုကျမိသညျ၊ လိငျဆကျဆံနကွေတဲ့အသံ၊ အဲဒါကတော့ ဘယျလိုမှ မမှားနိုငျ၊ အရှိနျရပွီး ကောငျးခနျးရောကျနပွေီ၊ သူ့ခေါငျးထဲ မှာ ခကျြခငျြး တှေးမိတာက သူ့အခနျးကိုလာကွမှာ သူ့သူငယျခငျြး အိဖွူရယျ၊ သူ့လကျရှိဘဲကွီး ဦးဦးအောငျရယျ၊ တကယျလို့သူတို့ နှဈယောကျသာဆိုရငျတော့ ၊ ယောက်ခထီးနဲ့ ခြှေးမပဲ၊ အီး၊ အတှေးနဲ့ပငျ နိုငျနိုငျ့အဖုတျလေး ဖောငျးသှားခဲ့ရသညျ၊
အရညျလေးတောငျ စို့လာရ၏၊ ဟငျး အိဖွူတကောငျ အေးပီအေးရကျနဲ့၊ နောကျဆုံးကတြော့ ဒီလိုပါလားဟု တှေးလိုကျမိလသေညျ။ ဒါဆိုအခု သူဘာလုပျရမှာလညျး ၊နိုငျနိုငျတယောကျ အခနျးတံခါးဝမှာရပျပွီးတှဝေနေမေိတော့သညျ။ ဦးအောငျအောငျဆှနှေငျ့ အိဖွူတို့ နှဈယောကျစလုံး ကိုယျနှငျ့ ခဈြပှဲဝငျနတော ဘယျသူလညျးဆိုတာ သိနကွေပွီ။ အခုခြိနျမှာတော့ ဘယျသူမှ ရပျလိုကျကွဖို့လညျးမစဉျးစား၊ အထူးသဖွငျ့ ဦးအောငျအောငျဆှေ၊ သူက အိဖွူခါးကလေးကို တငျးတငျးကပျြကပျြ ဆုပျကိုငျထားသညျ။
သူ့စိတျထဲမှာ အရငျကလညျး အိဖွူကို လုပျလိုကျရလြှငျ ဆိုတာ ခနခနပျေါလာဖူးသညျ။ ကိုယျ့ခြှေးမ မို့မကောငျးပါဘူးလဟေု စိတျကို ဖိနှိပျခြိုးနှီမျထားခဲ့ရသညျ။ အခုတော့ ကုတငျပျေါမှာ ခြှေးမခြောလေး အဖုတျထဲ လီးကွီး ထညျ့ကာ အားရပါးရလုပျနရေပွီ မဟုတျလား ၊ စိတျက ပိုတောငျ တကျကွှလာသညျ။ အိဖွူကလညျး သူ့ တသကျတာမှာ တခြောငျးထဲသာ ကွုံဖူးသူ၊ ခုတော့ သူ့ယောကျြားနှငျ့ အကိုငျအတှယျ မတူ၊ အတှအေ့ကွုံလညျး ရငျ့ကကျြနသေူ ယောက်ခမ ကွီး၏ ပိုငျပိုငျနိုငျနိုငျ ဆောငျ့ခကျြတှအေောကျမှာ ထူးကဲတဲ့ အရသာကို ခံစားနရေတာမို့ ဦးအောငျအောငျဆှရေဲ့ ကြောပွငျကွီးကို တငျးတငျး ပွနျဖကျရငျး သူ့ဖငျကလေးကို ကွှကာကွှကာ ပွနျကော့ပေးနမေိလပွေီ။
ခုမှတော့ မထူးတော့ပွီ မလား။ အိဖွူတယောကျ ကိုယျလေး တုနျတကျကာ ကာမ အရသာအထှတျအထိပျရောကျသှားတော့ ဦးအောငျအောငျဆှကေို တငျးတငျးဖကျထားရငျးက သူ့လကျသညျးလေးတှနှေငျ့ ဦးအောငျအောငျဆှေ ကြောပွငျကို ကုတျခွဈမိသညျ့အပွငျ၊ ဦးအောငျအောငျဆှေ၏ ပုခုံးကိုပါသူ့ပါးစပျဖွငျ့ ကိုကျဆှဲမိလိုကျလသေညျ။ ဦးအောငျအောငျဆှကေ အိဖွူအပွီးမှာ လေးငါးဆယျခကျြဆကျညှောငျ့ ပေးလိုကျသေးသညျ။ ပွီးမှ သူ၏ မာတငျးနသေေးသော လိငျတနျကွီးကို အိဖွူ စောကျခေါငျးတှငျးထဲမှာ စိမျထားရငျး၊ အိဖွူစောကျခေါငျး အတှငျးသားမြား၏ ရှစိရှစိလှုပျရှားနသေညျကို အရသာခံနမေိသညျ။ အိဖွူ ကိုယျလုံးလေး တောငျ့တငျးနရောမှ ပြော့ကသြှားသညျ့အခါ ဦးအောငျအောငျဆှေ က အိဖွူ ဆံပငျလေးတှကေို မှောငျထဲမှာပငျစမျး၍ ပှတျသတျပေးနလေသေညျ။ အိဖွူတယောကျကတော့ ရှကျလှနျးလို့ အသံလညျးမထှကျ၊ ခေါငျးကိုသာ ဦးအောငျအောငျဆှေ၏ ရငျဘတျမှာ တိုးကပျဖိ ပွီးဖှကျထားလသေညျ။
အိဖွူ၏ အဖုတျထဲမှာ မာတငျးနသေေးသညျ့ ဦးအောငျအောငျဆှေ၏ လိငျခြောငျးကွီး အတှအေ့ကွုံကလညျး အိဖွူအတှကျ ထူးဆနျးနသေညျ။ သူယောကျြား ကိုမြိုးဆှေ ဆိုလြှငျ တခါတလေ သူ အရှိနျရတုနျး သုတျရညျတှေ ထှကျပွီး ပွီးသှား ခါ လိငျတနျကွီးပြော့ခှေ သှားတတျသညျ။ တခါတလတေော့လညျး ပွိုငျတူ ကာမ အရသာ အထှတျအထိပျသို့ရောကျလရှေိ့ပါသညျ။ သို့သျောလညျး အိဖွူပွီးသှားခြိနျ မှာ ကိုမြိုးဆှေ၏ လိငျတနျကွီးက မာဆဲ ရှိနသေညျ့အခြိနျမြိုး မကွုံဖူးခဲ့ခွေ။ ထို့ကွောငျ့လညျး အိဖွူ ပွီးလို့ သူ့စောကျခေါငျးတှငျးက အသားနုတှကေ အထိမခံနိုငျလောကျအောငျ ဖွဈနခြေိနျ မှာ ဦးအောငျအောငျဆှေ ၏ မာတငျးကာ အကွောတှေ ဖုထ နသေညျ့လိငျတနျကွီးဖွငျ့ ပှတျဆှဲလိုကျတိုငျး အိဖွူခမြှာ တုံကနဲ ကွကျသညျးတှပေါ ထသှားရသညျ။ ထိုအရသာမြိုးကို အခုမှ အိဖွူခံစားဖူးလိုကျရသညျ။ သို့သျောလညျး ကာမ အထှတျအထိပျရောကျသှားပွီးသညျနှငျ့ ထုံးစံအတိုငျး အသိစိတျဝငျလာတော့ ကိုယျ့ယောကျြား အဖေ နှငျ့ လိငျဆကျဆံမိသညျ ဆိုသညျ့အသိက လညျး သူ့ကို တုနျလှုပျခွောကျခွားစသေညျသာ မက၊ ရှကျရှံ့ခွငျးလညျး ဖွဈစခေဲ့သညျ။
သူ့ဘဝတလြှောကျလုံးမှာ အဲလိုမြိုးလညျး တခါမှ မဖေါကျပွနျခဲ့ဖူးဘူး ဆိုတော့ နောငျတ လညျးရမိသညျ၊ အခု နေ ထပွီး ကိုယျ့ထမိနျ၊ အတှငျးခံဘောငျးဘီ တှရှောပွနျဝတျရမှာ ဦးအောငျအောငျဆှကေို ဘယျလိုမကျြနှာခငျြးဆိုငျရမလညျး ၊မတှေးတတျသဖွငျ့ အမှောငျထဲမှာပငျ ဦးအောငျအောငျဆှကေို အတငျးဖကျထားမိခွငျးဖွဈလသေညျ။ ဦးအောငျအောငျဆှေ ၏ လကျမြားက အိဖွူဆံပငျလေးတှကေို ပှတျပေးနရေငျးက အောကျကို ရှလေ့ာပွီး အိဖွူ ဘလောကျအင်ျကြီနှိပျကွယျသီး တှကေို တဖြောကျဖြောကျဖွုတျလာတော့ အိဖွူ ဘာလုပျရမှနျးမသိ ဖွဈသှားသညျ။ ..အို..ဟငျ့အငျး..ဟငျ့အငျး.. ပါးစပျက အသံတိုးတိုးလေး ထှကျသှားပွီး ဦးအောငျအောငျဆှေ၏ လကျတှကေို လှမျးဖိတှနျးလိုကျမိသညျ။ ဦးအောငျအောငျဆှကေ အိဖွူလကျကလေးကို ပွနျဖမျးဆုပျကိုငျလိုကျပွီး ခေါငျးကိုငုံ့ကာ အိဖွူလညျတိုငျလေးကို နမျးလိုကျသညျ။
သူ့အဖုတျထဲမှာ မာတောငျ တောငျ့တငျးနသေော လိငျခြောငျးကွီးကို စိမျထားခံရရငျးမှ လညျတိုငျလေးကို စိုစှတျစှတျအနမျးခံလိုကျရတော့ အိဖွူကွကျသညျးတှထေသှားရပွနျသညျ။ နောကျ တော့ ဦးအောငျအောငျဆှေ၏ လြှာကွီးက အိဖွူလညျတိုငျမှ တဆငျ့ မေးရိုးလေးတလြှောကျရကျလာခဲ့သညျ။ ခေါငျးအတငျးငုံ့ထားသော အိဖွူမကျြနှာလေးကို ဆှဲမကာ အိဖွူနူတျခမျးအစုံကို ငုံစုပျတာခံလိုကျရသညျ။ အိဖွူ၏ ခန်ဓာကိုယျက အလိုလို တုနျ့ပွနျလာပွီး ပါးစပျလေးကို ဟ ပေးလိုကျမိသညျ။ ဦးအောငျအောငျဆှေ၏ လြှာကွီးက အိဖွူပါးစပျထဲ တိုးဝငျလာပွီး အိဖွူလြှာလေးကို ပှတျတိုကျလိုကျတော့ ၊ ဘယျလို အကွော တှဆေကျနမှေနျးမသိ၊ အိဖွူ ရဲ့ စောကျခေါငျး အတှငျးသားလေးတှေ ယားကြိကြိ ဖွဈသှားရသညျ။ ဘယျက ဘယျလို အိဖွူတယောကျ ဦးအောငျအောငျဆှေ လညျဂုတျကို တှယျဖကျ ကာ တုနျပွနျအနမျးတှေ ပေးနမေိသညျမသိ။
ဦးအောငျအောငျဆှေ ၏ ကြှမျးကငျြလှသော လကျတှကေ အိဖွူ ဘလောကျအကြီ ကွယျသီးတငျမက အိဖွူကြောနောကျက ဘရာဇီယာဂြိတျတှကေိုပါ ဖွုတျပွီးနလေပွေီ။ ဖောငျးအိတငျးနသေညျ့ အိဖွူ နိူ့လုံးလေးတှကေ ဦးအောငျအောငျဆှေ လကျဖဝါးအောကျမှာ အဖဈြအညှဈ အဆုပျအနှယျ ခံနရေခြိနျမှာ အိဖွူတယောကျ အရှကျကို မနေ့လေပွေီ၊သူ၏ တငျပါးလေးကို ကော့ကာကော့ကာ ဖွငျ့ဦးအောငျအောငျဆှေ၏ ငွိမျနသေော လိငျတနျကွီးကို ဆှပေးမိလသေညျ။ ထိုအခါကမြှ ဦးအောငျအောငျဆှကေ အနမျးကို မခှာပဲ၊ သူ့လကျဖဝါးနှဈဘကျကို အိဖွူတငျပါးလုံး အောကျသို့ တဖကျဆီ ထိုးသှငျးကာ ဆှဲမ ပွီး အားရပါးရဆောငျ့လတေော့သညျ။ ..စှတျ..ဖတျ..ဖတျ.. ..အ..အငျ့….အီး……. အိဖွူဒီတခါတော့ ပါးစပျမပိတျနိုငျတော့ တအိအိ နှငျ့ ငွီးညူ မိလောကျအောငျကို အရသာကောငျးကောငျးခံစားနရေလတေော့သညျ။
ဦးအောငျအောငျဆှကေလညျး ဒီတခါတော့ မီးကုနျယမျးကုနျဆောငျ့လရော မြားမကွာမှီပငျ နှဈယောကျစလုံး တငျးတငျးကွပျကွပျ ပှဖေ့ကျလိုကျကွကာ ကာမအရသာအထှတျအထိပျသို့ ပွိုငျတူ ရောကျရှိသှားကွလတေော့သညျ။ အိဖွူ မှာ သူ့စောကျဖုတျတှငျးသို့ တဒုတျဒုတျ ပနျးထုတျလိုကျသော ဦးအောငျအောငျဆှေ၏ လရညျမြားကို နှေးကနဲ နှေးကနဲ နအေောငျခံစားလိုကျရလတေော့သညျ။ ဒီတခါ တော့ ဦးအောငျအောငျဆှေ က အနားယူရငျး အိဖွူ ၏ မကျြနှာအနှံ့ကို အမွတျတနိုးနမျးရှုံ့လရော အိဖွူကလညျး ဦးအောငျအောငျဆှကေို ပွနျလညျဖကျရမျးနမျးရှုံ့ပေးမိလတေော့သညျ။
ဦးအောငျအောငျဆှကေ အခုမှ နိုငျနိုငျ့ကို သတိရသှား၏ သို့သျောလညျး အိဖွူကို လုပျရတာ မဝသေးတော့ မပွနျစခေငျြသေးသဖွငျ့၊ အောကျထပျဆငျးပွီး အကွံအဖနျလုပျဖို့ စဉျးစားလိုကျလသေညျ။ ..သမီး အိဖွူ ခနလေးနျော ဖဖေေ ပွနျလာခဲ့မယျ ဘယျမှ မသှားနဲ့အုနျး.. အိဖွူက အသံမထှကျ ခေါငျးကိုသာငွိမျ့ပွသညျ။ ဦးအောငျအောငျဆှကေ လုံခညျြကောကျဝတျပွီး အခနျးပွငျကို ထှကျလာကာ အောကျထပျသို့ဆငျးလာခဲ့လသေညျ။ သူ့စိတျထဲမှာတော့ နိုငျနိုငျပွနျလာရငျ အောကျထပျက ကောငျလေးတှကေို သူ့အခနျးပွောငျးပေးထားသညျဟု ပွောရရငျကောငျးမလား ဟု စဉျးစားလာခဲ့သညျ။ သို့သျောလညျး ဟျောတယျလျောဘီ တှငျး ဆိုဖာပျေါတှငျထိုငျ၍ အခနျးထဲမှာ ဖှငျ့ထားသော တီဗီထိုငျကွညျ့နသေညျ့ နိုငျနိုငျ့ကို တှလေို့ကျရတော့ ပါးစပျအဟောငျးသားဖွဈသှားရ၏။ ..ဟငျ နိုငျလေး ပွနျရောကျနတေယျ..ကွာပွီလား ရောကျနတော.. ..ဟငျ့ ..ဦးတို့ အရှိနျ အမွငျ့ဆုံးရောကျနတေဲ့အခြိနျတုနျးကပေါ့..
ခိခိ..အဲဒါကွောငျ့ တံခါးပှငျ့သှား တာတောငျမသိလိုကျဘူးမလား.. ..အငျးဆောရီးပဲ နိုငျလေးရယျ.. ..အမျမယျ ဆောရီးမနပေါနဲ့ ရပါတယျ..ဒါနဲ့ ဦးတို့က ဖွဈနတော ဘယျလောကျကွာပွီလဲ..ခဈခဈ. နိုငျက နိုငျ့သူငယျခငျြးကို ကြောငျးတုနျးက လိုရိုးရိုးကွီးလေးမေ မှတျနတောခဈခဈ.. ..နိုငျလေး ကို ဦးပွောရငျလညျးယုံပါ့မလား..အခုဟာက ပထမဆုံးအကွိမျပဲ… ဦးအောငျအောငျဆှကေ ဖွဈပကျြပုံကို ရှငျးပွလိုကျသညျ။ နိုငျနိုငျ တယောကျ နားထောငျရငျး အဖုတျမှ အရညျတှတေောငျ စို့လာသညျ။ သူနှငျ့ သူ့ပထှေးတုနျးက အဖွဈအပကျြတှကေိုတောငျ မကျြစထေဲ့ပွနျပျေါ လာခဲ့ရသညျ။ …အငျး အဲတော့ အိဖွူက နိုငျပွနျလာတာသိလား.. ..ဘယျသိအုနျးမလဲ အခုအခနျးထဲမှာ အိပျကနျြခဲ့တယျ.. ..နိုငျဘယျလိုလုပျပေးရမလဲ ဦးပွနျတော့မှာလား..
.အဟီး နိုငျလေး ဦးကို စိတျမဆိုးဘူးမလား.. ..ဘာလို့ဆိုးရမှာလညျး.. ဦးကို နိုငျက ပိုငျတာမှ မဟုတျတာ ..ခဈခဈ..နိုငျဆိုလိုခငျြတာက ဦးပွနျတော့မယျဆိုရငျ နိုငျက အခုမှ ရောကျလာသလိုနဲ့အခနျးကိုပွနျလိုကျမယျလေ..မသိခငျြယောငျဆောငျမှာပေါ့. ..အဲဒါပွောမလို့ နိုငျလေးဦးကို စိတျဆိုးမလားဆိုတာ.. ဦး အိဖွူကို ခဈြလို့မဝသေးဘူး အခှငျ့အရေးရတုနျးဆကျခဈြခငျြလို့. ..ဟောတော့ ခဈခဈ..ဦးကတော့ လေ တကယျပဲ၊ ခဈခဈ ဒါဆိုနိုငျက ဘာလုပျပေးရမှာလဲ.. ..နိုငျလေးကို တခနျးပေးမယျကှာ ဒီညတော့ အဲဒီအခနျးမှာပဲ အိပျလိုကျ၊ ဦးက အိဖွူဆီပွနျသှားပွီးပွောလိုကျမယျ.. နိုငျလေးက ဟျောတယျရီဆကျရှငျးကို ဖုနျးဆကျပွီးမကျဆထေ့ားခဲ့တယျလို့.. ဒီညပွနျလာမအိပျတော့ဘူး သူငယျခငျြးတယောကျအိမျမှာအိပျမယျလို့… ..။
ဦးက တျောတျောဉာဏျထှကျတယျနျော ဒါမြိုးဆို ခဈခဈ..နိုငျ့ကိုလညျးမမရေ့ဘူးနျော ဒါပဲ ဟငျ့.. ထိုဖွငျ့ ဟျောတယျမှာ အခနျးကိစ်စ နိုငျနိုငျ့ကို စီစဉျပေးပွီးတာနှငျ့ ဦးအောငျအောငျဆှေ တယောကျ အိဖွူရှိရာသို့ အပွေးလေး ပွနျလာခဲ့ပါတော့သညျ။ ..ဖွူလေး.. ..အို့..ကိုရီး.. လနျ့လိုကျတာ ကိုရီးကလညျး… ဘာလုပျမလို့လဲ ဒီထဲမှာ… …ဖွူလေးကို သတိရလို့ပေါ့..မခဈြရတာကွာပွီလေ… ..အို..မဖွဈနိုငျတာ ..တျောကွာ မမေေ ဝငျလာအုနျးမယျ.. ..မလာပါဘူး…အခုသူ ဘုရားရှဈခိုးနတေယျ..နောကျ ပုတီးစိတျအုနျးမှာ၊ နာရီဝကျလောကျကတော့ အနညျးဆုံးပဲ… ..ဟငျ့အငျး ကိုရီးရယျ…မီးလနျ့တယျ…အို့..အဲဒီလကျကွီးကလညျးနျော..ခကျတော့တာပဲ.. အထကျပါစကားပွောသံမြားမှာ ယောက်ခထီးကွီး ဦးအောငျအောငျဆှနှေငျ့ ခြှေးမခြောလေး အိဖွူသဇငျ တို့ ၊ အိဖွူသဇငျ၏ အိပျခနျးထဲ မှာ ပွောဆိုနကွေခွငျး ဖွဈလသေညျ။ သူတို့ နှဈယောကျ၏ အမှတျမထငျ ပဲ နိုငျနိုငျ့ ဟျောတယျ အခနျးမှာ မှားယှငျးခဲ့ကွပွီးနောကျ သောကျလို့ ငတျမပွနေိုငျတဲ့ ဆားငံရညျထကျကောငျးသော အရာ ဆိုတော့ ဆကျခါ ဆကျခါမှားယှငျးခဲ့ကွလသေညျ။
ယခငျက အိဖွူက ဦးအောငျအောငျဆှကေို ဖဖေေ ဟုချေါခဲ့သျောလညျး သူတို့ ခငျြး တှလြေှ့ငျ ကိုရီး ဟုချေါရနျ ဦးအောငျအောငျဆှကေ ပွောထားသဖွငျ့ အိဖွူ က အသုံးအနူနျးကို ပွောငျးလဲခဲ့လသေညျ။ တကယျတော့ နိုငျနိုငျပွနျသှားပွီး နောကျ အိဖွူက ဦးအောငျအောငျဆှကေို ရှောငျနခေဲ့သျောလညျး၊ အံတိုနပွေီ ဖွဈသော ဦးအောငျအောငျဆှေ ၏ လကျမှ အိဖွူ လှတျဖို့ ဆိုတာ ဘယျလိုမှ မဖွဈနိုငျခဲ့ပေ။ နှဈယောကျထညျး ရှိနစေရေနျ အခှငျ့အရေးမြားမရ ရအောငျဖနျတီးကာ အိဖွူကို အရှကျကုနျ ပွီး ကာမအရသာ နှဈသကျသှားသညျ အထိ စှမျးဆောငျ ပေးနိုငျ ခဲ့လရော၊ ခုတော့ ကိုရီးနှငျ့ မီး ဘဝသို့ပငျ ရောကျနခေဲ့ခွပွေီ။ သူတို့ နှဈယောကျ၊ နောကျဆုံးအကွိမျ၊ နှရောသီ အပနျးဖွအေိမျလေးသို့သှားရောကျပွီး တနလေုံ့းအခဈြတလငျးချေါ ခဲ့ကွသညျမှာ တပတျလောကျရှိ ခဲ့ပွီဖွဈလသေညျ၊ ထိုအခါပွီးတော့ အခုခြိနျထိ နှဈယောကျထညျးတှဖေို့ အခှငျ့အရေးကလညျးမရ၊ အိမျမှာလညျး နတေို့ငျးတှနေ့ရေပွီး၊ မွငျသာမွငျ မကွငျရဆိုတော့ ဦးအောငျအောငျဆှေ တယောကျ အလှနျတငျးနရေသညျ။
ထို့ကွောငျ့လညျး စနနေတေ့ရကျ၊ အိမျမှာ ခိုငျးသညျ့လူမြားအလဈ၊ သူ့မိနျးမ ဘုရားခနျး အဝငျ၊ ဦးအောငျအောငျဆှေ တယောကျ၊ သူ့သားနှငျ့ခြှေးမ အိပျခနျးသို့ အသာဝငျခဲ့ခွငျး ဖွဈလသေညျ။ မနကျအိပျယာထ၊ ရမေိုးခြိုးပွီး ကိုယျမှာ မကျြနှာသုတျပုဝါ အကွီးကို ပတျ၊ ခေါငျးမှာလညျး လြှျောထားသော ဆံပငျတှကေို ဆံပငျအခွောကျခံစကျနဲ့ မှုတျပွီးကာစ မို့ ဖားယားခြ လြှကျ မှနျတငျခုနျရှထေို့ငျကာ မကျြနှာလိုးရှငျး လေးပှတျနစေဉျ၊ အနောကျမှာ ရုတျတရကျရောကျလာသော ဦးအောငျအောငျဆှေ ကွောငျ့ အိဖွူ တယောကျထိတျကနဲ ဖွဈသှားရခငျြးပငျ။ ..ကိုရီး အခနျးတံခါး.. ..ဘာမှ စိတျမပူနဲ့ ကိုရီး ဂလနျ့သခွောခခြဲ့တယျ.. ဦးအောငျအောငျဆှကေ အိဖွူ၏ မခွောကျတခွောကျ ဆံပငျတှကေို ဂုတျနားလေးမှ ဖယျရငျးပုခုံးလေးကို ငုံ့ နမျးလိုကျသညျ။
အိဖွူယားလို့တခကျြတှနျ့သှားသညျ။ သို့သျောလညျး ခေါငျးလေး လှညျ့ကွညျ့လာသော အိဖွူ ၏ နူတျခမျးလေးတှကေို ငုံစုပျတာ ခံလိုကျရတော့ အိဖွူတယောကျလညျး ဦးအောငျအောငျဆှေ ၏ လညျဂုတျကို တှဲလဲခိုပွီး တုနျ့ပွနျနမျးလာတော့သညျ။ ဦးအောငျအောငျဆှကေ အိဖွူကို ဂြိုငျးနှဈဖကျအောကျမှ အသာ မလိုကျရာ အိဖွူတယောကျ မတျတတျထလြှကျပါလာတော့သညျ၊ နှဈဦးသား တတျမတျတမော နမျးနကွေစဉျမှာပငျ ဦးအောငျအောငျဆှကေ အိဖွူကိုယျမှာ ပတျထားသော မကျြနှာသုတျပုဝါကွီးကို ဆှဲခြှတျခလြိုကျလသေညျ။ အိဖွူ၏ ဖောငျးအိတငျးနသေော နို့နှဈလုံးကို ဦးအောငျအောငျဆှေ သူ့မကျြနှာကွီးဖွငျ့ ပှတျသတျရငျး ထောငျမတျလာသော နို့သီးခေါငျးကလေးမြားကို လညျး တပွှတျပွှတျစုပျပေးနပေရော အိဖွူခမြာ ဒူးမြားညှတျခှမေကသြှားအောငျ မနညျးထိနျး ၍ဦးအောငျအောငျဆှေ၏ လညျဂုတျကွီး ကို တှဲလှဲခိုထားရပတေော့သညျ။
ဦးအောငျအောငျဆှကေ နို့စို့လိျု့ဝသှားတော့ အိဖွူ မခြီပွီး ကုတငျပျေါတငျလိုကျတော့သညျ။ ..ဖွူလေး အဲလို ရခြေိုးပွီးကာစ လတျလတျဆပျဆပျ ကလေးကို အကိုရီးက တကိုယျလုံးရကျပွဈခငျြတာကှ.. .ဟငျ့..အခြိနျ သိပျမရှိဘူးနျော ကိုရီး၊ မီးလနျ့တယျ၊ တျောတျော မမေေ တံခါးလာခေါကျနရေငျ ပွဿနာတကျနမေယျ.. ..အငျးပါကှာ ဖွူလေး အဖုတျလေး လတျလတျဆပျဆပျလေးကို ပဲ ရကျသှားတော့မယျ ဒါဆိုလညျး… ဒါကလညျးတကယျတော့ အပွောပါ၊ ဦးအောငျအောငျဆှတေယောကျ အိဖွူ အဖုတျလေးကို အားရပါးရ ရကျပွီးခြိနျမှာ အိဖွူက ဒီတိုငျးဘယျပွနျလှတျတော့မညျနညျး။
သူ့လကျကလေးတှကေ ဦးအောငျအောငျဆှေ ကောငျကွီးကို ဆုပျကိုငျပှတျနပွေီး သူ့ဟာလေးထဲ အတငျးထညျ့ခိုငျးနသေညျ။ ဦးအောငျအောငျဆှကေ လညျး အရငျစုပျပေးမှ ထညျ့ပေးမညျဟု ဆိုသဖွငျ့ ကုတငျပျေါလေးဘကျထောကျပွီး ကုနျးစုပျပေးရှာသညျ။ လိုကျလညျးလိုကျသညျ့ ခြှေးမနှငျ့ ယောက်ခထီး။ နောကျဆုံးတော့ ဦးအောငျအောငျဆှေ တယောကျ၊ သူ့သားလငျမယားအိပျသညျ့ ကုတငျကွီးပျေါမှာ သူ့ခြှေးမခြောလေး အိဖွူသဇငျကို လေးဘကျထောကျ ခိုငျးကာ အနောကျမှ လုပျ ရငျး ကာမ အရသာ အထှတျအထိပျ သို့ နှဈဦးသား ရောကျရှိသှားရလတေော့သညျ။
ကိုရီး… ဒုက်ခ တော့ရောကျကုနျပွီထငျတယျ.. …ဟငျ ဘာဖွဈလို့လညျး ဖွူလေး… …မီး မှာ ဟိုဟာ ဒီလ မလာဘူး နောကျကနြတေယျ…. ..ဟငျ ဟုတျလား၊ သခွောရဲ့လား ဖွူလေးရယျ… ..သခွောတယျ ထငျတာပဲ ကိုရီး မသခွောလညျးပဲ ဟုတျခဲ့ရငျ ဆိုတာ ပွောလို့ရမလား..မီးအရမျးကွောကျတာပဲ…ဟငျ့ဟငျ့..ရှတျ..အီးးးး ဟငျ့…ဟငျ့.. ..အို ဖွူလေးက လညျး ငိုမနပေါနဲ့ ..ကိုရီး စဉျးစားလိုကျပါအုနျးမယျ…. ခနျြဂီ လဆေိပျ၊ စကာင်္ပူ။ ..ဟော ..အခဈြကလေး ..မတှတေ့ာတောငျကွာလို့..လှလိုကျတာကှာ…. ..အငျး ..ကိုရောဘဲ တခါထဲ စလုံးနဲ့တညျ့လို့ထငျတယျ ဝလို့ ဖွူလို့၊ ဗိုကျတောငျနညျးနညျးရှဲလာတယျ၊ အိုဗာရှိတျဖွဈနပွေီနျော ဟငျး… ..ဟာကှာ အခဈြကလညျး ခုတလော အစားကောငျးနလေို့ပါ၊
ဟဲဟဲ..ခုလညျး ခဈြကလေး ရောကျတုနျး ရောကျလညျမယျဆို ပွီး ခှငျ့ယူထားတယျ၊ အလုပျမလုပျပဲနဲ့ အစားတှေ ပဲစားဖို့ကိနျးမွငျတယျ၊ အဟဈဟဈ.. ..ဖွူက မလညျခငျြပါဘူး ကိုနဲ့တှရေ့အောငျပဲလာခဲ့တာ၊ အခုတလော အလုပျကလညျးနညျးနညျးပါး၊ အဖကေလညျး နငျ့ယောကျြားမတှရေ့တာကွာပွီ သှားလညျပါလားတဲ့ ငါတို့ နှဈယောကျနဲ့ဖွဈပါတယျတဲ့။ မမေကေလညျး အငျး သူပွနျမလာတာကွာပွီ နငျလိုကျသှားအုနျးတဲ့ ခဈခဈ၊ သူ့သားတောငျသူ စိတျမခလြို့ ခြှေးမကို အတငျးလှတျနတော.. …ဟဲဟဲ ကိုကလညျးပွနျလာခငျြတာပေါ့ကှာ၊ အလုပျက ခှငျ့အကွာကွီးယူမရလို့ တပတျလောကျနဲ့လညျး ပွနျမလာခငျြဘူးလေ၊ အခု အခဈြလာတော့ ကိုယျက တပတျလောကျခှငျ့ယူမယျ အခဈြက တလလောကျနပွေီးမှ ပွနျ၊ ဟုတျလား.. စင်ျကာပူ က တကယျတော့ နှဈရကျလောကျလညျပွီးရငျ သှားစရာမရှိတော့ပွီ၊ မြိုးဆှတေယောကျကတော့ ငတျသမြှ ကို အတိုးခစြားလတေော့သညျ။ အိဖွူလညျး အကွိုကျတှေ့ နရေသညျ။
ကိုမြိုးဆှတေယောကျ စလုံးမှာ နတော ကွာတော့ လိငျကိစ်စ မှာလညျး တျောတျောလေး တိုးတကျလာတာကို တှရေ့သညျ။ အငျတာနကျထဲ တခြိနျလုံးသှားနလေို့လားမသိ။ တခါတလေ အိဖွူနှငျ့ အခဈြစခနျးဖှငျ့ပွီးရငျတောငျ ခနတဖွုတျကှနျပွူတာရှသှေ့ားထိုငျပွီး ကီးဘုတျ တဂြောကျဂြောကျနဲ့ ရိုကျနတေတျသညျ။ အိဖွူကတော့ မစပျစုခငျြသလိုပငျ၊သိပျလညျးစိတျတော့မဝငျစား။ သူ ရာသီလာနောကျကသြညျ့ကိစ်စလေး အစဉျပွသှေားတာကို ပငျ စိတျခမျြးသာနသေညျ။ တညတော့ ထုံးစံအတိုငျး သူနှငျ့ကိုမြိုးဆှတေို့ အခဈြစခနျးဖှငျ့ပွီး ပနျးတိုငျရောကျသှားတော့ ရဆေေးသနျ့စငျပွီးသူက ကုတငျပျေါတကျ စောငျအောကျဝငျတုနျး ကိုမြိုးဆှကေ ကှနျပွူတာရှမှေ့ာ တဂြောကျဂြောကျလုပျနသေညျ။ ခနနတေော့ ကိုမြိုးဆှေ အိမျသာထဲ ဝငျသှားတော့ ကှနျပွူတာ ဝငျးဒိုးကို သေးအောငျလုပျထားခဲ့သညျ။ အိဖွူက အသာထပွီး ဝငျးဒိုးကို ကွီးကွညျ့လိုကျသညျ။
ဗမာစာလုံးတှေ အတနျးလိုကျအတနျးလိုကျတကျတကျလာတာတှရေ့သညျ၊ အငျး ခပျြဆိုတာပဲနမှောပဲ၊ ကွညျ့ရတာ လူတှေ နဲ့စကားပွောနပေုံပဲ။ နာမညျတှကေလညျး ဘာနာမညျတှလေညျးမသိဘူး၊ တခုက တရုပျဖုနျးနာမညျ။ ညီဟှဟှေ ဆိုလား၊ စီးခရကျဘှိုငျးတဲ့၊ နောကျတယောကျက မခေဈြသူမောငျ ဆိုလား၊ဟငျ ကောငျမလေးမြားလား၊ မောငျဆိုတော့ ယောကျြားလေးနမှောပေါ့။ ဟငျ၊ ယောကျြားတှနေဲ့ ဘာလို့ ကိုမြိုးဆှကေ ခပျြလုပျနတောလညျး။ အိဖွူကွညျ့နတေုနျးစာတနျးလေးတှတေကျလာသညျ။ ..ကိုအိုဗာရှိသေးလား…. ..ကိုအိုဗာ အမွနျလာပါ..ကနြျောလိုငျးမကခြငျ.. အငျး ဘာတှလေညျးမသိပါဘူး၊ အိဖွူ ဝငျးဒိုးကို ခုနက ကိုမြိုးဆှထေားခဲ့သလို ပွနျထားလိုကျသညျ။ နောကျတော့ ကုတငျပျေါပွနျလှဲကာ စောငျခေါငျးမွီးခွုံအိပျနလေိုကျတော့သညျ။
အိဖွူ တို့ ဆီက ပွနျလာတော့ လမျးမှာ နိုငျနိုငျတယောကျ၊ ရထားပျေါမှာ အိပျစငျပါသညျ့ အတနျးမှ စီးလာခဲ့သညျ။ သူ့ နှငျ့မကျြနှာခငျြးဆိုငျမှာ အမြိုးသားကွီးတဦး၊ သူ့ဘေးမှာ က တက်ကသိုလျကြောငျး သားတဦးလိုကျပါလာခဲ့ကွသညျ။ ကောငျကလေးမှာ မောငျစောကွညျ ဟုချေါပွီး စကျမှုတက်ကသိုလျတကျနေ သူဖွဈလသေညျ။
အမြိုးသားကွီးကတော့ ပုတီးအလုံးကွီး မြားပါသော စိတျပုတီးကွီးကို သာ မကျြလုံးပိတျပွီး စိတျနေ လသေညျ။ မောငျစောကွညျ နှငျ့ နိုငျနိုငျ တို့ကတော့ ရထားထှကျပွီး တနာရီလောကျမှာပငျ ခငျမငျသှားကွတော့သညျ။ နိုငျနိုငျက ဘူတာရုံတှရေောကျလြှငျ စားစရာ တိုလီမှုတျစလေး တှကေို ဝယျ မောငျစောကွညျ ကို ပါ မြှကြှေး စကားတှတေပွောပွောနှငျ့၊ လိုကျလာခဲ့ကွလသေညျ။ ညနစေောငျးပွီးမှောငျလာတော့ အိပျဖို့ရာပွငျကွရလသေညျ။
အပျေါထပျမှ ဆှဲခရြသော အိပျစငျကို ဦးလေးကွီး အတှကျပေးလိုကျရပွီး သူတို့ထိုငျနသေော ခုံမြားကို ဆှဲဆနျ့လိုကျသဖွငျ့ အိပျယာဖွဈသှားသော နရောတှငျ နိုငျနိုငျ နှငျ့ မောငျစောကွညျတို့ နရောယူကွရသညျ။ နိုငျနိုငျကတော့ အတှအေ့ကွုံရှိနပွေီး လိငျကိစ်စ မှာ တကျကွှသူ တဦးမို့၊ ယခုလို တစိမျးကောငျလေး နှငျ့ ကပျရကျ အိပျရမှာနှငျ့။ ဖွဈနိုငျခွေ ရှိသော အကှကျတို့ကို မွငျမိပွီး ရငျခုံလာရသညျ။ သို့သျောလညျး သူ့လို အသကျကွီးကွီး အိမျထောငျသညျ မိနျးမ ကို မောငျစောကွညျလို တက်ကသိုလျ ကြောငျးသားလေးက စိတျဝငျစားပါ့မလားဟု တှေးရငျး ညနစေောငျးကထဲက မသိမသာ လလေ့ာနမေိသညျ။ မောငျစောကွညျ ၏ တခကျြတခကျြ ခိုးကွညျ့သော မကျြလုံးတှကေ သူ့ ရငျသား တှေ ပေါငျလုံးတှစေီ ရောကျရောကျလာ တာကို တှလေို့ကျရတော့ ဖွဈနိုငျခွရှေိသညျဟု တှေးထားလိုကျသညျ။ သို့အတှကျကွောငျ့လညျး ညအိပျယာဝငျတော့ အောကျခံမပါ ပဲ ထမိနျတထပျထညျး ဝတျ၊ အပျေါကလညျး တီရှပျကို အောကျက ဘရာဇိယာမခံပဲ ဝတျ ထားလိုကျသညျ။
သို့သျောလညျး ရထား လှုပျတော့ အရမျးခုံနမှော စိုးသဖွငျ့ အပျေါက ဆှယျတာတထညျထပျဝတျထားလိုကျရသညျ။ …ရထားက အရမျးခုံ တာပဲနျော၊ ငါတော့ မိုးလငျးရငျ အိပျယာပျေါမှာတောငျ ရှိပါတော့မလားမသိဘူး၊ အောကျပွုကပြွီ ခဈခဈ… ..ဟာ အနျတီက လညျး ကနြျောက ပိုဆိုးသေးတယျ၊ အဆောငျအိပျခနျးထဲမှာ အိပျရငျတောငျ မနကျကရြငျ ခေါငျးက ခွရေငျးဘကျရောကျနတေတျတာ၊ အဟီး..ကနြျော ခွထေောကျနဲ့ အနျတီ့ကို ကနျမိရငျ ကနျတော့နျော အဟားးး ကွို ကနျတော့ထားတာ.. …အောငျမလေးကှယျ ငါကလညျး အိပျလိုကျရငျ တုံး ကနဲပဲ၊ ဆငျနငျးသှားရငျတောငျ နိုးခငျြမှ နိုးမှာ၊ မငျးကနျတာလောကျကတော့ အပြော့ပေါ့… …ဟားဟား..အဲဒါကတော့ ကနြေျာ့အတိုငျးပဲ..အဟီး… ကောငျလေးက လညျး စကားချေါထားတဲ့ပုံက မဆိုးပါလား၊ ငလညျလေးပဲ လို့ နိုငျနိုငျ့စိတျထဲ တှေးနမေိသညျ။
တကယျအိပျယာဝငျကွတော့ တယောကျနှငျ့တယောကျက တတောငျလောကျတော့ ကှာဝေးပါသေးသညျ။ သို့သျောလညျး ရထားကပဲ တဝုနျးဝုနျးခုံလို့လား မောငျစောကွညျကပဲ တမငျရှလေ့ာတာလားမသိ တနာရီလောကျမှာ သူတို့ နှဈဦး ကိုယျခငျြးကပျလို့ ခွားထဲမှာ စောငျနှဈခုသာ ခွားတော့သညျ။ နိုငျနိုငျက မောငျစောကွညျဘကျကို ကြောပေးကာ ကှေးကှေးလေးအိပျနလေိုကျသညျ။ သူ့တငျပါးပျေါ မောငျစောကွညျလကျဖဝါးတှေ ရောကျလာတာ သိလိုကျပွီး ရငျထဲမှာ ပြျောသှားသညျ၊ အဟိ လာပွီ လာပွီ ပေါ့။ မောငျစောကွညျက လညျး လူသာငယျသညျ၊ ပညာက ခသေူမဟုတျ ဆိုသူပတေညျး။ လူပြို ပေါကျစဖွဈကထညျးက သူတို့ အိမျနီးခငျြး မုဆိုးမ တယောကျ၏ ပညာပေးမှုကွောငျ့ သာအိ တစိုစို ဖွဈနခေဲ့ရပွီး၊ အမြိုးသမီးကွီးတှေ ကို စိတျပိုလာနခေဲ့ရသူဖွဈရုံသာမက လကျတှေ့ အတှအေ့ကွုံကလညျး မနညျးတော့ပွီ။
သူ၏ အတှအေ့ကွုံမြားကို ပါးစပျအဟောငျးသားနှငျ့ သှားရညျတမြှားမြှား ကအြောငျ အဆောငျက သူငယျခငျြးမြားရှတှေ့ငျ ဖေါကျသညျခတြတျ သညျမှာလညျး သူ့ဝါသနာ။ နိုငျနိုငျ့ကို မွငျကထဲက ဖွဈနိုငျခွေ ရှိသညျဆိုတာ သူတှကျထားပွီးသား၊ ယောကျြားက ဗိုလျမူး ရှတေ့နျးမှာ အနမြေားသညျဆိုတော့ ပိုသခွောသညျ။ တောငျးတနမှောပဲ။ ဒါပမေဲ့ အဲဒါကလညျး အန်တရာယျ မြားသညျ။ အသှားမတျောတလုပျဆိုသလို၊ ဒုက်ခ ရောကျမှာလညျးစိုးသညျ။ ထုံးစံအတိုငျး စကွညျ့လို့ အခွအေနမေကောငျးရငျ ရှဆေ့ကျမတိုးနဲ့ပေါ့။ ဒါက မောငျစောကွညျရဲ့ အထာ။
မောငျစောကွညျလကျဖဝါးက စောငျအောကျက အသာလြိုဝငျပွီး နိုငျနိုငျ့ တငျပါးလုံးလုံးလေးပျေါတငျလိုကျပွီး မသိမသာ ပှတျပေးနတောကို ငွိမျခံနကေထဲက မောငျစောကွညျက မီးစိမျးကို တှနေ့ပွေီ၊ သူ့လကျဖဝါးတှကေို တငျပါးပျေါမှ အရှဘေ့ကျ ဘိုကျသားလေးပျေါရှလေို့ကျသညျ။ နိုငျနိုငျ့ဖငျလေးပိုကောကျလာသညျ၊ သူ၏ မာတောငျနသေော ကောငျကွီးနှငျ့ ထောကျမိနပွေီ။ မောငျစောကွညျက နိုငျနိုငျ့ဗိုကျသားလေးတှကေို တီရှပျအောကျမှ ပှတျနရေငျး အပျေါဖကျသို့တကျလာတော့။ ဘရာဇီယာဝတျမထားသော နို့ကွီးတှကေို သှားစမျးမိသညျ။
ဟိုကျ ထငျတာထကျတောငျ ဟော့နပေါလား၊ မောငျစောကွညျ ပျေါတငျပဲ ကွမျးတော့သညျ။ သူ့လကျဖဝါးတှနှေငျ့ နို့ကွီးတှကေို ဆုပျနှယျ၊ ထောငျမတျနသေော နို့သီးခေါငျးလေးတှကေို လှိမျ့ခြေ ပှတျသတျ လုပျပေးနလေိုကျသညျ။ နောကျ သူတို့ ခွုံနသေော စောငျနှဈထညျကို တထညျထညျး နှဈထပျဖွဈသှားအောငျလုပျလိုကျသညျ။ သူ့ပုဆိုးကတော့ ခါးမှာ ကှငျးလုံးတကျနပွေီ နိုငျနိုငျ့ ထမိနျကိုသာ နိုငျနိုငျ့တငျပါးကြျောအောငျ ဆှဲလှနျလိုကျသညျ။ အေးစကျပမေဲ့ အိနသေညျ့ နိုငျနိုငျ့ ဖငျလုံးကွီးကွားသို့ မောငျစောကွညျ၏ ပူနှေးနှေး ဒုတျကွီး လြှိုဝငျသှားသညျ။
ဟငျ့..အငျးးးးး..အငျး…. နိုငျနိုငျ့ဆီက ငွီးသံလေးထှကျလာခဲ့သညျ။ မောငျစောကွညျက သူ့ဒူးခေါငျးတဘကျကို နိုငျနိုငျ့ပေါငျလုံးနှဈခုကွားကို ထိုးထညျ့လိုကျတော့ အဆငျပွစေရေနျနိုငျနိုငျက လညျး သူ့ခွထေောကျတဖကျကို အသာ မွှောကျပေးလိုကျသညျ။ မောငျစောကွညျက ကိုယျလုံးကို အောကျအနညျးငယျလြှောခပြွီး ဖငျကို ကော့လိုကျတော့ သူ့လီးထိပျကွီးက နိုငျနိုငျ ၏ အရညျရှဲနပွေီဖွဈသော စောကျဖုတျဝသို့ လာထိတော့သညျ။ နိုငျနိုငျက အနောကျကို ပိုကော့ပေး၊ မောငျစောကွညျကလညျး အပျေါကို ကော့ထိုးလိုကျတော့ မောငျစောကွညျလီးကွီးက နှေးထှေးနူးညံ့ လှသော နိုငျနိုငျ့စောကျခေါငျးထဲ တိုးဝငျသှားတော့သညျ။
နှဈယောကျစလုံးက အတှအေ့ကွုံရှိကွသူမြားမို့ ခနလေး ဖွငျ့ သူတို့ နှဈယောကျမှာ တပေါငျကြျောပုံစံဖွငျ့ လိုးနကွေလပွေီ၊ နိုငျနိုငျက သူ့လကျကို နောကျပွဈပွီး မောငျစောကွညျ၏ ဖငျကို အတငျးဆှဲပွီး သူ့ကိုယျထဲ မောငျစောကွညျလီးကွီး ဝငျနိုငျသမြှဝငျအောငျ လုပျပေးလသေညျ။ ထိုပုံစံအတိုငျးလုပျနရေငျးမှ မောငျစောကွညျက အားမရလာတော့ သူ့လီးကွီးကို ပွနျခြှတျပွီး နိုငျနိုငျ့ကို ပကျလကျလှနျခိုငျးကာ ပေါငျနှဈလုံးကွားဝငျ၊ လှကွေီးထိုးပုံနှငျ့လုပျတော့သညျ၊ ရထား ခုံဆောငျ့နတောကလညျး သူတို့ အတှကျ အလှနျအဆငျပွနေတေော့သညျ။ နိုငျနိုငျ့နူတျခမျးဖူးဖူးတှကေို မောငျစောကွညျက ငုံစုပျတော့ နိုငျနိုငျက လညျး သူ့လြှာကလေး မောငျစောကွညျပါးစပျထဲ ပွနျထိုးထညျ့ပေးလိုကျသညျ။
အရှိနျတှရေလာကွတော့ သူတို့ နှဈယောကျ စလုံး အငမျးမရ တယောကျကို တယောကျ ဆှဲဖကျလိုးနကွေရငျး ကာမ အရသာအထှတျအထိပျကို ပထမဆုံးရောကျသှားကွရတော့သညျ။ …အား…ကောငျးလိုကျတာ အနျတီရယျ…. ..ဟငျး..မငျး လူဆိုးလေးနျော..သူမြားမှာ ယောကျြားရှိပါတယျ ဆိုတာကိုတောငျ အတငျးတကျလုပျတယျ၊ ခါထဲ.. ..အဟိ..အနျတီက လညျး မကွိုကျတာကွနတောပဲ၊ ဟီးဟီး… ခနလေးပါပဲ၊ နောကျတခြီ ပွနျစကွပွနျတော့သညျ။ နိုငျနိုငျ ဘူတာကွီးမှာ မခှဲခငျြခှဲခငျြနှငျ့ မောငျစောကွညျလေး နဲ့ ခှဲလာခဲ့ရသညျ။
ဖုနျးနံပါတျတှေ ဖလှယျ၊ ပွီး နောကျ အခှငျ့အရေးရလြှငျ ဆုံကွစို့ဟု၊ ပွောလာခဲ့ကွသညျ။ သူတို့နသေော အရာရှိရိပျသာ သို့ရောကျတော့ တညလုံး ရထားကလညျးခုံ၊ မောငျစောကွညျနဲ့ လညျးကဲထားသဖွငျ့ ကိုယျတှလေကျတှနော၊ အိပျခငျြလာသဖွငျ့ အဝတျတောငျမလှဲနိုငျပဲ အိပျပြျောသှားရသညျ။ တရေးနိုးလာတော့ အိမျမှာလညျး တယောကျထဲ ဆိုတော့ ရငျထဲ ဟာတာတာဖွငျ့ ပငျြး သလိုလို ၊ ရှော့ပငျထှကျရမှာတောငျ စိတျမပါတော့သဖွငျ့အိပျယာထဲ လှဲနတေုနျး၊ ..ကလငျး… ဖုနျးကမွညျလာလို့ကောကျကိုငျလိုကျတော့။ ..နိုငျလေးလား… ..ဟငျ ဖကွေီးလား ခုဘယျမှာလညျး.. …ဖကွေီး တို့အသိအိမျတအိမျမှာ မွို့ကို ရောကျတယျ၊ သမီးတို့ဆီရောကျတော့ ခရီးထှကျသှားတယျတဲ့ ဒီနလေ့ောကျပွနျရောကျမလားမသိဘူး ဆိုတာနဲ့ ဖကွေီးအသိတယောကျအိမျသှားတညျးနတော..
အငျ ဒါဆိုရငျ အတျောပဲ မီးဆီမှာလာတညျးတော့ ဒီမှာတယောကျထညျးပငျြးနတော … ..အျော မောငျအောငျနိုငျ ကရောဘယျသှားလို့လဲ.. ..သူက အထူးစဈဆငျရေးရှိလို့လေ၊ ဖကွေီးရဲ့ ခုမီးက အိဖွူတို့ဆီသှားလညျပွီးပွနျလာတာ၊ ခုလာခဲ့လိပျစာပွောလိုကျ မီးကားလှတျလိုကျမယျ..မမေရေော နကေောငျးလား… သူတို့နှဈယောကျစလုံးခရီးထှကျဖို့ မဖွဈနိုငျ အိမျမှာတယောကျယောကျကနျြမှ ရမညျဆိုတာ နိုငျနိုငျက သိထားသညျ။ မကွာခငျမှာပငျ သူ့ကို အကွိုလှတျလိုကျသော ကားဖွငျ့ ဦးခဈြဆှေ ရောကျခလြာသညျ။ ဦးခဈြဆှေ အထုပျအပိုးတှကေို ဒရိုငျဗာ တပျသားလေးက ကူသယျ အခနျးတှငျး ခပြေးပွီး ပွနျထှကျသှားသညျ။
နိုငျနိုငျက တံခါးမ ကိုပိတျပွီး လော့ခနြခြေိနျမှာပငျ ဦးခဈြဆှကေ နိုငျနိုငျ့အနောကျမှ သိုငျးဖကျ ပွီး ဂုတျလေးကို ငုံနမျးလိုကျလသေညျ။ ..နိုငျလေးက ပိုပွီးလှလာ တောငျ့လာလိုကျတာကှာ….ခဈြစရာကွီး…. ..ဟှနျ့ ဖကွေီးကလညျး မာမာတောငျတောငျ ပဲမဟုတျလား ခဈခဈ… နိုငျနိုငျက သူ့ဖငျကွီးကို လာထောကျနသေညျ့ ဦးခဈြဆှေ၏ လီးမာမာကွီးကို ပုဆိုးပျေါမှ ပငျလှမျးဆုပျကိုငျ ရငျးပှတျပေးလိုကျလသေညျ။ နိုငျနိုငျက တံခါးပိတျအပွီး ဦးခဈြဆှနှေငျ့ မကျြနှာခငျြးဆိုငျ လှညျ့လိုကျသညျ့အခြိနျမှာတော့ ဦးခဈြဆှကေ သူ့ပုဆိုးကို ဖွညျခလြိုကျလို့ ကွမျးပျေါမှာ ကှငျးလိုကျပုံနလေပွေီ။
သူ့ကောငျကွီးက တော့ သူ့ဆီးခုံမှ လေးဆယျ့ငါးဒီဂရီ ထောငျမတျလို့ နိုငျနိုငျ့ရငျဘတျကို အမွှောကျနှငျ့ ခြိနျထားသလိုပငျ။ ..ဟှနျ့ဖကွေီးကလညျး ရောကျတာနဲ့ တခါထဲ တနျးပွီးတော့….တနျးနတောပဲ ခဈခဈ.. နိုငျနိုငျက လညျးပွောသာပွောနတောပါ သူ့လကျတှကေ အလိုလို သူနှငျ့ ရငျးနှီးပွီးသား ဦးခဈြဆှေ၏ လိငျတနျကွီးကို သူ့လကျခလေးဖွငျ့ ဆုပျကိုငျရငျး ရှတေို့းနောကျငငျလုပျပေးရငျးက ဦးခဈြဆှရှေမှေ့ာ ဒူးထောကျထိုငျခလြိုကျလသေညျ။ နိုငျနိုငျ့လြှာကလေးက ဦးခဈြဆှေ၏ ဒဈဖြားကို အသာရကျလိုကျပွီးမှ နူတျခမျးလေးနှဈလှာကို ဟပေးလိုကျတော့ ဦးခဈြဆှကေ ရှကေို့ ခွတေဖဝါးစာရှပွေီ့း နိုငျနိုငျ့ အာခံတှငျးထဲ ထိုးသှငျးလိုကျလတေော့သညျ။
နှေးထှေး နုးညံ့သော နိုငျနိုငျ့အာခံတှငျးလေးက ဦးခဈြဆှေ၏ လိငျတနျကွီးကို စုပျယူလိုကျသော အခါမှာတော့ ဦးခဈြဆှခေမြာ ဒူးမြားပငျ ခြောငျခငျြသလိုဖွဈသှားရသညျ။ ဦးခဈြဆှမှော မကျြလုံးကို စုံမှိတျလို့ နိုငျနိုငျ့ ဆံပငျတှကေို ဆုပျကိုငျကာ ဖငျကွီးကော့ကာကော့ကာ ဖွငျ့ သူ့လိငျခြောငျးကွီးကို နိုငျနိုငျ့ပါးစပျတှငျးသို့ ထိုးသှငျးနမေိလတေော့သညျ။ နိုငျနိုငျကလညျး သူ့ဦးဦးခဈြ အကွောငျးသိပွီးသားမို့ ဦးဦးခဈြ အတနျကွီးအာဂေါငျမထိုးမိစရေနျ လိငျတနျအရငျးကို သူ့ကလေးနှငျ့ ဆုပျကိုငျထားပွီး သူ့နူတျခမျးထူထူ လေးကိုလညျးစပေ့ေးထားလိုကျလသေညျ။ ဦးခဈြဆှကေတော့ အောငျးထားရတာလညျးကွာ၊ စုတျအားလညျးကောငျးလှသော နိုငျနိုငျ့အိမျရှတေံ့ခါးဝ အနီးမှာပငျ၊ အမှုတျခံနရေတော့ ကွာကွာမထိနျးနိုငျ၊ ခနလေးဖွငျ့ သုတျရညျတှကေို နိုငျနိုငျ့လညျခြောငျးတှငျး တဒုတျဒုတျပနျးထုတျပဈနမေိလတေော့သညျ။
ကလငျးးးးးးးးးးးးးးး… စောစောစီးစီး ထမွညျလာသော တယျလီဖုနျးကွောငျ့ အိပျယာမှ လနျ့နိုးလာသော နိုငျနိုငျတယောကျ ကယောငျကတမျးနှငျ့ လကျက ကုတငျဘေးက စားပှဲလေးပျေါလကျကို ဆနျ့တနျးလိုကျသညျ။ သူလကျထဲဖုံးရောကျလာမှ သတိရပွီး ကမနျးကတနျး စကားပွောခှကျနရောကို လကျဖဝါးလေးဖွငျ့ဖုံးလိုကျမိသညျ။ နောကျ သူ့ဘေးမှာ အိပျပြျောနသေော ဦးဦးခဈြကို လှမျးကွညျ့လိုကျတော့ သူလညျး ဖုံးသံကွောငျ့ နိုးသှားဟနျတူသညျ၊ မကျြလုံးပှငျ့လို့ နိုငျနိုငျ့ကို ကွညျ့နသေညျ။ နိုငျနိုငျက အသံမထှကျနဲ့ ဟု သူပါးစပျမှာ လကျညိုးထောငျပွလိုကျ တော့ ခေါငျးငွိမျ့ပွသညျ။
ဟယျလို… ..အနျတီ နိုငျနိုငျကြော့နှယျ လား… ..ဟဲ့မောငျစောကွညျ၊ စောစောစီးစီးကှယျ၊ လနျ့တောငျသှားတယျ ဖုံးသံက.. ..ဟငျမစောတော့ပါဘူးအနျတီရဲ့ အနျတီက အိပျယာမထသေးတာလား ဆောရီးပဲနျော.. ခုမှ နိုငျနိုငျလညျး နာရီကို လှမျးကွညျ့မိသညျ၊ ဟောတော့ မှနျးတောငျတညျ့တော့မယျ။ ခဈ၊ ညက ဦးဦးခဈြနဲ့ မတှရေ့တာ ကွာလို့ ကဲလိုကျကွတာ ၊ ဦးဦးခဈြကလညျး အနားကို မပေးဘူးလေ၊ မနကျ အာရုံတကျလောကျမှ အိပျမောကသြှားတာကိုး။
အဲဒါကွောငျ့ မနိုးကွတာ၊ ခု ဖုံးလာမှ ပဲနိုးတော့တာကိုး။ ..အျောအေး ဟုတျသားပဲ၊ ညက အိပျယာဝငျတာ နောကျကသြှားလို့ မနိုးဘူးဖွဈသှားတာ ခဈခဈ၊ ခုတော့ ထရတော့မှာပေါ့၊ ကဲပွော မောငျစောကွညျ ဘာထူးလညျး.. နိုငျနိုငျ က ကုတငျခေါငျးရငျးကို ခပျလြှောလြှောလေး ကြောမှီပွီး ဖုံးပွောနသေညျ။ ညအိပျယာဝငျကထညျးက ကိုယျလုံးတီးမို့ နို့ကွီး နှဈလုံးက ပွတငျးပေါကျ မှနျကို ဖွတျ ဝငျလာတဲ့ နရေောငျ အောကျမှာ ဝငျးနတေယျ။ ဦးခဈြဆှကေ အသာအိပျယာပျေါမှာ တတောငျထောကျလို့ နိုငျ့နိုငျ့ နို့သီးခေါငျးလေးတှကေို လာစို့သညျ။ နိုငျနိုငျက ဖုံးပွောနရေငျးက ဦးခဈြဆှေ လကျမောငျး ကို လကျသညျးနဲ့ ဆိပျလိုကျရငျး မကျြစောငျးလေးပါ တခကျြထိုးလိုကျသညျ။ ခုထိမဝသေးဘူးလား ဆိုသညျ့သဘော။
အနျတီလား၊ အငျး ဘာမှ လုပျစရာမရှိပါဘူး ကှယျ၊ ခရီးပနျးလာလို့ အိမျမှာ ပဲ နားနတော.. ဦးခဈြဆှလေကျက နိုငျနိုငျ့ပေါငျကွားက အဖုတျလေးဆီ ရောကျလာပွနျတယျ၊ အဖုတျနူတျခမျးသားလေးတှေ စောကျစလေ့ေး တှကေို ဆှနပွေနျတယျ။ ..အငျ အနျတီ့ဆီ လာလညျမို့..ဒီနကေ့တော့… နိုငျနိုငျက အကွောငျးတခုခု ပွပွီးငွငျးမလို့ ကွံနတေုနျးသူ့ကို လကျနဲ့တို့လိုကျပွီး လကျမထောငျပွနတေဲ့ ဦးခဈြဆှကေို တှလေို့ကျလို့ ဖုနျးစကားပွောခှကျကို သူ့လကျဖဝါးနဲ့ ဖုနျးပွီး။ ..ဘာလညျး ဖကွေီး ဘာပွောမလို့လဲ.. ..ချေါလိုကျ အိမျကို..ဖကွေီး ခြောငျးခငျြလို့.. ..အငျ ဖကွေီးက လညျး .. နိုငျနိုငျက မကျြမှောငျလေးတခကျြတှနျ့ကာ ပွနျမေးလိုကျရငျးမှ ၊ တှေးလိုကျမိပွီး ကွကျသညျးပါထသှားသညျ။
တကယျလားဖကွေီး.. ဦးခဈြဆှေ ခေါငျးငွိမျ့ပွတာတောငျ မစောငျ့တော့၊ ..အေးလေ အနျတီတယောကျထဲလညျးပငျြးနတောနဲ့ အတျောပါပဲ၊ ဘယျအခြိနျလောကျရောကျမှာလညျး…. နိူငျနိုငျ ဖုံးပွနျခလြိုကျတဲ့ အခြိနျမှာတော့ ဦးခဈြဆှေ ကလိထားလို့ သူ့စောကျဖုတျတခုလုံးလညျး ရှဲစိုနပွေီ။ နောကျပွီး သူနဲ့ မောငျစောကွညျလုပျတာကိုလညျး ဦးခဈြဆှေ ခြောငျးကွညျ့နမှောဆိုတော့ စိတျလှုပျရှားမှုက အရမျးဖွဈနသေညျ။ ဦးခဈြဆှကေလညျး မနကျအိပျယာထ အားအပွညျ့နဲ့မို့ နိုငျနိုငျ့ပေါငျနှဈလုံးကို ပုခုံးပျေါတငျလို့ တဖောငျးဖောငျးခနြလေိုကျသညျမှာ နောကျတနဆေို့တာ မရှိတော့ဘူးလားဟုပငျထငျရလတေော့သညျ။ ဦးခဈြဆှနှေငျ့ နိုငျနိုငျမှာ တယောကျနှငျ့တယောကျ ဘာမှ လြို့ဝှကျခကျြမရှိကွပေ။
မနညေ့က ဦးခဈြဆှနှေငျ့ ခဈြပှဲဝငျရငျး နားနရေသော အခြိနျတှမှော နိုငျနိုငျက သူခရီးသှား စှနျ့စားခနျးမြားကို ပွောပွနပေရော၊ ကောငျးခနျး ရောကျလိုကျ ဦးခဈြဆှကေ ထဆှဲလိုကျ၊ တခြီပွီးတာနဲ့ နောကျတခနျးပွော၊ ဦးခဈြဆှေ စိတျထလာပွီး တခြီဆှဲလိုကျ ဖွဈနရေသညျ။ ထို့အတှကျကွောငျ့လညျး မောငျစောကွညျ ဆိုတာ ဘယျသူလညျး ဦးခဈြဆှကေ သိနှငျ့ပွီးသားဖွဈသညျ။ အပွောနှငျ့တောငျ သူ စိတျတကျကွှရသဖွငျ့ တကယျမွငျခငျြလာ မိနတေုနျး မောငျစောကွညျ ဖုံးဆကျသညျဆိုတော့ ဒါလိုခငျြလို့ပဲ ဆိုတာ ဦးခဈြဆှေ သိလိုကျသညျ။ ဒါကွောငျ့လညျး နိုငျနိုငျ့ကို မီးစိမျးပွလိုကျတာ။ နိုငျနိုငျ့ သူငယျခငျြး အိဖွူ ဆိုတာကိုလညျး လုပျခငျြနမေိသညျ။ ဒါပမေဲ့ အဲဒါက အလှမျးဝေးသညျလေ။
နိုငျနိုငျက သူတို့ အခနျး နှငျ့ ကပျရကျ ဧညျ့သညျခနျးမှာ ဦးခဈြဆှကေို ဝငျနစေပွေီး အပွငျက သော့ခတျထားလိုကျသညျ။ ထိုအခနျးမှနေ၍ သူတို့ အခနျးကို ခြောငျးဖို့ အပေါကျတှရှောရ၊ ခြဲ့ရနှငျ့ ဦးခဈြဆှေ တယောကျ အလုပျရှုတျသှားရသညျ။ နခေ့ငျး နှဈနာရီလောကျကတြော့ မောငျစောကွညျတယောကျ ပေါကျခလြာတော့သညျ။ နိုငျနိုငျနှငျ့ မောငျစောကွညျတို့ အိမျရှခေ့နျးမှာ စကားတှေ ပွောနကွေပွီး အိပျခနျးထဲ ရောကျမလာသေးသဖွငျ့ ဦးခဈြဆှတေယောကျ နညျးနညျးတငျးလာမိသညျ။ သူက စောငျ့နရေတဲ့သူမို့ပါ။ တကယျက ဘယျလောကျမှ မကွာ။ နိုငျနိုငျ တံခါးဖှငျ့ပေးလိုကျတာနှငျ့ မောငျစောကွညျတယောကျအိမျထဲ ဝငျလာရငျး ဟိုကွညျ့ဒီကွညျ့လညျးလုပျ နိုငျနိုငျ့ကိုလညျး ကွညျ့ရငျး မကျြလုံးတှကေ တခုခု သိခငျြနသေလိုလို။ နိုငျနိုငျက အထာပေါကျပွီးသား မောငျစောကွညျ ၏ ဂဏှာမငွိမျပုံ ကို ပွုံးကွညျ့နပွေီးမှ။
အနျတီ တယောကျထဲပါကှယျ့ ဘယျသူမှ မရှိပါဘူး ။အနျတီ့ အမြိုးသားက ရှတေ့နျးမှာလေ၊ အထူးစဈဆငျရေးဆိုလား သှားနလေို့.. ..အဟီး..အနျတီက အရမျးခြော၊အရမျးလှတာပဲနျော..သခွောကွညျ့လေ ပိုခြောလပေဲ.. ..အောငျမလေး မွှောကျမနနေဲ့ ကိုယျတျောခြော ဘာစားမလဲပွော ကျောဖီသောကျမလား… ..စားလာခဲ့ပွီ အနျတီရဲ့ ကနြျောဆာနတော က ဒီပွငျ့ဟာ.. ..အောငျမလေး .ဘာမြား ဆာနရေတာလဲ.. ..ဟီးဟီးသိရဲ့သားနဲ့ဗြာ..ဒါနဲ့ အနျတီအနျတီနဲ့ လုပျနတော အဲလောကျလညျးမကွီးသေးပဲနဲ့ဟာကို.. ..အဲဒါ ဆိုလညျးမမ ပွောငျးချေါ ကဲ..ခဈခဈ.. ..မမ.. ကိုနမျးခငျြတယျ… ..ဟငျ ဧညျ့သညျက လညျး ထိုငျတောငျမထိုငျရသေးဘူး .. ထနပွေီ အဟိ.. ..မမ ရယျ မနောကျပါနဲ့ တကယျပွောတာပါ.. ..အို့.. ..ပွှတျဈ.. မောငျစောကွညျက လညျး လကျသှကျ ခွသှေကျ မီးစိမျးမွငျတာနဲ့ စဆှဲပွီ။
နိုငျနိုငျ့ကိုယျလုံးလေးကို အတငျးဆှဲဖကျပွီး မကျြနှာအနှံ့ ဖကျနမျးတော့သညျ။ ..အို အိမျရှကွေီ့းမှာ ကှာ.. အခနျးထဲသှားမှ ဦးဦးခဈြ မွငျရမှာမို့ နိုငျနိုငျက နညျးနညျးမူလိုကျသညျ။ ..ဒါဆိုလညျး မမ အခနျးထဲ သှားမယျလေ.. ..အောငျမယျ သူက ပိုငျစိုးပိုငျနငျးနဲ့ ဘယျသူက အခနျးထဲ သှားမယျပွောလို့လညျး.. နောကျတော့လညျး အခနျးထညျး ရောကျလာကွတာပဲပေါ့။ ဦးဦးခဈြမှာတော့ စိတျထဲမှာ နှမွောသလို မနာလိုသလိုလို တော့ဖွဈမိသညျ။ ဒါပမေဲ့ နိုငျနိုငျက သူ့မယားမှ မဟုတျတာလေ။ နဂိုထဲက မှ သူလညျး သူမြားမယားကို ဆှဲနတော ဆိုတော့။ ဒါပမေဲ့ သူက နိုငျနိုငျ့ကို ယောကျြားမယူခငျကထညျးက ဆှဲခဲ့ရတာမဟုတျလား၊ အဟီးး။ ဒါတောငျမှ သူလကျနှေးလို့ ဒုတိယလူ ဖွဈသှားရတာ။ ဦးခဈြဆှေ တယောကျ အတှေးနဲ့ကို သူ့ကောငျကွီးက တောငျ့တငျးနပွေီး ထိပျဖြားက ပုဆိုးကို ပှတျနတော နာသလိုရှိလာသဖွငျ့ ပုဆိုးကို ကှငျးလုံးခြှတျခထြားလိုကျတော့သညျ။
နိုငျနိုငျတို့ နှဈယောကျရှလြေှ့ားနရောကို မွငျကှငျးကောငျး သညျ့အပေါကျလှညျ့ပတျကာ ခြောငျးနလေတေော့သညျ။ နိုငျနိုငျ မှာ ဒီတခါတော့ တျောတေျာ့ကို အရညျစိုရှဲနရေလသေညျ။ မနတေ့နကေ့ မှ သိသော ကောလိပျကြောငျးသား ကောငျလေးတယောကျကို ကိုယျ့အိမျပျေါက လငျမယားအိပျသညျ့ကုတငျကွီးပျေါမှာ ကိုယျ့ ခဈြပထှေး ဦးဦးခဈြရှေ့ အလိုးခံ ရမှာက နတေို့ငျးကွုံရမဲ့ အတှအေ့ကွုံမြိုးမှ မဟုတျတာကို။ မောငျစောကွညျက သူနှငျ့ နူတျခမျးခငျြးစုပျနမျးနရေငျး လကျတှကေ နိုငျနိုငျ့တကိုယျလုံးကို သမနသေညျ။ နိုငျနိုငျ ကအိမျနရေငျးပမေဲ့ မောငျစောကွညျလာမယျ ဆိုတော့၊ မွူဆှယျမဲ့ပုံမပေါကျမောငျ၊ အပြံစား အသားကောငျးကောငျး ရငျဖုံးအင်ျကြီနှငျ့ အခြိတျထမိနျ မရမျးစရေ့ောငျ ဝမျးဆကျ ကို ပှဲနပှေဲထိုငျ သှားမလို ဝတျထားသညျ။
မောငျစောကွညျ မကျြလုံးထဲ မှာ အရမျးလှနပေမေဲ့ သူက အတှငျးပစ်စညျးတှကေို လငျးလငျးခငျြးခငျြး အလငျးရောငျ အောကျမှာ ကွညျ့ခငျြနပွေီ ဆိုတော့ အမွနျခြှတျပွဈနတေော့သညျ။ အတှငျးကလညျး အသားရောငျ ဘရာဇီယာ အပြော့၊ အသားရောငျ ဖငျကွားညှပျပငျတီ တို့ကို ဝတျထားပရော မောငျစောကွညျ တယောကျ သရညျတမြှားမြှား ကို ကသြှားရသညျ။ မောငျစောကွညျက နိုငျနိုငျ့ကို ကုတငျစောငျးတှငျထိုငျခိုငျးပွီး နိုငျနိုငျ့ဖငျကွားညှပျဘောငျးဘီကို ဆှဲခြှတျ ခလြိုကျသညျ။
နောကျမှ ပေါငျနှဈလုံးကွား ခေါငျးဝငျကာ ကမူးရူးထိုး နမျးရှုံ့ တော့၏။ နိုငျနိုငျ့ အဖုတျတခုလုံးအရညျတှနေဲ့ ရှဲစိုနတောတှလေို့ကျရတော့ သူ့ကို စောငျ့နရေငျး ဒီကောငျမကွီး စိတျအရမျးထနတောဖွဈမယျဟု တှေးရငျး ဝမျးသာအားရ ဖွဈသှားခဲ့ရသညျ။ သူ့လြှာကွီးဖွငျ့ တပွတျပွတျမွညျအောငျရကျပေးလတေော့သညျ။ မောငျစောကွညျ၏ နှေးထှေးသောလြှာကွီးမှာ နိုငျနိုငျ့အဖုတျနူတျခမျးသားလေးတှေ စောကျစကေ့လေးတှကေို ထိုးဆှ ရကျပေးနတေော့ နိုငျနိုငျ့ခမြှာ တဖကျခနျးက ခြောငျးနသေော ဦးဦးခဈြ ကိုပငျခတ်ေတမြှ မသှေ့ားခဲ့ရသညျ။ မကျြလုံးကို စုံမှိတျကာ စောကွညျ ဦးခေါငျးကို သူ့လကျနှဈဖကျဖွငျ့ ကိုငျထားလိုကျမိလတေော့သညျ။
မောငျစောကွညျဘာဂြာမှုတျတာ ကောငျးလှနျးသဖွငျ့ နိုငျနိုငျ့ခမြာ မှယေ့ာပျေါ ပကျလကျလှနျကသြှားခဲ့ရလသေညျ။ မောငျစောကွညျက လညျး သူ့သှားရညျမြားနှငျ့ နိုငျနိုငျ့ စောကျရညျကွညျမြားကို သူ့လကျခလညျမှာလူးပွီး နိုငျနိုငျ့ခရပှေငျ့လေးကို လကျတဆဈခနျ့ ထိုးကစားလရော နိုငျနိုငျတယောကျ ခနလေးဖွငျ့ ကာမ အရသာအထှတျအထိတျကို ရောကျသှားရလတေော့သညျ။ နိုငျနိုငျတယောကျ ကိုယျလုံးလေး တောငျ့တငျးပွီးမှ တကိုယျလုံးပြော့ခှသှေားတာတှရေ့တော့ တခြီပွီးသှားမှနျး မောငျစောကွညျသိလိုကျသညျ။ သူလညျး ပါးစပျညှောငျးဇကျညှောငျးပွီမို့ အမောဖွသေညျ့အနဖွေငျ့၊ အိပျယာပျေါ နိုငျနိုငျ့နဘေးဝငျကာ ပကျလကျလှဲနလေိုကျသညျ။ သူ့ပုဆိုးကိုလညျး ကနျခြှတျထားခဲ့ပွီမို့ သူ့ကောငျကွီးက အလံတိုငျကွီးလို မတျထောငျလြှကျရှိနပေသေညျ။ ..ကဲ ငါ့မောငျနားအုနျး အမပွုစုအုနျးမယျ..
နိုငျနိုငျ က အိပျယာပျေါထထိုငျလိုကျပွီး မောငျစောကွညျ၏ အလံတိုငျကွီးကို ကုနျးကာ ငုံစုပျလိုကျသညျ။ နောကျတော့ သူ့ခေါငျးကို နိမျ့ကာမွငျ့ကာဖွငျ့၊ မောငျစောကွညျလိငျခြောငျးကွီးကို သူ့ပါးစပျဖွငျ့လုပျပေးနတေော့သညျ။ လုပျပေးနရေငျးလညျး ဦးဦးခဈြ ကွညျ့နမေညျဖွဈသော နံရံဘကျကို လညျး လှမျးလှမျးကွညျ့ပွီး မကျြခုံးပငျ့ပငျ့ပွနပေသေညျ။ ဦးဦးခဈြခဈြတယောကျလညျး သူ့ပွောငျကွီး သူကိုငျကာ၊ ဆုပျလိုကျ ပှတျတိုကျလိုကျဖွငျ့ တကုနျးကုနျးခြောငျးနလေသေညျ။ မောငျစောကွညျမှာ အရငျးတငျးနပွေီမို့ ရရှေညျမထိနျးထားနိုငျရှာပေ၊သို့သျောသူကလညျး ပထမဆုံးအခြီကို ပါးစပျထဲမထုတျခငျြပေ။ ..အား..အမ ..ခန ကနြျော ထှကျသှားလိမျ့မယျခနလေး.. နိုငျနိုငျက မောငျစောကွညျလီးကွီးကို သူ့ပါးစပျမှ ခြှတျလိုကျပွီး၊ ..ပါးစပျထဲ ပွီးခငျြပွီးလိုကျလေ.. ရပါတယျကှယျ့… ..ဟငျ့အငျး..ကနြျောက မမ စောကျဖုတျကိုပဲ ပထမဆုံးလုပျခငျြတာ..အဟီး.. ..ကဲပါ ကိုယျတျောခြောလေးသဘော.. မောငျစောကွညျ တယောကျ ဘာဆေးတှမြေားစားလာသလညျးမသိ။
နိုငျနိုငျတယောကျတော့ ကားဆငျးသှားရသညျ။ လုပျလိုကျတာလညျး ပုံစံမြိုးစုံ အပေါကျလညျးကုနျ၊ နိုငျနိုငျ့မှယေ့ာခငျးတခုလုံးလညျးပပှေ။ မောငျစောကွညျပွနျလို့ တံခါးဝကို နိုငျနိုငျ လိုကျပို့တော့တောငျ နိုငျနိုငျ တယောကျ နုံးခညျြ့နပွေီ။ မောငျစောကွညျအိမျပွငျထှကျသှားလို့ လမျးထိပျတောငျမရောကျသေး၊ သရဲမရဲ စီးနသေော ဦးခဈြဆှကေ ရဆေေးတောငျမစောငျ့၊ အသားကုနျဗငျြးတော့သညျ။ နိုငျနိုငျ့အတှကျ တပတျစာဖူလုံသှားသညျလို့သာပွောရတော့မညျ။ နောကျနေ့ ဦးခဈြဆှေ ပွနျသှားပွီး နှဈရကျလောကျမှာ နိုငျနိုငျ့ယောကျြား ဗိုလျမူးအောငျနိုငျပွနျရောကျလာသညျ။ နိုငျနိုငျလညျး အသားပွနျသစေ ဟိုက ငတျပွတျပွီး ပွနျလာတဲ့ကောငျက ထပျပွီး ဗငျြးပွနျတော့ ပွိုငျးသှားရပွနျပါသညျ။
နောကျ နှဈပတျလောကျနတေော့ သူ့ယောကျြားခရီးပွနျထှကျရသညျ၊ ဒီတခေါကျက တခွားကိစ်စ။ သူ့ယောကျြားခရီးထှကျသှားပွီး နောကျတရကျနှဈရကျမှာ လူက မအီမသာဖွဈ၊ မနကျအိပျယာထ အံခငျြသလိုဘာလိုလို ဖွဈတော့ ဆရာဝနျသှားပွသညျ။ ဆရာဝနျက သူ့သူငယျခငျြး မနေနျးခေါငျ ၏ ခဲအို ဒေါကျတာနောငျရဲ ဖွဈသညျ။ သူ့ကို ကိုယျဝနျရှိနပွေီလို့ထငျသညျဟု ပွောသညျ။ နောကျဆိုငျလားမဆိုငျလားမသိ ဟိုဟာကို သခွောစဈဆေးပွီးမှ ပွောလို့ရမညျဆိုပွီး အဖုတျကို လှနျကွညျ့သညျ၊ နောကျ သူ့ လကျအိပျစှတျထားသော လကျခြောငျးကွီးနှငျ့ ဟိုဖွဲဒီဖွဲကွညျ့သေးသညျ။ ဟှနျ့ အမြိုးသား တှေ အိုဂြီဘီဝိုငျ လုပျနကွေတာ သူသိပျမသင်ျကာ၊ မိနျးမ လူနာလာတိုငျး ဟိုဟာဖွဲကွညျ့ခှငျ့ လိုငျစငျရနကွေသညျ။
တျောတျောဝါသနာကွီးသညျ့သူတှပေဲဖွဈမညျဟု သူတှေးနမေိသညျ။ မနေနျးခေါငျက တော့ ပွောပါတယျ၊ ငါ့အမ ယောကျြားက ရိုးပါတယျတဲ့။ ငါ့တုနျးကတောငျ မီးမမှနျတာ သူကွညျ့ပေးတာပဲတဲ့။ အငျး။ ထားလိုကျပါတော့လေ။ ဒါပမေဲ့ နိုငျနိုငျစိတျပူနတောက သူ့ယောကျြား နှငျ့သူ ဆကျဆံဖွဈတာက လှနျခဲ့တဲ့ နှဈပတျလောကျကမှ ဆိုတော့ အခုနေ သူကိုယျဝနျရှိတယျ သှားပွောရငျ၊ သူယောကျြားက ပွဿနာရှာတော့မညျ။ မနေနျးခေါငျ ကိုကပျပွီး ပွောကွညျ့သညျ။ သူကိုယျဝနျရှိတယျ ဆိုတာကို ရကျရှပွေီ့းပွောပေးလို့ရမလားပေါ့၊ သူစိုးရိမျမိတာကိုလညျးပျေါတငျပဲပွောလိုကျသညျ။
မနေနျးခေါငျက ဘာမှ စိတျမပူနဲ့ သူ့ခဲအိုသူပိုငျကွောငျး၊ နငျကွိုကျတဲ့နကေို့ ပွောအဲဒီနမှေ့ာ ကိုယျဝနျရှိတယျလို့ သူ့ကို ပွောခိုငျးပေးမညျဖွဈကွောငျးပွောလို့ စိတျနညျးနညျးအေးသှားရလသေညျ။ မနေနျးခေါငျတယောကျ သူ့ခဲအိုကို တျောတျောပိုငျပါလားလို့ စိတျထဲမှာလညျး တမြိုးတော့ဖွဈမိသညျ။ ဒါပမေဲ့ အဲဒါ ငါ့အလုပျမဟုတျဘူးလဟေု သာ နိုငျနိုငျတယောကျတှေးလိုကျမိပါတော့သညျ။ …အဲဒါပါပဲ အိဖွူရယျ၊ ငါတော့ ပွောရခကျနပွေီ အဲဒီတုနျးက သခွောလညျးမသိပါဘူး။ ကိုယျဝနျရှိပွီ ဆိုတော့မှ ငါသှားစဉျးစားလိုကျမိတာ။ အဲဒီအတောအတှငျးမှာ နငျ့ယောက်ခထီးကွီးရယျ၊ တက်ကသိုလျကြောငျးသားလေး တယောကျရယျ၊ ငါ့ပထှေး ရယျ၊ ငါ့ယောကျြားရယျ၊ အဲဒီလေးယောကျနဲ့ သှားခဲ့ဘူးတယျ။
မောငျစောကွညျနဲ့ ဦးဦးခဈြကတော့ ခှဲလို့ရမယျမထငျဘူး၊ တယောကျကနေ့ တယောကျညလိုဖွဈနတော၊ ခဈခဈ.. ..စောကျကောငျမစုတျ အရေးထဲ ရီနသေေးတယျ၊ ငါ့မှာဟယျ သားအဖနှဈယောကျနဲ့ပဲ ဖွဈပါတယျ၊ ဘယျသူ့ဟာမှနျးသခွောမသိဘူး၊ တကယျတော့ ငါ့ သမီးက အရေးမကွီးဘူး ဘယျသူ့ခလေးဖွဈဖွဈ ဒီသှေးပဲ နငျ့ခလေးကို ပဲ စဈဖို့လိုမယျဟ… ..အငျး စဈဆိုရငျလညျး နငျ့ယောက်ခမကွီးကိုပဲ သှေးစဈမှ ရတော့မှာပဲ။ မောငျစောကွညျကလညျး ဘယျနားသှားရှာရမယျမှနျးမသိတော့ဘူး၊ ငါ့ပထှေးကလညျး ဆုံးသှားပွီလှနျခဲ့တဲ့ နှဈနှဈလောကျကပဲ… ..အငျး ဒါဆိုရငျ ဘယျလိုလုပျမလညျး… ..နငျ့ယောက်ခထီးကွီး ဆီက နနေငျသှေးစဈခငျြလို့ဆိုပွီးယူလို့မရဘူးလားဟ..မထူးပါဘူးဟာ ငါလာခဲ့မယျ၊ ငါ့သား ကိုပါ တခါထဲ သှေးစဈပွီး ဒီအနျအေ တကျဈလုပျကွညျ့မှ ရမှာပေါ့.. ..
အငျး.. ငါပွောရငျတော့ ရမှာပါ..ဒါပမေဲ့ ခု သူမရှိဘူး၊ အခု စလုံးမှာ ငါ့ယောကျြား ဆီလိုကျသှားတယျ ကနျြးမာရေး စဈမလို့တဲ့ လေ.. ဟောတော့ အရေးထဲမှာဟယျ..တိုကျဆိုငျလိုကျတာ.. ဒါဆိုဘယျလိုလုပျကွမလဲဟဲ့.. .. ငါ့ ယောက်ခမ ကွီးကို မေးကွညျ့လိုကျရငျ ကောငျးမလား သူ့ဆီက အကွံညဏျလေးဘာလေးရအောငျ.. ..အငျ ဖွဈပါ့မလား နငျ့ယောက်ခမကွီးက ရိပျမိသှားမှာပေါ့.. ..အေးဟယျ နငျ့ကို ငါမပွောဖွဈတာတှရှေိသေးတယျ.. ..ဘာလညျး ပွောစမျးပါအုနျးကောငျမရယျ နငျကလညျး လြို့ဝှကျလိုကျတာ တခါထဲ.. ..ငါနဲ့ ယောက်ခထီးကွီးတို့ ဖွဈတာကို ယောက်ခမကွီး မိသှားတယျ.. ..။
ဟဲတော့..ဘုရားရေ..အငျး ဒါပမေဲ့ နငျအခုမှ ငါ့ကို ပွောပုံထောကျရငျ နငျတို့ ပွဿနာ အကွီးအကယျြမတကျလိုကျဘူး မဟုတျလား… ..အငျးဟဲ့ ပထမတော့ ငါ လညျး သတေော့မတတျပေါ့လနျ့သှားတာ.. ..ဟဲ့ ဒါနဲ့ နပေါအုနျး နငျက အဲဒီတုနျးက နငျ့ယောကျြားဆီ မသှားခငျ နငျတို့ကို မိသှားတာလား.. ..မဟုတျဘူးဟဲ့ ပွနျလာမှ..အဟီးး.. ..အျောကောငျမ တျောတျောထ… ပွနျလာတော့ ဆကျဖွဈသေးတယျပေါ့… ..ခဈခဈ..နငျကလညျးဟာ သိရဲ့သားနဲ့ နငျက ငါ့ထကျတောငျဆိုးသေးတာကို.. ..အေးပါအေးပါ ဆကျပွောစမျးပါအုနျး သှားရညျကစြရာလေးတှကေို..ခဈခဈ.. ..အေး. ငါပွနျလာပွီးတော့ ငါလညျး စိတျနညျးနညျးအေးသှားတာပေါ့ဟ၊ အဲဒီအခြိနျမှာပဲ ဖကွေီးက ပွနျလာနူးတယျကှာ..ငါလညျး နဂိုထဲက စိတျပါပါ ဆိုတော့ ဖွဈသှားတာပေါ့ဟာ..နောကျတော့ တဖွညျးဖွညျး အတငျ့ရဲလာကွပွီး တခြို့ ဟာတှေ လဈဟာသှားကွတာ တနတေ့ော့ တနျးတိုးတော့တာပဲ၊ ပိုဆိုးတာက ငါက ကိုယျဝနျကွီး တျောတျောရငျ့နပွေီ.. …ဟဲတော့ ကောငျမစုတျ ကဲလိုကျတာ..
ခှိခှိ.. …ယောက်ခမ ကွီးက တျောတျော ပှကျတာပေါ့၊ ငါ့ကိုတော့ မဟုတျဘူး သူ့ယောကျြားကို .. ခလေးထိခိုကျမှာစိုးလို့တဲ့ ၊ သူ့မွေး ကလေးကိုတဲ့၊ ဒီလောကျတောငျနှာပှစရာ ရှားလားပေါ့ကှာ..ဟိုဟျောတယျက ကောငျမတှေ သှားလုပျပါလား ဘာညာနဲ့၊ ငါလညျးရှကျလိုကျတာကှာ လဲသခေငျြတော့တယျ အဲဒီနရောမှာ.. ….ခဈခဈ…ခဈခဈ… ..ငါလညျးတျောတျောအံသွသှားတယျက ယောက်ခမကွီးက သူ့ယောကျြား ဖောကျပွနျတာရော ငါ့ကိုရော ဘာမှ မပွောပဲနဲ့ သူ့မွေးလေး ထိခိုကျမှာစိုးလို့ ဒေါပှတာကို ငါနောကျမှ တှေးမိတယျ… အဟီး.. ..ကောငျမ နငျ ငါ့ကို မလြိုနဲ့တော့ နငျခလေးမှေးပွီးတော့ရော နငျ့ယောက်ခထီးကွီးနဲ့ ဆကျဖွဈတယျ မဟုတျလား… ..အငျး .. ငါ့သမီးလေး နို့တိုကျတော့ ၊
ပထမ ငါ့နို့ခြောငျးက ပိတျနတေယျကှာ၊ သမီးလေး စို့လို့မရဘူး အဲဒါနဲ့ ယောက်ခထီးကွီးက စို့ပေးရငျး နဲ့ ခိခိ..တျောပွီကှာ ရှကျလာပွီ၊ နငျက ငါ့ကို တမြိုးထငျတော့မှာပဲ… ..အငျး နငျ့ဟာက ငါတောငျအားကလြာပွီ၊ ခဈခဈ အနားမှာ တယောကျမရှိ တယောကျရှိဆိုတာလိုပဲ ဟှနျး..အေး နငျ့ ယောက်ခမ ကွီးဆီကို နညျးနညျး အကွံတောငျးကွညျ့ပါလား ဘာလုပျရမလဲ၊ ဘယျလိုပွောကွရမလညျးဆိုတာ၊ သူက လူကွီးဆိုတော့ အတှအေ့ကွုံပိုရှိမှာပေါ့… ..အေးအေး ငါညနကေရြငျဖုနျးဆကျမယျ.. ။
နငျသာ လာဖို့ပွငျထားလိုကျလကျမှတျတှဘောတှေ ဘုတျချ လုပျထားတော့… ..အေးပါ.. အေးပါ… …ကလငျ..ကလငျ… …ဟယျလို… …မိနိုငျလား…. ..အေးအိဖွူ ဘာထူးလဲ… ..နငျလကျမှတျဝယျပွီးပလား…မဝယျရသေးရငျ မလာနဲ့တော့… ..ဟေ…ဘယျလိုဖွဈရပွနျပွီလဲ ဟ…ဖုနျးပဲဆကျထားတာ ပွနျပွောလိုကျရငျရတယျ မယူတော့ဘူးလို့… ..အဲဒါဆိုလညျးဖုနျးဆကျလိုကျတော့ ငါတို့ကိစ်စ ရှငျးသှားပွီ… ..ဟဲ့ ပွောစမျးပါအုနျး ဟ.. ရှငျးရှငျးလငျးလငျး.. ..ဒီလိုဟဲ့ .. ကိုမြိုးဆှကေ ငါ့ယောက်ခထီး နဲ့ ရတာမဟုတျဘူးတဲ့ ငါ့ယောက်ခမကွီးက ပွောတယျ၊ အဟီးး ဘယျသူ့မှ မပွောဖို့လညျးငါ့ကို နူတျပိတျတယျ အဟီး။ ငါ့ယောက်ခမကွီး ဒျေါနီလာက တခွားကောငျနဲ့ ဖွဈပွီးရထားတာတဲ့။ ဦးအောငျအောငျဆှကေ မြိုးမအောငျဘူးတဲ့။
ခိခိ။ တကယျတော့ ဦးအောငျအောငျဆှကေလညျးသိတယျတဲ့ဟဲ့။ ခိခိ။ ငါက တကယျတော့ အအေးမိပွီး ဟိုလာလာတာ နောကျကြ တာကို ဆရာဝနျနဲ့ မစဈပဲ ကွောကျလနျ့ပွီး ငါ့ယောကျြားဆီကို ထှကျသှားလိုကျတာ၊ ဟိုမှာကမြှ တကယျ ဗိုကျကွီးသှားတာဟ။ အခုမှ ငါလညျး ယောက်ခမကွီးပွောမှ ရကျတှေ ပွနျတှကျကွညျ့မိတာ။ ငါ့ယောက်ခထီးကွီးကလညျး သူ့တို့ လြို့ဝှကျခကျြကို ငါမသိစခေငျြတော့ မသိခငျြဟနျဆောငျပွီး ငါ့ကို ကိုမြိုးဆှေ ဆီပို့လိုကျတာ၊ ခဈခဈ။ ကဲ အဲတော့ ငါတို့ ကလေးနှဈယောကျ က ဘာမှ မဆိုငျတော့ဘူး။ နငျပဲ သဘောတူသလား ဒါပဲပွော.. ..ခဈခဈ.. ကောငျမရယျ နငျနဲ့ငါက ဘာပွောစရာရှိလို့လဲ၊ ခဈခဈ.၊ အျော ငါတို့လညျတယျ ဆိုတာ နငျ့ယောက်ခမကွီး ခွဖြေားတောငျမမှီပါလားဟယျ၊ ခဈခဈ။ ငါတို့က တောငျ ငါတို့ ယောကျြားတှေ မသိအောငျ ဖုံးနရေသေးတယျ။ နငျ့ယောက်ခမကွီးကတော့ သူ့ယောကျြားကတောငျ လိုကျဖုံးနရေတာပါလား ခဈခဈ… ပွီးပါပွီ။
အိဖြူသဇင်ကျတော့လည်း ဇာတ်လမ်းက တမျိုး အဖေရော အမေရောက စည်းကမ်းကြီးသဖြင့် သူ့အတွက်က ဟိုဒီကိစ္စဆိုသည်မှာ မင်္ဂလာဆောင်ပြီးမှ လုပ်ရမည့် အရာလို့ထင်သည်၊ ညီညီ မှာသူ့ရီးစားလေး ကိုသူများတွေလို ဟိုကိုင် ဒီကိုင် လုပ်ချင်သည်၊ အိဖြူက လက်မခံ၊ အမှိုက်က ပြဿဒ် မီးလောင်ဆိုသလို စကားခနခန များလာပြီး နောက်ဆုံးတော့ ညီညီက ဟိုကောင်မလေးလိုလို ဒီကောင်မလေးလိုလို လုပ်လာရမှ အိဖြူက ဒီလောက် သစွာမရှိတာ သူ့အိမ်ထောင်ဖက်အဖြစ်မရွေးချင်တော့ ဆိုတာ ရီးစားအဖြစ်မှ ပြတ်စဲလိုက်သည်၊ နောက်အချစ်လည်း မရှာချင်တော့၊ စာကိုသာ ဖိကျက်နေတော့သည်၊ နိုင်နိုင်ကတော့ ထည်လဲ တွဲနေတော့သည်၊ အခုဆို ကျောင်းပိတ်လို့ အိမ်ပြန်လည်း သူ့အဖို့ မပျင်းတော့ပြီ၊ သူ့အဖို့တော့ ယောက်ျားလေး တော်တော်များများကိုလည်း မြည်းစမ်းဖူးလေပြီ၊ သူ့ ပထွေး ဦးချစ်ဆွေကြောင့်လားမသိ၊ သူက သူ့ထက်ကြီးသော ဘဲကြီးတွေကို ပိုကြိုက်တတ်လာသည်၊
ကျောင်းမှာလည်း မုဆိုးဖို ကျောင်းဆရာများ နှင့် ဘာညာကွိကွလေးတွေ အမြည်းတို့စားရင်း၊ က ကျောင်းစာများမှာ စာအရမ်းကြည့်နေသော အိဖြူနှင့် ဂရိတ်တူတူ ရနေသည်။ ဤသို့ဖြင့် သူတို့၏ ပထမအရွယ်ပညာရှာခြင်းပြီးဆုံးပြီမို့ နှစ်ဦးသား လမ်းခွဲသွားကြရသော်လည်း အဆက်အသွယ်မှာ မပြတ်ကြချေ၊ တဦးနှင့်တဦး အမြဲတမ်းလိုလို အဆက်အသွယ်ရှိပြီး အနည်းဆုံးတနှစ်တခါလောက်တော့ ဆုံမိကြလေသည်။ နောက်တော့ နိုင်နိုင်မှာ သူ၏ လည်ပတ်ကျွမ်းကျင်မှုကြောင့် သူ့ထက် အသက် ၅နှစ်မျှကြီးသူ ဗိုလ်မူးအောင်နိုင် နှင့် အိမ်ထောင်ကျခဲ့လေသည်၊ အိဖြူသဇင်ကမူ မိဘ ပြောစကားနားထောင်ပြီး မိဘချင်း စေ့စပ်သဘောတူခဲ့သူ ကိုမျိုးဆွေ ဆိုသော အာအိုင်တီကျောင်းဆင်း၊ သူနှင့်အသက်တူ ရွယ်တူ တဦးနှင့် အိမ်ထောင်ကျခဲ့ရလေသည်။
အိဖြူသဇင်၏ ယောက်ခမ များမှာ ဟိုတယ်တည်းခိုခန်းများပိုင်ဆိုင်ပြီး သားလေး တယောက်တည်းရှိရာ သူတို့ စီးပွားရေးကို ဆက်လက်လုပ်ကိုင်စေလိုသော်လည်း ကိုမျိုးဆွေက သူငယ်ချင်းများ လည်း အလုပ်လုပ်နေသော စင်္ကာပူကို သွားရောက်လုပ်ကိုင်ကြည့်ချင်နေလေသည်၊ သူက အဆင်ပြေရင် အိဖြူကိုပါ ခေါ်သွားပြီး အတူတူ နေချင်ပေမဲ့ သူကိုယ်တိုင်လည်း အလုပ်ရှာရအုန်းမှာမို့ တနှစ်လောက်သာ ညားထားရသေးသော မယားလေးကို သူတို့ မြို့မှာ ခနထားခဲ့ရလေသည်၊ အိဖြူမှာလည်း အီကိုက ဆင်းသူမို့ ငွေစာရင်း များကိုင်တွယ်ရာတွင် ကျွမ်းကျင်သူမို့ သူ့မိဖများမှာလည်း သူတို့ အလုပ်တွင် စပြီး အားကိုးနေရပြီဖြစ်ရာ၊ အိဖြူမှာ သူ့ယောက္ခမ များနှင့် ကျန်နေခဲ့ရလေသည်။ နိုင်နိုင်မှာ တော့ အရာရှိရိပ်သာ မှာ အေချွေရံ အသင်းအပင်း တွေနဲ့ နေထိုင်ရင်း ဘာအလုပ်မှ မလုပ်တော့ပဲ ဘဝစည်းစိမ် ကောင်းကောင်းခံစားနေရ လေသည်။
တခုသော နွေရာသီမှာ သူ့ယောက်ျား ဗိုလ်မူးအောင်နိုင် အထူးစစ်ဆင်ရေးဖြင့် နယ်ကို သွားနေရသဖြင့် တယောက်ထည်းပျင်းလာရာ၊ အိဖြူသဇင် ဆီသို့ ဖုန်းဆက်မိလေသည်၊ အိဖြူသဇင်ကလည်း သူ့ယောက်ျား စင်္ကာပူသွားအလုပ်လုပ်နေသည်မှာ တနှစ်နီးပါးရှိနေပြီး သူလည်း အခုတော့ ယောက္ခမ အလုပ်နဲ့ ခြေချူပ်မိသလိုဖြစ်နေတော့ ၊ ကျောင်းတုန်းက အခင်ဆုံးသူငယ်ချင်း လာလည်မယ်ဆိုတော့ ဝမ်းသာအားရ ဖိတ်ခေါ်လိုက်လေသည်။ နေဖို့က သူ့အတွက်က သူတို့ပိုင်ဟော်တယ်ခန်းတခန်းကို ပြင်ပေးလိုက်ရုံပင်။ သို့နှင့် နိုင်နိုင်တယောက် အိဖြူရှိရာ မြန်မာပြည်အလယ်ပိုင်း မြို့ကြီးဆီသို့ ရောက်လာခဲ့ရလေတော့သည်။ နိုင်နိုင် ရောက်လာတော့ အိဖြူက သူ့ယောက္ခထီးယောက္ခမ ဦးအောင်အောင်ဆွေ၊ဒေါ်နီလာ တို့ နှင့် မိတ်ဆက်ပေးလိုက်လေသည်၊ ဦးအောင်အောင်ဆွေတို့ကလည်း အိဖြူသူငယ်ချင်းဆိုတော့ သူတို့ ချွေးမလေးကို ချစ်သလိုပင် ချစ်ခင်မိကြပြီး လိုလေသေးမရှိ ပြုစုလေသည်။ သို့နှင့် သူငယ်ချင်း နှစ်ယောက်၊ သူတို့ မြို့လေး အနားတဝိုက် ဘုရားစုံဖူး၊ ဟိုနေရာဒီနေရာသွား၊ ဟိုအစားဒီအစား စားဖြင့် ပျော်ရွှင်နေကြလေသည်။
တနေ့ သူတို့ သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက် အစားအသောက်သောင်းကျမ်းလိုက်တာ၊ အိဖြူဇင်တယောက် အစားအသောက်တခုခု က မသန့်၍လားမသိ အထက်လှန်အောက်ရှောဖြစ်ကာ ဖျားတော့သည်။ သူ့ကို ဆရာဝန်က အစားမစားခိုင်းသေးပဲ အရည်ပဲသောက်နေရလေရာ၊ အိဖြူခမျာ အိပ်ယာထဲ နားနေရလေတော့သည်၊ သူဆီလာလည်သော သူငယ်ချင်းကို ပျင်းနေမှာစိုး၍ နိုင်နိုင့်အတွက် ခရီးစဉ်များကို လုပ်ပေးဖို့ သူ့ယောက္ခမ များကို ပြောကြားပေးလေသည်၊ သို့နှင့် ဦးအောင်အောင်ဆွေက အနီးနားရှိတောင်ပေါ်မြို့လေးသို့ သူ့ကားနှင့်လိုက်ပို့ပေးမည်ဟု ပြောလေသည်၊ နိုင်နိုင်က ငြင်းသော်လည်း အိဖြူက အတင်းအကျပ်တိုက်တွန်းသောကြောင့် နိုင်နိုင်က သဘောတူလိုက်လေသည်။ ဒေါ်နီလာက အိဖြူကို စိတ်မချတာနှင့် ဟော်တယ် အလုပ်များလည်း ရှိတာကြောင့် နေခဲ့ပြီး ဦးအောင်အောင်ဆွေ နှင့် နိုင်နိုင် သာ ကားလေးတစီးဖြင့် စောစောစီးစီး ထထွက်လာခဲ့ကြလေတော့သည်။ ဦးအောင်အောင်ဆွေမှာ အသက် ၅၀ ကျော်ကျော် သာရှိသေးပြီး အားကစားလည်း လုပ်သူမို့လားမသိ အရပ်က လည်းမြင့်မြင့်၊ ရင်အုပ်ကျယ်ကျယ်နှင့် လက်မောင်းကြွက်သားများလည်း တင်းတင်းရင်းရင်း ရှိသည်၊
မျက်နှာကလည်းအင်မတန်ခန့်ညားပြီး ပြေပြစ်သူဖြစ်လေရာ၊ နိုင်နိုင့် အဖို့ ရင်ခုံချင်စရာ ဖြစ်လာရလေသည်၊ သူ့ယောက်ျား၊ စစ်ဆင်ရေးသွားနေတာလည်း ကြာပြီမဟုတ်လား၊ ကျောင်းမှာထည်းက ယောက်ျားလေး များစွာ အတွေ့အကြုံရှိဘူးသူ၊ ဦးချစ်ဆွေမှ အစ ကိုယ့်ထက် အသက်ကြီးသူ အမျိုးသားများ အပေါ်မှာ ပို၍ တပ်မက်မှုရှိနေသော နိုင်နိုင် အဖို့၊ ငတ်နေတာလည်းကြာပြီမဟုတ်လား၊ အိမ်ထောင်ကျပြီးကထဲက တချောင်းကိုင်ဖြစ်နေရတာ ပျင်းသလိုလိုရှိရသည့်ကြားက အဲဒီတချောင်းကလည်း မစားရတာကြာပြီ မဟုတ်ပါလား၊ နိုင်နိုင့် စိတ်ထဲ မှာတော့ ဒီလို အခွင့်အရေးမျိုးဆိုတာ တော်တော့်ကို ကံသီလို့ရတာပဲလို့တွေးနေမိသည်၊ အင်း ဒီခရီးစဉ်အတွင်း မှာ ကိုယ်လိုချင်တာကို ရအောင်မလုပ်နိုင်လို့ကတော့ နင်တော်တော်ညံ့တယ်ပြောရမှာပဲ လို့ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ပြန်ပြောနေမိလေတော့သည်။
ဦးအောင်အောင်ဆွေမှာလည်း ခေသူမဟုတ်ခြေ၊ နဂိုထဲက မိန်းမ ဝါသနာပါသူဖြစ်ပြီး ဟော်တယ်လုပ်ငန်း လည်း လုပ်လာခဲ့သူမို့၊ မိန်းမပေါင်းများစွာနှင့် အတွေ့အကြုံရှိဘူးပြီး၊ ယခုထိလည်း ကဲနေသူဖြစ်လေသည်။ အခုလည်း သူတို့ ဟော်တယ် သုံးခု အနက်၊ တခုမှာ ခန့်ထားသည့် ဟော်တယ်မန်နေဂျာမလေး မေသူစိုး နှင့် ညှိ နေ လေသည်၊ တခါတလေ ဟော်တယ် သွားစစ်သလိုနှင့် ထိုဟော်တယ်က အခန်းတခုမှာ မေသူစိုးကို ဖြုတ်လေ့ရှိလေသည်၊ သို့သော်လည်း ဝန်ထမ်းများ ရိပ်မိသွား နိုင်သည့် အန္တရာယ်ရှိသောကြောင့် သူတို့ မိသားစု ရဲ့ ဗေကေးရှင်းဟုန်းမ် လို့ခေါ်လို့ရတဲ့ ၊တောင်ပေါ်မြို့ကလေး က အိမ်ကို ခေါ်သွားပြီး ဗြင်းလေ့ရှိသည်။
ဦးအောင်အောင်ဆွေက ကားကို တောင်တက်လမ်းကွေ့ကွေ့ကောက်ကောက်တွေမှာ ကျွမ်းကျင်စွာ မောင်းလာရင်းက နိုင်နိုင်ကျော့နွယ်နှင့် စကားစမြီ ပြောလာခဲ့လေသည်။ နိုင်နိုင် ၏ အမူအယာပုံပန်း သဏ္ဍန်ကို လေ့လာလိုက်တာနှင့် သူကြံရင် ရနိုင်မည်ဆိုတာကို ဦးအောင်အောင်ဆွေ ကသိနေပြီ။ နိုင်နိုင့် ပုံစံကလည်း မဆွတ်ခင်က ညွှတ်နေတဲ့ပုံမျိုး၊ သူ့ကို စကားပြောတာက အစ၊ ပေါင်ပုတ်လိုက်၊ ပုခုံးစွန်းလေး တိုက်လိုက်နှင့်၊ ဆိုတော့၊ စားနေကြကြောင်ပါးကြီး ဦးအောင်အောင်ဆွေ တယောက် ပုဆိုးအောက်မှ လီးက အတွင်းခံဘောင်းဘီထဲမှာကို အတင်း ရုန်းထနေရသည်။ လမ်းကလည်း တောင်တက်လမ်း၊ ကွေ့ကွေ့ကောက်ကောက် ဆိုတော့ ဂီယာကလည်း တချိန်လုံးချိန်းနေရ သည်၊ သူ့လက်တွေက နိုင်နိုင့်ပေါင်လုံလေးကို ထိမိနေသော်လည်း နိုင်နိုင်က နေရာအကျယ်ကြီးရှိရဲ့သားနဲ့ မလှုပ်၊ ဦးအောင်အောင်ဆွေက နိုင်နိုင့်ကို သူတို့ အပန်းဖြေ အိမ်လေး သို့ တန်းခေါ်သွားပြီး လုပ်ရင်တောင် ရနေပြီဆိုတာသိနေသော်လည်း ၊
ဒီတခါတော့ သူ မုဆိုးမလုပ်ပဲ နှင့် သားကောင် အနေဖြင့် လှုပ်ရှားလိုက်အုန်းမည်ဟု၊ တွေးရင်း သဘောကျနေမိသည်။ ဒီလောက်တောင် ဆာနေတဲ့ ကောင်မလေးကို ငါ မလုပ်တတ်မကိုင်တတ် အဖိုးကြီးပုံ ဖမ်းနေလိုက်အုန်းမည်၊ အဲဒါမှ သူလည်း ပိုပြီး စိတ်တက်ကြွမည်ဟု တွေးလိုက်၏၊ လမ်းမှာ ခနတဖြုတ်နား ၊ လဘက်ရည်ရေးဘာလေးသောက်တော့လည်း ငြုတုတု ဟိုထိဒီထိ လုပ်လာသော နိုင်နိုင့်ကို အားနာသလို၊ မခုပ်တတ်သည့်ကြောင်အိုကြီးလို လုပ်နေလိုက်သဖြင့်၊ နိုင်နိုင်တယောက် ပိုအတင့်ရဲလာ၏၊ ဦးအောင်အောင်ဆွေလည်း အဲလို ကစားရတာကို ပျော်နေမိသည်။ နိုင်နိုင့် ကိုယ်လုံးလေးကို မသိမသာခိုးကြည့်ရင်းလည်း သွားရည်ကျနေရသည်၊
အင်း သူအခု လုပ်နေရသော မေသူစိုး ကတောင် နိုင်နိုင်ထက် ၅နှစ်လောက်တော့ ကြီးအုန်းမည်၊ နောက်ပြီး မေသူစိုးက ခလေးတယောက်အမေ၊ နိုင်နိုင်က ရုပ်အချောစားကြီးမဟုတ်သော်လည်း အသားညိုညို ဖြင့် စွဲဆောင်မှုတော့ ရှိသည်၊ ခလေးလည်း မမွေးဘူးသေး၊ နို့ထွားထွား၊ ဖင်ကားကား ဆိုတော့ အားမနာ တမ်းလုပ်လို့ရမည့် ဘော်ဒီမျိုး မဟုတ်လား။ ဦးအောင်အောင်ဆွေက တောင်ပေါ်မြို့ကလေးရောက်တော့ နာမည်ကြီး ရေတံခွန်ရှိရာကို ပထမဆုံး သွားလိုက်သည်၊ ရှုခင်းတွေက လှ ရေသံလေးတွေနဲ့ သာယာလှသဖြင့် နိုင်နိုင်တယောက် အတော်ပျော်မိသည်၊ ကြိုးတံတားလေးကို ဖြတ်လျှောက်တော့ နိုင်နိုင် တယောက်ကြောက်သဖြင့် ဦးအောင်အောင်ဆွေ၏ လက်မောင်းကို တွယ်ဖက် ၍ လျှောက်သည်၊ သူ့နို့ကြီးတွေက ဦးအောင်အောင်ဆွေ လက်မောင်းကို အိနေအောင် ဖိထားသည်။
ဦးအောင်အောင်ဆွေ ၏ သန်မာသော ကြွက်သား များ၏ အထိအတွေ့က နိုင်နိုင့် ကို ရင်ထဲ တလှပ်လှပ်ဖြစ်စေသည်၊ ကြိုးတံတားလေး လှေခါးမှ ဆင်းတော့ ရေတွေ ရွှဲနေသည့်သစ်သား လှေခါးထစ်များမှာ ဒေါက်ဖိနပ်ဖြင့် ချော်ကျမည် စိုးသဖြင့် ဦးအောင်အောင်ဆွေက နိုင်နိုင့် လက်ကလေးကို ဆွဲ၊ ခါးကလေးကို ထိန်းကာ ဆင်းလာရသည်၊ နိုင်နိုင့်မှာ ဒူးတွေ မခိုင်ချင်တော့၊ ပေါင်ခွဆုံမှာတောင် အရည်တွေ စို့နေရပြီ။ ဦးအောင်အောင်ဆွေကလည်း အရပ်ကြီးမှာ မြင့်မားလှသဖြင့် နိုင်နိုင့်မှာ သူ့ကိုယ်ကို လှဲပြိုမသွားအောင်ထိန်းရင်း ပြန်လည်တွယ်ဖက်ထားရာ၊ သူ့မျက်နှာလေးမှာ ဦးအောင်အောင်ဆွေ၏ ရင်ခွင်ထဲ ရောက်နေရလေသည်။ ဦးအောင်အောင်ဆွေက သူ့ရင်ခွင်ထဲ မှာ ကိုယ်လုံးလေးတုန်တုန်ရီရီ ဖြစ်နေရှာသော နိုင်နိုင် ကို အသာဖက်ထားရင်း ကျောပြင်လေးကို ပွတ်ပေးလို့၊ ..ဟင်..နိုင်နိုင် ကိုယ်လုံးလေးလည်း တုန်လို့ပါလား၊ အမြင့်ကို ကြောက်တယ်ထင်တယ်.. ..
ဟုတ်..ဟုတ်..ဦးဦးအောင်….နိုင့်ရင်ထဲ ဘယ်လိုဖြစ်သွားမှန်းမသိဘူး အောက်ကို ငုံ့ကြည့်လိုက်မိလို့ထင်တယ်… ..အင်း ခနနားလိုက်အုန်းလေ နိုင်နိုင်..မလှုပ်နဲ့အုန်း၊ နောက်တဆင့်ကို ဦး တွဲခေါ်သွားမယ် နိုင်နိုင် မျက်စေ့မှိတ်ချင်မှိတ်ထားလိုက်ပေါ့… ထိုကဲ့သို့ပြောနေစဉ်မှာပင် ဦးအောင်အောင်ဆွေ၏ ရင်ဘတ်တွင်နိုင်နိုင် ၏ နို့ကြီးများမှာလည်း ဖိကပ်မိနေပြီး၊ ဦးအောင်အောင်ဆွေက နိုင်နိုင့်ကျောပြင်လေးကို သူ့လက်ဖဝါးကြီးဖြင့် ပွတ်သပ်ပေးနေလေသည်။ နိုင်နိုင်မှာ သူ့ ပေါင်ရင်းပေါ်သို့ ထိုးထောက်လာသည့် ပူပူနွေးနွေး ကြီးမှာ ဦးအောင်အောင်ဆွေ၏ ပုဆိုးအောက်မှ လီးကြီးမှန်း သိနေသဖြင့် တိတ်တခိုးလေး ပျော်နေမိလေသည်။ နောက်ဆုံးအဆင့် လှေခါးထစ်များကို ဆင်းကြတာတွင်တော့ ဦးအောင်အောင်ဆွေက နိုင်နိုင့်ခါးလေးကိုသိုင်းဖက်ပြီး ဆင်းလာခဲ့ကြလေတော့သည်၊
အောက်ခြေမှ လဘက်ရည်ဆိုင်လေးတွင်ထိုင်ပြီး ခနနားကြတော့ ဦးအောင်အောင်ဆွေမှာ ဘောတောင် အောင့်ချင်သလိုဖြစ်လာရလေသည်၊ ထို့ကြောင့် အချိန်သိပ်မဆွဲချင်တော့ပဲ။ ..နိုင်နိုင်..ဦးတို့ ဒီမြို့တက်လာရင် အနားယူဖို့ ဆိုပြီး ဝယ်ထားတဲ့ အိမ်လေးရှိတယ်..အဲဒီမှာ ခနသွားနား ကြရအောင်လား၊ အဲဒီက ဦးတို့ ခိုင်းတဲ့သူတွေကို စားစရာသွားဝယ်ခိုင်းပြီး အဲမှာပဲ စားကြမယ်လေ.. ..ကောင်းသားပဲ ဦးဦးအောင်…. ဦးအောင်အောင်ဆွေတို့ အိမ်လေးရှိရာသို့ရောက်သည်နှင့် သူတို့၏ ခြံကို စောင့်ပေးသော ဦးသိန်း ကထွက်လာပြီး တံခါးဖွင့်ပေးသည်၊ ဦးသိန်းမှာ ဦးအောင်အောင်ဆွေ ၏ တပည့်ရင်းဖြစ်ပြီး ဦးအောင်အောင်ဆွေ မိန်းမတွေ ခေါ်ခေါ်လာပြီး ဖြုတ်သည်မှာ ရိုးနေပြီ မို့ ထူးထူးဆန်းဆန်း မပြောတော့ပေ။
ဦးအောင်အောင်ဆွေက နိုင်နိုင် က ကိုယ့်ဘာသာ လျှောက်နိုင်နေပြီ ဖြစ်သော်လည်း စိုးရိမ်သလိုလိုဖြင့် ခါးလေးကို ကိုင်ပြီး အိပ်ခန်းရှိရာသို့ လိုက်ပို့လေသည်၊ အိပ်ခန်းထဲမှာ ရေချိုးခန်း၊ အိမ်သာလည်း ရှိသဖြင့် နိုင်နိုင့်ကို သုံးချင်က သုံးဖို့၊ သူ အစားအသောက်တွေအတွက် စီစဉ်လိုက်အုန်းမည်ဆိုကာ ထွက်သွားလိုက်လေတော့သည်။ ဦးအောင်အောင်ဆွေ က ဦးသိန်းကို အစားအသောက်များ ဝယ်ဖို့နှင့် ပြီးပါက နောက်ဖေးမီးဖိုထဲတွင် ပြင်ထားပေးဖို့၊ အိမ်ရှေ့နှင့် အိပ်ခန်းဖက်ကို မလာဖို့ မှာလိုက်လေသည်၊ ဦးသိန်းကလည်း သဘောပေါက်ပါသည်၊ နောက်ဖေးပေါက်မှာပင် အစားအသောက်များ ဝယ်ဖို့ ထွက်သွားလေတော့သည်။ ဦးအောင်အောင်ဆွေ အိပ်ခန်းတံခါးကို အသာတွန်းကြည့်ရာ ဂလန့်မချထားသဖြင့် ဝင်လာခဲ့လိုက်ရာ ကုတင်ပေါ်၍ နဖူးပေါ်လက်တင်လျှက် ပက်လက်လေး လှဲနေသော နိုင်နိုင့်ကို တွေ့ရလေသည်၊
ဦးအောင်အောင်ဆွေက လိုရမယ်ရ တံခါးကို အသံမကြားအောင်စေ့ပြီး ဂလန့်ချလိုက်လေသည်၊ နောက်တော့ ကုတင်စောင်း နိုင်နိုင့် အနားထိုင်လိုက်ပြီး၊ ..ဘယ်လိုနေသေးလဲ နိုင်နိုင်.. ..အင်း..သက်သာသွားပါပြီ၊ ကျေးဇူးပဲနော် ဦးဦးအောင်… ..အမလေးကွာ ဒါလေးများ ကျေးဇူးတင်စရာမလိုပါဘူး၊.. နိုင်နိုင် က မျက်စေ့ပေါ်မှ လက်ကို ဖယ်ပြီး ကြည့်လိုက်ရာ သူ့ကို ငုံ့မိုးကြည့်နေသော ဦးအောင်အောင်ဆွေကို တွေ့လိုက်ရလေသည်၊ ဦးအောင်အောင်ဆွေမှာ အတော်ပင် တဏှာကြောက တင်းနေပြီ ဖြစ်ရာ ညိုချောလေးချောနေသော နိုင်နိုင့်ကို ငုံ့ကာ နမ်းလိုက်မိလေသည်၊ ပထမတော့ နဖူးလေးကို ဖြစ်သည်၊ သို့သော်လည်း နိုင်နိုင်က စိတ်ဆိုးပုံမပြပဲ၊ ..အို့…မတော်ဘူးထင်တယ် ဦးရယ်…. လို့ပြောနေတာနဲ့ နူတ်ခမ်းကို ပြောင်းနမ်းလိုက်လေသည်၊
နိုင်နိုင်က ချက်ခြင်းပင် တုန့်ပြန်အနမ်းတွေ ပေးလာတော့သည်၊ ကုတင်ပေါ်မှာ နှစ်ယောက်သား လူးလိမ့်နမ်းရင်းက အဝတ်အစားတွေကို တစမကျန်ချွတ်ပြစ်လိုက်ကြလေသည်။ ဦးအောင်အောင်ဆွေ၏ အတွေ့အကြုံရှိနေသော၊ လက်တွေ ပါးစပ်တွေ၊ လျှာတွေက နိုင်နိုင့်တကိုယ်လုံးက ကာမခလုပ်တွေ ရှိသမျှကို အကုန်ဖွင့်ပေးနေသလိုပဲ၊ နိုင်နိုင့်ခမျာ သူ့စောက်ဖုတ်ကလေးမှာ ဒီလောက် အရည်ရွမ်းရွမ်း မစိုဖြစ်တာကြာလှပြီကော။ သူ့ပထွေး ဦးချစ်ဆွေနှင့်တုန်းက လိုမျိုး အရသာတွေ ပြန်တွေ့နေရလေသည်။ ဦးအောင်အောင်ဆွေက နိုင်နိုင့် ပေါင်တန် ဖြောင့်စင်းစင်းလေး နှစ်ချောင်းကို ဒူးထောင်လျှက်ကားစေပြီး သူ့မျက်နှာကို နိုင်နိုင့်စောက်ဖုတ်လေးပေါ်အပ်ကာ နိုင်နိုင်၏ စောက်ဖုတ်နူတ်ခမ်းသားလေးများကို ရက်ပေးလေသည်။
နိုင်နိုင်က အိပ်ယာပေါ်မှာ ကော့ပြန်တက်နေပြီး တချီပြီးသွားရှာလေသည်၊ ဦးအောင်အောင်ဆွေက ဆက်ပြီး ရက်နေသေးသဖြင့်၊ နိုင်နိုင်ခမျာ မနေနိုင်ရှာတော့ပဲ ဦးအောင်အောင်ဆွေ၏ လက်မောင်းနှစ်ဘက်ကို အတင်းဆွဲမရင်း၊ …ဦးဦးအောင်..နိုင့်ကို ..လုပ်ပေးပါတော့.. ဟုပြောလိုက်ရှာတော့သည်။ ဦးအောင်အောင်ဆွေ၏ လိင်တန်ထွားထွားကြီးက နိုင်နိုင့် ကို အားရ ကျေနပ်စေခဲ့သလို၊ နိုင်နိုင့်၏ ပြည့်တင်းတင်းနို့ကလေးများ၊နှင့် စေးကျပ်သော စောက်ဖုတ်ကလေးက ဦးအောင်အောင်ဆွေကို လိုးလို့ မဝအောင် ဖြစ်ခဲ့ရပါသည်၊ နိုင်နိုင်ကလည်း ဦးအောင်အောင်ဆွေ၏ လိင်ချောင်းကြီးကို အားရပါးရ စုပ်ပေးခဲ့သလို၊ ဦးအောင်အောင်ဆွေကလည်း နိုင်နိုင့် စောက်ဖုတ်ကို ကောင်းကောင်းရက်ပေးခဲ့ပါသည်။ သို့ဖြင့် သူတို့ နှစ်ဦး၏ ခရီးစဉ်မှာ ရေတံခွန်တခုထည်းဖြင့် အဆုံးသတ်ခဲ့ကြပါသည်။ …ကောင်းလိုက်တာ နိုင်လေးရယ်… ..နိုင်တော့ ဦးဦးကို ဆွဲသွားပြီ ထင်တာပဲ၊
ဦးဦးက အရမ်းကျွမ်းတာပဲ..ခစ်ခစ်… နိုင်နိုင်နှင့် ဦးဦးတို့ ဇာတ်လမ်းက သူတို့ မြို့ပြန်ရောက်သည်အထိဆက်လာသည်၊ ဦးအောင်အောင်ဆွေ အဖို့ကလည်း နိုင်နိုင်တည်းနေတာက သူတို့ပိုင်တဲ့ ဟော်တည်ဆိုတော့ သော့အပိုတချောင်းယူထားလိုက်ရုံပင်၊ နိုင်နိုင်ကလည်း အမြဲကြိုဆိုလျှက်။ အိဖြူကလည်း သူ့သူငယ်ချင်းနှင့် သူ့ယောက္ခထီး တို့ ဆက်ဆံရေးကို ရိပ်မိသည်၊ သူ့သူငယ်ချင်းအကြောင်းလည်း သူသိသည်မို့၊ ..နိုင်နိုင်ရယ်..နင်ကတော့ တကယ်ပဲ.. ဟုသာပြောမိရှာသည်၊ သူ့သူငယ်ချင်း ရောက်တုန်း ပျော်နေရင်ပြီးတာပဲလေဟု လွှတ်ပေးထား လိုက်လေသည်။ အိဖြူ တယောက် တိမ်တိုက်တွေကြားမှာ လှဲလှောင်းလို့ ၊ တိမ်တွေကလည်း ဖြည်းဖြည်းချင်း လွင့်မျှောလို့ ငြိမ့်ငြိမ့်ကလေး သူ့ကို ပုခက်လွဲပြီး ချော့သိပ်နေသလိုပဲ၊
အဲဒီအချိန်မှာ တယောက်ယောက်က သူ့ပေါင်နှစ်လုံးကို လာခွဲလိုက်သည်၊ သူငုံ့ကြည့်လိုက်တော့ ကိုမျိုးဆွေ၊ အို ကိုမျိုး ဘာတွေလုပ်နေတာလဲ၊ သူ့ အတွင်းခံဘောင်းဘီလေးကိုလည်း ဆွဲချွတ်သွားပြီ အို့၊ ကိုမျိုးနော် တော်တော် ကဲနေ၊ ဘယ်ကနေဘယ်လိုပေါ်လာသလဲ ကိုမျိုးရယ်၊ အိဖြူလွမ်းနေတာကြာလှပေါ့၊ အို အိဖြူ အဖုတ်လေးကို သူနမ်းနေတယ်၊ ဟွန့် သူတခါမှလည်း မလုပ်ဘူးပဲနဲ့၊ အိဖြူကြည့်ဖူးတဲ့ ဟိုရုပ်ရှင်ကားတွေမှာ ပါပါနေတာလေ၊ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ အဲဒီနေရာတွေကို အမျိုးသားတွေ အားရပါးရ လျှက်ပေးတာလေ၊ အိဖြူကြည့်ကြည့်ပြီး ကြက်သည်းထမိတယ်၊ ကိုမျိုးများ သူ့ကို လုပ်ပေးလေမလားလို့ စိတ်ကူးလည်း ခနခန ယဉ်မိတယ်၊ ဒါပေမဲ့ ကိုမျိုးက မလုပ်ပေးဘူးလေ။
အိဖြူ ပါးစပ်က ဘယ်လိုပြောလို့ထွက်မှာလဲလို့။ ခုတော့ အိဖြူရဲ့ ပေါင်နှစ်လုံးကြားမှာ သူ့ခေါင်းကြီးဝင်လို့ အိဖြူအဖုတ်လေးကို အားရပါးရ သူ့လျှာစိုစို နွေးနွေးကြီးနဲ့ လျှက်နေလိုက်တာ၊ အိဖြူ ဖင်ကလေးပါ ကော့ပေးလိုက်မိတယ်၊ အိဖြူ သူ့ကိုယ်အောက်က တိမ်စိုင်တွေကိုလည်း လက်နဲ့ ဆုပ်ကိုင်ထားလိုက်မိတယ်၊ သူ့လျှာကြီးက အိဖြူရဲ့ အစေ့လေးကို ဖိပြီးထိုးပေးရင်းက အိဖြူရဲ့ စောက်ခေါင်းနံရံလေးတွေကို ပါမှီသလောက် လှမ်းရက်လိုက်တော့၊ အိဖြူကိုယ်လုံးလေး တဆတ်ဆတ်တုံခါပြီးတော့ ကာမ အရသာကို အထွတ်အထိတ်ရောက်သွားခဲ့ရတယ်၊ အိဖြူမောလိုက်တာ ကိုမျိုးရယ်။ နောက်တော့ အိဖြူ အမောဖြေနေလို့မှ မဆုံးသေးဘူး အိဖြူရဲ့ ပေါင်နှစ်လုံးကို ထပ်ဖြဲပြီးတော့ သူ့ကိုယ်ကြီးဝင်လာတယ်၊ နောက်တော့ အိဖြူ စောက်ဖုတ်လေး အဝမှာ ပူနွေးနွေး မာမာ အချောင်းကြီး တေ့ပြီး အသာဖိသွင်းလာတယ်၊
အား နာတယ် ကိုမျိုးရယ်၊ ကိုမျိုး အရင်ကလိုမဟုတ်ပါလား အရမ်းကျပ်နေတယ်၊ အို့၊ အိဖြူအိပ်ယာကလန့်နိုးလာတယ်၊ သူ့အိပ်မက်ကလည်း တကယ်လိုပဲလို့တွေးနေတုန်းပဲ သူ့စောက်ဖုတ်လေးထဲ တင်းတင်းကျပ်ကျပ်ကြီးခံစားလိုက်ရတယ်၊ ဟင်ဒါဆိုရင် တကယ်ပေါ့၊ အို၊ ကိုမျိုးဘယ်တုန်းကပြန်ရောက်နေတာလည်း၊ တခါထဲဘာမပြောညာမပြောနဲ့၊ အိဖြူပြုံးတော့မလိုဖြစ်သွားရာက တချိန်ထည်းမှာ ထိပ်လန့်သွားခဲ့ရသည်။ ဟင်၊ ငါ၊ ငါ၊ အိပ်နေတာ ငါ့အိပ်ယာမှ မဟုတ်တာ၊ ဒါဆိုရင်၊ ဟောတော့။ ဦးအောင်အောင်ဆွေ ရေမိုးချိုး အမွှေးနံ့သာ ဆွတ်ဖြန်းပြီးတော့ ဘလက်လေဘယ်လေး လက်နှစ်လုံးလောက်ကို ရေခဲလေးနဲ့ အသာလှုပ်ခပ်ဖျော်ရင်း ဇိမ်ခံစုပ်လိုက်သည်၊ တခွက်ကုန်သွားတော့ နာရီကို လှမ်းကြည့်လိုက်သည်၊
အင်း သွားဖို့တော့ အချိန်ကျပြီ၊ အခုန ရေမချိုးခင်တုန်းက သောက်ထားတာနဲ့ ဆိုတော်တော်တော့ရေချိန်ကိုက်နေပြီ မဟုတ်လား၊ ဒီညမှာ သူ့သူငယ်ချင်း နိုင်ငံခြားမှာ ပြန်လာလည်တုန်းလက်ဆောင်ပေးသွားတဲ့ ဆီယားလာ့ ကို စမ်းဖို့ စဉ်းစားထားလို့ ရင်နည်းနည်းခုံနေသည်၊ အဲဒီကောင်အပြောအရတော့၊ မင်းစိတ်လာလို့ကတော့ လီးက နှစ်ရက်လောက် ဆက်တိုက်ထောင်နိုင်တယ် ဆိုပဲ၊ ဟ မင်းဟာက အဲလောက်လီးအကြာကြီးတောင်ရရင်သေပြီပေါ့ကွလို့ ပြောလိုက်တော့၊ သူငယ်ချင်းက အားရပါးရရီမောပြီး၊ အဲလို မဟုတ်ဘူးကွ၊ သူက မင်းစိတ်ထလာတာနဲ့တောင်ပြီး လုပ်ဖို့ရယ်ဒီဖြစ်တာ၊ မင်းတချီပြီးသွားရင်ခနပျော့သွားရော၊ မင်းစိတ်ပြန်ထလာမှ ပြန်တောင်တာ၊ မင်းစိတ်ပြန်မထတော့ဘူးဆိုရင်လည်း မတောင်တော့ဘူး၊တဲ့။
ဆိုတော့စိတ်ဝင်စားစရာပဲ၊ ဦးအောင်အောင်ဆွေမှာ လီးတောင်ဖို့က ပြဿနာမရှိ၊ သို့သော်လည်း အခု အသက်အရွယ်မှာ က ငယ်ငယ်ကလိုမဟုတ်တော့ တချီပြီးသွားရင် နောက်တခါပြန်တောင်ဖို့ဆိုတာ တော်တော်နှင့်မလွယ်တော့ ကံကောင်းရင်တော့ နေ့တဝက်လောက်နှင့်ပြန်ထနိုင်သည်၊ သို့သော် နိုင်နိုင့် လိုမျိုးကောင်မလေး မျိုးက ကိုယ့်ဘေးမှာ တချိန်လုံးမရှိ၊ ငယ်ငယ်တုန်းကလို တညထဲ နှင့် လေးချီလောက်ဆွဲဖို့ဆိုတာက ဆေးမပါရင်မဖြစ်နိုင်တော့၊ သူဒီည နိုင်နိုင်နှင့် တညလုံးနေမည်ဟု မှန်းထားသဖြင့် သူ့သူငယ်ချင်းပေးသော ဆေးကို အိမ်အထွက်မှာ သောက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်တော့သည်။ ဟော်တယ်ရောက်တော့ ဟိုလိုလို ဒီလိုလိုနှင့် နိုင်နိုင်ရှိသော အထပ်သို့ တက်သွားပြီး သူ့မှာပါလာသည့်သော့ဖြင့် အသာဖွင့်ဝင်လိုက်လေသည်၊
အခန်းတခုလုံးလည်း မှောင်နေပြီး နိုင်နိုင်တယောက် ကုတင်ပေါ်မှာ အသက်မှန်မှန်ရှုရင်း အိပ်ပျော်နေသည်ကို မှောင်ထဲမှာ မှန်းလို့ရလိုက်သည်၊ နိုင်နိုင့်ကိုလည်း စချင်တာနှင့် အသံမကြားအောင် ခြေဖျားထောက်ပြီး ကုတင်ဘေးကိုလာလိုက်သည်၊ မှောင်ထဲမှာပဲ လက်ဖြင့်အသာစမ်းပြီး အတွင်းခံဘောင်းဘီလေးကို ရအောင်ချွတ်လိုက်သည်၊ ထမိန်ကို ပေါင်ရင်းနားထိလှန်တင်ရင်း ဘာဂျာ ကောင်းကောင်းစပေးလိုက်သည်၊ သူ့စိတ်ထဲမှာ တခုခုတော့ မှားနေသည်ဟု ထင်မိသော်လည်း ဘာမှန်း သေခြာမသိ၊ စောက်ဖုတ်အနံ့နှင့် အရသာက သူ့ဦးနှောက်ကိုလည်း တွေးခေါ်စဉ်းစားဆင်ခြင်သည့်အလုပ်ကို ခန အနားယူခိုင်းထားလိုက်တာလည်းဖြစ်နိုင်သည်၊ ဘာမှ တွေးလို့မရ၊ လျှက်ကောင်းကောင်းနှင့် စောင့်ဖုတ်တပြင်လုံးနှင့် ပေါင်တွင်းသားလေးတွေပါ ရက်ပြစ်လိုက်မိသည်၊ စောက်စေ့လေးနေရာကို လျှာထိပ်ဖြင့်ထိုးထိုးဆွရင်းက စောက်ဖုတ်နူတ်ခမ်းတွန့်တွန့်လေးတွေကိုပါ ဆွဲစုပ်လိုက်တော့ နိုင်နီုင် သူ့ခေါင်းကိဆံပင်တွေကို ဆွဲဆုပ်ကိုင်ရင်း တချီပြီးသွားခဲ့ရသည်။
ထိုအခါမှာတော့ ဦးအောင်အောင်ဆွေ၏ လီးကြီးမှာလည်း မတရားကို တောင့်တင်း နေပြီ ဖြစ်ရာ သူ့ပုဆိုးကို ဖြည်ချရင်း နိုင်နိုင့် ပေါင်နှစ်လုံးကြားမှာ နေရာယူလိုက်သည်၊ နိုင်နိုင်တယောက် တချီသာပြီးသွားသည်ခုထိ အိပ်မက်လို့ထင်နေသေးလားမသိ အဲလောက်တောင် ဇိမ်ခံတဲ့ကောင်မလေး ကောင်းကောင်းလိုးထည့်လိုက်အုန်းမယ်ဟု စိတ်ကူးနှင့် ဦးအောင်အောင်ဆွေ တယောက်၊ သူ့လီးကြီးကို အဖုတ်ဝမှာ စမ်းတေ့ရင်း အသာဖိသွင်းချလိုက်လေတော့သည်။ ..အာ့..အီး..အမေ့… ထိုအခါကျမှ ညီးသံထွက်လာတော့သည်၊ ထိုညီးသံကို ကြားလိုက်ရသောခန ဦးအောင်အောင်ဆွေ နည်းနည်းကြောင်သွားသည်၊ ဟင် နိုင်နိုင့်အသံမဟုတ်ပါလား၊ သို့ပေမဲ့ သူ့လီးက အဖုတ်ထဲ ဒစ်မြုပ်နေပြီ၊ ဒီလိုအချိန်မှာတော့ ဘယ်ယောက်ျားမှ နောက်ပြန်ဆုပ်မည်မထင်တော့၊ သူက ရှေ့ကိုသာတိုး၍ လီးတချောင်းလုံးဝင်အောင်ဖိသွင်းချလိုက်သည်။
..ဖွတ်…ဗျိ… ..အား….. ညနေခင်း အိဖြူက စာရင်းတွေပိတ်နေသဖြင့် အလုပ်ရှုတ်နေပြီး နိုင်နိုင့်ကို ညကျမှ ငါနင့်လာခေါ်မယ်ဟု ပြောထားသဖြင့် နိုင်နိုင်ကလည်း အေးဆေးပါ ငါဒီနားဟိုနား ရှောက်သွားလိုက်အုန်းမယ်ဟု ပြောထားခဲ့လေသည်။ နိုင်နိုင်တယောက် ဟော်တယ်ပြန်ရောက်တော့ သူ့သူငယ်ချင်းတယောက်က သူရောက်နေတယ်ကြား၍ လှမ်းဖုန်းဆက်ထားသည်၊ သူက ဖုန်းပြန်ခေါ်တော့ သူ့ကို လာခေါ်မည်၊ တခုခု ကျွေးမည် ရုပ်ရှင်သွားကြည့်ကြမည်ဟု အစီအစဉ်ဆွဲသည်၊ အင်း အိဖြူကို နောက်မှ ပြောတော့မယ်ဟု ဆုံးဖြတ်ကာ လာခေါ်သော သူ့သူငယ်ချင်းနှင့်လိုက်သွားခဲ့လေသည်။ ရုပ်ရှင်ကြည့်၊ စားသောက်၊ စကားတွေပြောနှင့် တော်တော်ညနက်မှ သူ့သူငယ်ချင်းက ဟော်တယ်ရှေ့မှာ ပြန်လာချပေးသွားခဲ့လေသည်၊ နိုင်နိုင်လည်း မနက်ကျမှ အိဖြူကို ပြောပြတော့မည်ဟု တွေးကာ သူ့အခန်းရှိရာသို့တက်လာခဲ့လေသည်၊
သူ့အခန်းတံခါးကို သော့ဖွင့်ပြီး တံခါးကို တွန်းလိုက်သည်နှင့်အခန်းထဲမှ အသံက သူ့လက်တွေကို တုန့်ဆိုင်းသွားစေခဲ့သည်၊ ဟင်၊ ဘယ်သူတွေလဲ၊ သူချက်ခြင်းတံခါးကို ပြန်စေ့လိုက်သည်၊ သို့သော်လည်း အဆုံးထိမပိတ်ပဲ နည်းနည်းလေးချန်ထားပြီး အသံကို နားနှင့်ကပ်နားထောင်လိုက်မိသည်၊ လိင်ဆက်ဆံနေကြတဲ့အသံ၊ အဲဒါကတော့ ဘယ်လိုမှ မမှားနိုင်၊ အရှိန်ရပြီး ကောင်းခန်းရောက်နေပြီ၊ သူ့ခေါင်းထဲ မှာ ချက်ချင်း တွေးမိတာက သူ့အခန်းကိုလာကြမှာ သူ့သူငယ်ချင်း အိဖြူရယ်၊ သူ့လက်ရှိဘဲကြီး ဦးဦးအောင်ရယ်၊ တကယ်လို့သူတို့ နှစ်ယောက်သာဆိုရင်တော့ ၊ ယောက္ခထီးနဲ့ ချွေးမပဲ၊ အီး၊ အတွေးနဲ့ပင် နိုင်နိုင့်အဖုတ်လေး ဖောင်းသွားခဲ့ရသည်၊
အရည်လေးတောင် စို့လာရ၏၊ ဟင်း အိဖြူတကောင် အေးပီအေးရက်နဲ့၊ နောက်ဆုံးကျတော့ ဒီလိုပါလားဟု တွေးလိုက်မိလေသည်။ ဒါဆိုအခု သူဘာလုပ်ရမှာလည်း ၊နိုင်နိုင်တယောက် အခန်းတံခါးဝမှာရပ်ပြီးတွေဝေနေမိတော့သည်။ ဦးအောင်အောင်ဆွေနှင့် အိဖြူတို့ နှစ်ယောက်စလုံး ကိုယ်နှင့် ချစ်ပွဲဝင်နေတာ ဘယ်သူလည်းဆိုတာ သိနေကြပြီ။ အခုချိန်မှာတော့ ဘယ်သူမှ ရပ်လိုက်ကြဖို့လည်းမစဉ်းစား၊ အထူးသဖြင့် ဦးအောင်အောင်ဆွေ၊ သူက အိဖြူခါးကလေးကို တင်းတင်းကျပ်ကျပ် ဆုပ်ကိုင်ထားသည်။
သူ့စိတ်ထဲမှာ အရင်ကလည်း အိဖြူကို လုပ်လိုက်ရလျှင် ဆိုတာ ခနခနပေါ်လာဖူးသည်။ ကိုယ့်ချွေးမ မို့မကောင်းပါဘူးလေဟု စိတ်ကို ဖိနှိပ်ချိုးနှီမ်ထားခဲ့ရသည်။ အခုတော့ ကုတင်ပေါ်မှာ ချွေးမချောလေး အဖုတ်ထဲ လီးကြီး ထည့်ကာ အားရပါးရလုပ်နေရပြီ မဟုတ်လား ၊ စိတ်က ပိုတောင် တက်ကြွလာသည်။ အိဖြူကလည်း သူ့ တသက်တာမှာ တချောင်းထဲသာ ကြုံဖူးသူ၊ ခုတော့ သူ့ယောက်ျားနှင့် အကိုင်အတွယ် မတူ၊ အတွေ့အကြုံလည်း ရင့်ကျက်နေသူ ယောက္ခမ ကြီး၏ ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင် ဆောင့်ချက်တွေအောက်မှာ ထူးကဲတဲ့ အရသာကို ခံစားနေရတာမို့ ဦးအောင်အောင်ဆွေရဲ့ ကျောပြင်ကြီးကို တင်းတင်း ပြန်ဖက်ရင်း သူ့ဖင်ကလေးကို ကြွကာကြွကာ ပြန်ကော့ပေးနေမိလေပြီ။
ခုမှတော့ မထူးတော့ပြီ မလား။ အိဖြူတယောက် ကိုယ်လေး တုန်တက်ကာ ကာမ အရသာအထွတ်အထိပ်ရောက်သွားတော့ ဦးအောင်အောင်ဆွေကို တင်းတင်းဖက်ထားရင်းက သူ့လက်သည်းလေးတွေနှင့် ဦးအောင်အောင်ဆွေ ကျောပြင်ကို ကုတ်ခြစ်မိသည့်အပြင်၊ ဦးအောင်အောင်ဆွေ၏ ပုခုံးကိုပါသူ့ပါးစပ်ဖြင့် ကိုက်ဆွဲမိလိုက်လေသည်။ ဦးအောင်အောင်ဆွေက အိဖြူအပြီးမှာ လေးငါးဆယ်ချက်ဆက်ညှောင့် ပေးလိုက်သေးသည်။ ပြီးမှ သူ၏ မာတင်းနေသေးသော လိင်တန်ကြီးကို အိဖြူ စောက်ခေါင်းတွင်းထဲမှာ စိမ်ထားရင်း၊ အိဖြူစောက်ခေါင်း အတွင်းသားများ၏ ရွစိရွစိလှုပ်ရှားနေသည်ကို အရသာခံနေမိသည်။ အိဖြူ ကိုယ်လုံးလေး တောင့်တင်းနေရာမှ ပျော့ကျသွားသည့်အခါ ဦးအောင်အောင်ဆွေ က အိဖြူ ဆံပင်လေးတွေကို မှောင်ထဲမှာပင်စမ်း၍ ပွတ်သတ်ပေးနေလေသည်။ အိဖြူတယောက်ကတော့ ရှက်လွန်းလို့ အသံလည်းမထွက်၊ ခေါင်းကိုသာ ဦးအောင်အောင်ဆွေ၏ ရင်ဘတ်မှာ တိုးကပ်ဖိ ပြီးဖွက်ထားလေသည်။
အိဖြူ၏ အဖုတ်ထဲမှာ မာတင်းနေသေးသည့် ဦးအောင်အောင်ဆွေ၏ လိင်ချောင်းကြီး အတွေ့အကြုံကလည်း အိဖြူအတွက် ထူးဆန်းနေသည်။ သူယောက်ျား ကိုမျိုးဆွေ ဆိုလျှင် တခါတလေ သူ အရှိန်ရတုန်း သုတ်ရည်တွေ ထွက်ပြီး ပြီးသွား ခါ လိင်တန်ကြီးပျော့ခွေ သွားတတ်သည်။ တခါတလေတော့လည်း ပြိုင်တူ ကာမ အရသာ အထွတ်အထိပ်သို့ရောက်လေ့ရှိပါသည်။ သို့သော်လည်း အိဖြူပြီးသွားချိန် မှာ ကိုမျိုးဆွေ၏ လိင်တန်ကြီးက မာဆဲ ရှိနေသည့်အချိန်မျိုး မကြုံဖူးခဲ့ခြေ။ ထို့ကြောင့်လည်း အိဖြူ ပြီးလို့ သူ့စောက်ခေါင်းတွင်းက အသားနုတွေက အထိမခံနိုင်လောက်အောင် ဖြစ်နေချိန် မှာ ဦးအောင်အောင်ဆွေ ၏ မာတင်းကာ အကြောတွေ ဖုထ နေသည့်လိင်တန်ကြီးဖြင့် ပွတ်ဆွဲလိုက်တိုင်း အိဖြူခမျှာ တုံကနဲ ကြက်သည်းတွေပါ ထသွားရသည်။ ထိုအရသာမျိုးကို အခုမှ အိဖြူခံစားဖူးလိုက်ရသည်။ သို့သော်လည်း ကာမ အထွတ်အထိပ်ရောက်သွားပြီးသည်နှင့် ထုံးစံအတိုင်း အသိစိတ်ဝင်လာတော့ ကိုယ့်ယောက်ျား အဖေ နှင့် လိင်ဆက်ဆံမိသည် ဆိုသည့်အသိက လည်း သူ့ကို တုန်လှုပ်ခြောက်ခြားစေသည်သာ မက၊ ရှက်ရွံ့ခြင်းလည်း ဖြစ်စေခဲ့သည်။
သူ့ဘဝတလျှောက်လုံးမှာ အဲလိုမျိုးလည်း တခါမှ မဖေါက်ပြန်ခဲ့ဖူးဘူး ဆိုတော့ နောင်တ လည်းရမိသည်၊ အခု နေ ထပြီး ကိုယ့်ထမိန်၊ အတွင်းခံဘောင်းဘီ တွေရှာပြန်ဝတ်ရမှာ ဦးအောင်အောင်ဆွေကို ဘယ်လိုမျက်နှာချင်းဆိုင်ရမလည်း ၊မတွေးတတ်သဖြင့် အမှောင်ထဲမှာပင် ဦးအောင်အောင်ဆွေကို အတင်းဖက်ထားမိခြင်းဖြစ်လေသည်။ ဦးအောင်အောင်ဆွေ ၏ လက်များက အိဖြူဆံပင်လေးတွေကို ပွတ်ပေးနေရင်းက အောက်ကို ရွေ့လာပြီး အိဖြူ ဘလောက်အင်္ကျီနှိပ်ကြယ်သီး တွေကို တဖျောက်ဖျောက်ဖြုတ်လာတော့ အိဖြူ ဘာလုပ်ရမှန်းမသိ ဖြစ်သွားသည်။ ..အို..ဟင့်အင်း..ဟင့်အင်း.. ပါးစပ်က အသံတိုးတိုးလေး ထွက်သွားပြီး ဦးအောင်အောင်ဆွေ၏ လက်တွေကို လှမ်းဖိတွန်းလိုက်မိသည်။ ဦးအောင်အောင်ဆွေက အိဖြူလက်ကလေးကို ပြန်ဖမ်းဆုပ်ကိုင်လိုက်ပြီး ခေါင်းကိုငုံ့ကာ အိဖြူလည်တိုင်လေးကို နမ်းလိုက်သည်။
သူ့အဖုတ်ထဲမှာ မာတောင် တောင့်တင်းနေသော လိင်ချောင်းကြီးကို စိမ်ထားခံရရင်းမှ လည်တိုင်လေးကို စိုစွတ်စွတ်အနမ်းခံလိုက်ရတော့ အိဖြူကြက်သည်းတွေထသွားရပြန်သည်။ နောက် တော့ ဦးအောင်အောင်ဆွေ၏ လျှာကြီးက အိဖြူလည်တိုင်မှ တဆင့် မေးရိုးလေးတလျှောက်ရက်လာခဲ့သည်။ ခေါင်းအတင်းငုံ့ထားသော အိဖြူမျက်နှာလေးကို ဆွဲမကာ အိဖြူနူတ်ခမ်းအစုံကို ငုံစုပ်တာခံလိုက်ရသည်။ အိဖြူ၏ ခန္ဓာကိုယ်က အလိုလို တုန့်ပြန်လာပြီး ပါးစပ်လေးကို ဟ ပေးလိုက်မိသည်။ ဦးအောင်အောင်ဆွေ၏ လျှာကြီးက အိဖြူပါးစပ်ထဲ တိုးဝင်လာပြီး အိဖြူလျှာလေးကို ပွတ်တိုက်လိုက်တော့ ၊ ဘယ်လို အကြော တွေဆက်နေမှန်းမသိ၊ အိဖြူ ရဲ့ စောက်ခေါင်း အတွင်းသားလေးတွေ ယားကျိကျိ ဖြစ်သွားရသည်။ ဘယ်က ဘယ်လို အိဖြူတယောက် ဦးအောင်အောင်ဆွေ လည်ဂုတ်ကို တွယ်ဖက် ကာ တုန်ပြန်အနမ်းတွေ ပေးနေမိသည်မသိ။
ဦးအောင်အောင်ဆွေ ၏ ကျွမ်းကျင်လှသော လက်တွေက အိဖြူ ဘလောက်အကျီ ကြယ်သီးတင်မက အိဖြူကျောနောက်က ဘရာဇီယာဂျိတ်တွေကိုပါ ဖြုတ်ပြီးနေလေပြီ။ ဖောင်းအိတင်းနေသည့် အိဖြူ နိူ့လုံးလေးတွေက ဦးအောင်အောင်ဆွေ လက်ဖဝါးအောက်မှာ အဖျစ်အညှစ် အဆုပ်အနှယ် ခံနေရချိန်မှာ အိဖြူတယောက် အရှက်ကို မေ့နေလေပြီ၊သူ၏ တင်ပါးလေးကို ကော့ကာကော့ကာ ဖြင့်ဦးအောင်အောင်ဆွေ၏ ငြိမ်နေသော လိင်တန်ကြီးကို ဆွပေးမိလေသည်။ ထိုအခါကျမှ ဦးအောင်အောင်ဆွေက အနမ်းကို မခွာပဲ၊ သူ့လက်ဖဝါးနှစ်ဘက်ကို အိဖြူတင်ပါးလုံး အောက်သို့ တဖက်ဆီ ထိုးသွင်းကာ ဆွဲမ ပြီး အားရပါးရဆောင့်လေတော့သည်။ ..စွတ်..ဖတ်..ဖတ်.. ..အ..အင့်….အီး……. အိဖြူဒီတခါတော့ ပါးစပ်မပိတ်နိုင်တော့ တအိအိ နှင့် ငြီးညူ မိလောက်အောင်ကို အရသာကောင်းကောင်းခံစားနေရလေတော့သည်။
ဦးအောင်အောင်ဆွေကလည်း ဒီတခါတော့ မီးကုန်ယမ်းကုန်ဆောင့်လေရာ များမကြာမှီပင် နှစ်ယောက်စလုံး တင်းတင်းကြပ်ကြပ် ပွေ့ဖက်လိုက်ကြကာ ကာမအရသာအထွတ်အထိပ်သို့ ပြိုင်တူ ရောက်ရှိသွားကြလေတော့သည်။ အိဖြူ မှာ သူ့စောက်ဖုတ်တွင်းသို့ တဒုတ်ဒုတ် ပန်းထုတ်လိုက်သော ဦးအောင်အောင်ဆွေ၏ လရည်များကို နွေးကနဲ နွေးကနဲ နေအောင်ခံစားလိုက်ရလေတော့သည်။ ဒီတခါ တော့ ဦးအောင်အောင်ဆွေ က အနားယူရင်း အိဖြူ ၏ မျက်နှာအနှံ့ကို အမြတ်တနိုးနမ်းရှုံ့လေရာ အိဖြူကလည်း ဦးအောင်အောင်ဆွေကို ပြန်လည်ဖက်ရမ်းနမ်းရှုံ့ပေးမိလေတော့သည်။
ဦးအောင်အောင်ဆွေက အခုမှ နိုင်နိုင့်ကို သတိရသွား၏ သို့သော်လည်း အိဖြူကို လုပ်ရတာ မဝသေးတော့ မပြန်စေချင်သေးသဖြင့်၊ အောက်ထပ်ဆင်းပြီး အကြံအဖန်လုပ်ဖို့ စဉ်းစားလိုက်လေသည်။ ..သမီး အိဖြူ ခနလေးနော် ဖေဖေ ပြန်လာခဲ့မယ် ဘယ်မှ မသွားနဲ့အုန်း.. အိဖြူက အသံမထွက် ခေါင်းကိုသာငြိမ့်ပြသည်။ ဦးအောင်အောင်ဆွေက လုံချည်ကောက်ဝတ်ပြီး အခန်းပြင်ကို ထွက်လာကာ အောက်ထပ်သို့ဆင်းလာခဲ့လေသည်။ သူ့စိတ်ထဲမှာတော့ နိုင်နိုင်ပြန်လာရင် အောက်ထပ်က ကောင်လေးတွေကို သူ့အခန်းပြောင်းပေးထားသည်ဟု ပြောရရင်ကောင်းမလား ဟု စဉ်းစားလာခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း ဟော်တယ်လော်ဘီ တွင်း ဆိုဖာပေါ်တွင်ထိုင်၍ အခန်းထဲမှာ ဖွင့်ထားသော တီဗီထိုင်ကြည့်နေသည့် နိုင်နိုင့်ကို တွေ့လိုက်ရတော့ ပါးစပ်အဟောင်းသားဖြစ်သွားရ၏။ ..ဟင် နိုင်လေး ပြန်ရောက်နေတယ်..ကြာပြီလား ရောက်နေတာ.. ..ဟင့် ..ဦးတို့ အရှိန် အမြင့်ဆုံးရောက်နေတဲ့အချိန်တုန်းကပေါ့..
ခိခိ..အဲဒါကြောင့် တံခါးပွင့်သွား တာတောင်မသိလိုက်ဘူးမလား.. ..အင်းဆောရီးပဲ နိုင်လေးရယ်.. ..အမ်မယ် ဆောရီးမနေပါနဲ့ ရပါတယ်..ဒါနဲ့ ဦးတို့က ဖြစ်နေတာ ဘယ်လောက်ကြာပြီလဲ..ခစ်ခစ်. နိုင်က နိုင့်သူငယ်ချင်းကို ကျောင်းတုန်းက လိုရိုးရိုးကြီးလေးမေ မှတ်နေတာခစ်ခစ်.. ..နိုင်လေး ကို ဦးပြောရင်လည်းယုံပါ့မလား..အခုဟာက ပထမဆုံးအကြိမ်ပဲ… ဦးအောင်အောင်ဆွေက ဖြစ်ပျက်ပုံကို ရှင်းပြလိုက်သည်။ နိုင်နိုင် တယောက် နားထောင်ရင်း အဖုတ်မှ အရည်တွေတောင် စို့လာသည်။ သူနှင့် သူ့ပထွေးတုန်းက အဖြစ်အပျက်တွေကိုတောင် မျက်စေ့ထဲပြန်ပေါ် လာခဲ့ရသည်။ …အင်း အဲတော့ အိဖြူက နိုင်ပြန်လာတာသိလား.. ..ဘယ်သိအုန်းမလဲ အခုအခန်းထဲမှာ အိပ်ကျန်ခဲ့တယ်.. ..နိုင်ဘယ်လိုလုပ်ပေးရမလဲ ဦးပြန်တော့မှာလား..
.အဟီး နိုင်လေး ဦးကို စိတ်မဆိုးဘူးမလား.. ..ဘာလို့ဆိုးရမှာလည်း.. ဦးကို နိုင်က ပိုင်တာမှ မဟုတ်တာ ..ခစ်ခစ်..နိုင်ဆိုလိုချင်တာက ဦးပြန်တော့မယ်ဆိုရင် နိုင်က အခုမှ ရောက်လာသလိုနဲ့အခန်းကိုပြန်လိုက်မယ်လေ..မသိချင်ယောင်ဆောင်မှာပေါ့. ..အဲဒါပြောမလို့ နိုင်လေးဦးကို စိတ်ဆိုးမလားဆိုတာ.. ဦး အိဖြူကို ချစ်လို့မဝသေးဘူး အခွင့်အရေးရတုန်းဆက်ချစ်ချင်လို့. ..ဟောတော့ ခစ်ခစ်..ဦးကတော့ လေ တကယ်ပဲ၊ ခစ်ခစ် ဒါဆိုနိုင်က ဘာလုပ်ပေးရမှာလဲ.. ..နိုင်လေးကို တခန်းပေးမယ်ကွာ ဒီညတော့ အဲဒီအခန်းမှာပဲ အိပ်လိုက်၊ ဦးက အိဖြူဆီပြန်သွားပြီးပြောလိုက်မယ်.. နိုင်လေးက ဟော်တယ်ရီဆက်ရှင်းကို ဖုန်းဆက်ပြီးမက်ဆေ့ထားခဲ့တယ်လို့.. ဒီညပြန်လာမအိပ်တော့ဘူး သူငယ်ချင်းတယောက်အိမ်မှာအိပ်မယ်လို့… ..။
ဦးက တော်တော်ဉာဏ်ထွက်တယ်နော် ဒါမျိုးဆို ခစ်ခစ်..နိုင့်ကိုလည်းမမေ့ရဘူးနော် ဒါပဲ ဟင့်.. ထိုဖြင့် ဟော်တယ်မှာ အခန်းကိစ္စ နိုင်နိုင့်ကို စီစဉ်ပေးပြီးတာနှင့် ဦးအောင်အောင်ဆွေ တယောက် အိဖြူရှိရာသို့ အပြေးလေး ပြန်လာခဲ့ပါတော့သည်။ ..ဖြူလေး.. ..အို့..ကိုရီး.. လန့်လိုက်တာ ကိုရီးကလည်း… ဘာလုပ်မလို့လဲ ဒီထဲမှာ… …ဖြူလေးကို သတိရလို့ပေါ့..မချစ်ရတာကြာပြီလေ… ..အို..မဖြစ်နိုင်တာ ..တော်ကြာ မေမေ ဝင်လာအုန်းမယ်.. ..မလာပါဘူး…အခုသူ ဘုရားရှစ်ခိုးနေတယ်..နောက် ပုတီးစိတ်အုန်းမှာ၊ နာရီဝက်လောက်ကတော့ အနည်းဆုံးပဲ… ..ဟင့်အင်း ကိုရီးရယ်…မီးလန့်တယ်…အို့..အဲဒီလက်ကြီးကလည်းနော်..ခက်တော့တာပဲ.. အထက်ပါစကားပြောသံများမှာ ယောက္ခထီးကြီး ဦးအောင်အောင်ဆွေနှင့် ချွေးမချောလေး အိဖြူသဇင် တို့ ၊ အိဖြူသဇင်၏ အိပ်ခန်းထဲ မှာ ပြောဆိုနေကြခြင်း ဖြစ်လေသည်။ သူတို့ နှစ်ယောက်၏ အမှတ်မထင် ပဲ နိုင်နိုင့် ဟော်တယ် အခန်းမှာ မှားယွင်းခဲ့ကြပြီးနောက် သောက်လို့ ငတ်မပြေနိုင်တဲ့ ဆားငံရည်ထက်ကောင်းသော အရာ ဆိုတော့ ဆက်ခါ ဆက်ခါမှားယွင်းခဲ့ကြလေသည်။
ယခင်က အိဖြူက ဦးအောင်အောင်ဆွေကို ဖေဖေ ဟုခေါ်ခဲ့သော်လည်း သူတို့ ချင်း တွေ့လျှင် ကိုရီး ဟုခေါ်ရန် ဦးအောင်အောင်ဆွေက ပြောထားသဖြင့် အိဖြူ က အသုံးအနူန်းကို ပြောင်းလဲခဲ့လေသည်။ တကယ်တော့ နိုင်နိုင်ပြန်သွားပြီး နောက် အိဖြူက ဦးအောင်အောင်ဆွေကို ရှောင်နေခဲ့သော်လည်း၊ အံတိုနေပြီ ဖြစ်သော ဦးအောင်အောင်ဆွေ ၏ လက်မှ အိဖြူ လွတ်ဖို့ ဆိုတာ ဘယ်လိုမှ မဖြစ်နိုင်ခဲ့ပေ။ နှစ်ယောက်ထည်း ရှိနေစေရန် အခွင့်အရေးများမရ ရအောင်ဖန်တီးကာ အိဖြူကို အရှက်ကုန် ပြီး ကာမအရသာ နှစ်သက်သွားသည် အထိ စွမ်းဆောင် ပေးနိုင် ခဲ့လေရာ၊ ခုတော့ ကိုရီးနှင့် မီး ဘဝသို့ပင် ရောက်နေခဲ့ခြေပြီ။ သူတို့ နှစ်ယောက်၊ နောက်ဆုံးအကြိမ်၊ နွေရာသီ အပန်းဖြေအိမ်လေးသို့သွားရောက်ပြီး တနေ့လုံးအချစ်တလင်းခေါ် ခဲ့ကြသည်မှာ တပတ်လောက်ရှိ ခဲ့ပြီဖြစ်လေသည်၊ ထိုအခါပြီးတော့ အခုချိန်ထိ နှစ်ယောက်ထည်းတွေ့ဖို့ အခွင့်အရေးကလည်းမရ၊ အိမ်မှာလည်း နေ့တိုင်းတွေ့နေရပြီး၊ မြင်သာမြင် မကြင်ရဆိုတော့ ဦးအောင်အောင်ဆွေ တယောက် အလွန်တင်းနေရသည်။
ထို့ကြောင့်လည်း စနေနေ့တရက်၊ အိမ်မှာ ခိုင်းသည့်လူများအလစ်၊ သူ့မိန်းမ ဘုရားခန်း အဝင်၊ ဦးအောင်အောင်ဆွေ တယောက်၊ သူ့သားနှင့်ချွေးမ အိပ်ခန်းသို့ အသာဝင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်လေသည်။ မနက်အိပ်ယာထ၊ ရေမိုးချိုးပြီး ကိုယ်မှာ မျက်နှာသုတ်ပုဝါ အကြီးကို ပတ်၊ ခေါင်းမှာလည်း လျှော်ထားသော ဆံပင်တွေကို ဆံပင်အခြောက်ခံစက်နဲ့ မှုတ်ပြီးကာစ မို့ ဖားယားချ လျှက် မှန်တင်ခုန်ရှေ့ထိုင်ကာ မျက်နှာလိုးရှင်း လေးပွတ်နေစဉ်၊ အနောက်မှာ ရုတ်တရက်ရောက်လာသော ဦးအောင်အောင်ဆွေ ကြောင့် အိဖြူ တယောက်ထိတ်ကနဲ ဖြစ်သွားရချင်းပင်။ ..ကိုရီး အခန်းတံခါး.. ..ဘာမှ စိတ်မပူနဲ့ ကိုရီး ဂလန့်သေခြာချခဲ့တယ်.. ဦးအောင်အောင်ဆွေက အိဖြူ၏ မခြောက်တခြောက် ဆံပင်တွေကို ဂုတ်နားလေးမှ ဖယ်ရင်းပုခုံးလေးကို ငုံ့ နမ်းလိုက်သည်။
အိဖြူယားလို့တချက်တွန့်သွားသည်။ သို့သော်လည်း ခေါင်းလေး လှည့်ကြည့်လာသော အိဖြူ ၏ နူတ်ခမ်းလေးတွေကို ငုံစုပ်တာ ခံလိုက်ရတော့ အိဖြူတယောက်လည်း ဦးအောင်အောင်ဆွေ ၏ လည်ဂုတ်ကို တွဲလဲခိုပြီး တုန့်ပြန်နမ်းလာတော့သည်။ ဦးအောင်အောင်ဆွေက အိဖြူကို ဂျိုင်းနှစ်ဖက်အောက်မှ အသာ မလိုက်ရာ အိဖြူတယောက် မတ်တတ်ထလျှက်ပါလာတော့သည်၊ နှစ်ဦးသား တတ်မတ်တမော နမ်းနေကြစဉ်မှာပင် ဦးအောင်အောင်ဆွေက အိဖြူကိုယ်မှာ ပတ်ထားသော မျက်နှာသုတ်ပုဝါကြီးကို ဆွဲချွတ်ချလိုက်လေသည်။ အိဖြူ၏ ဖောင်းအိတင်းနေသော နို့နှစ်လုံးကို ဦးအောင်အောင်ဆွေ သူ့မျက်နှာကြီးဖြင့် ပွတ်သတ်ရင်း ထောင်မတ်လာသော နို့သီးခေါင်းကလေးများကို လည်း တပြွတ်ပြွတ်စုပ်ပေးနေပေရာ အိဖြူခမျာ ဒူးများညွှတ်ခွေမကျသွားအောင် မနည်းထိန်း ၍ဦးအောင်အောင်ဆွေ၏ လည်ဂုတ်ကြီး ကို တွဲလွဲခိုထားရပေတော့သည်။
ဦးအောင်အောင်ဆွေက နို့စို့လို့်ဝသွားတော့ အိဖြူ မချီပြီး ကုတင်ပေါ်တင်လိုက်တော့သည်။ ..ဖြူလေး အဲလို ရေချိုးပြီးကာစ လတ်လတ်ဆပ်ဆပ် ကလေးကို အကိုရီးက တကိုယ်လုံးရက်ပြစ်ချင်တာကွ.. .ဟင့်..အချိန် သိပ်မရှိဘူးနော် ကိုရီး၊ မီးလန့်တယ်၊ တော်တော် မေမေ တံခါးလာခေါက်နေရင် ပြဿနာတက်နေမယ်.. ..အင်းပါကွာ ဖြူလေး အဖုတ်လေး လတ်လတ်ဆပ်ဆပ်လေးကို ပဲ ရက်သွားတော့မယ် ဒါဆိုလည်း… ဒါကလည်းတကယ်တော့ အပြောပါ၊ ဦးအောင်အောင်ဆွေတယောက် အိဖြူ အဖုတ်လေးကို အားရပါးရ ရက်ပြီးချိန်မှာ အိဖြူက ဒီတိုင်းဘယ်ပြန်လွတ်တော့မည်နည်း။
သူ့လက်ကလေးတွေက ဦးအောင်အောင်ဆွေ ကောင်ကြီးကို ဆုပ်ကိုင်ပွတ်နေပြီး သူ့ဟာလေးထဲ အတင်းထည့်ခိုင်းနေသည်။ ဦးအောင်အောင်ဆွေက လည်း အရင်စုပ်ပေးမှ ထည့်ပေးမည်ဟု ဆိုသဖြင့် ကုတင်ပေါ်လေးဘက်ထောက်ပြီး ကုန်းစုပ်ပေးရှာသည်။ လိုက်လည်းလိုက်သည့် ချွေးမနှင့် ယောက္ခထီး။ နောက်ဆုံးတော့ ဦးအောင်အောင်ဆွေ တယောက်၊ သူ့သားလင်မယားအိပ်သည့် ကုတင်ကြီးပေါ်မှာ သူ့ချွေးမချောလေး အိဖြူသဇင်ကို လေးဘက်ထောက် ခိုင်းကာ အနောက်မှ လုပ် ရင်း ကာမ အရသာ အထွတ်အထိပ် သို့ နှစ်ဦးသား ရောက်ရှိသွားရလေတော့သည်။
ကိုရီး… ဒုက္ခ တော့ရောက်ကုန်ပြီထင်တယ်.. …ဟင် ဘာဖြစ်လို့လည်း ဖြူလေး… …မီး မှာ ဟိုဟာ ဒီလ မလာဘူး နောက်ကျနေတယ်…. ..ဟင် ဟုတ်လား၊ သေခြာရဲ့လား ဖြူလေးရယ်… ..သေခြာတယ် ထင်တာပဲ ကိုရီး မသေခြာလည်းပဲ ဟုတ်ခဲ့ရင် ဆိုတာ ပြောလို့ရမလား..မီးအရမ်းကြောက်တာပဲ…ဟင့်ဟင့်..ရွှတ်..အီးးးး ဟင့်…ဟင့်.. ..အို ဖြူလေးက လည်း ငိုမနေပါနဲ့ ..ကိုရီး စဉ်းစားလိုက်ပါအုန်းမယ်…. ချန်ဂီ လေဆိပ်၊ စကာင်္ပူ။ ..ဟော ..အချစ်ကလေး ..မတွေ့တာတောင်ကြာလို့..လှလိုက်တာကွာ…. ..အင်း ..ကိုရောဘဲ တခါထဲ စလုံးနဲ့တည့်လို့ထင်တယ် ဝလို့ ဖြူလို့၊ ဗိုက်တောင်နည်းနည်းရွဲလာတယ်၊ အိုဗာရှိတ်ဖြစ်နေပြီနော် ဟင်း… ..ဟာကွာ အချစ်ကလည်း ခုတလော အစားကောင်းနေလို့ပါ၊
ဟဲဟဲ..ခုလည်း ချစ်ကလေး ရောက်တုန်း ရောက်လည်မယ်ဆို ပြီး ခွင့်ယူထားတယ်၊ အလုပ်မလုပ်ပဲနဲ့ အစားတွေ ပဲစားဖို့ကိန်းမြင်တယ်၊ အဟစ်ဟစ်.. ..ဖြူက မလည်ချင်ပါဘူး ကိုနဲ့တွေ့ရအောင်ပဲလာခဲ့တာ၊ အခုတလော အလုပ်ကလည်းနည်းနည်းပါး၊ အဖေကလည်း နင့်ယောက်ျားမတွေ့ရတာကြာပြီ သွားလည်ပါလားတဲ့ ငါတို့ နှစ်ယောက်နဲ့ဖြစ်ပါတယ်တဲ့။ မေမေကလည်း အင်း သူပြန်မလာတာကြာပြီ နင်လိုက်သွားအုန်းတဲ့ ခစ်ခစ်၊ သူ့သားတောင်သူ စိတ်မချလို့ ချွေးမကို အတင်းလွတ်နေတာ.. …ဟဲဟဲ ကိုကလည်းပြန်လာချင်တာပေါ့ကွာ၊ အလုပ်က ခွင့်အကြာကြီးယူမရလို့ တပတ်လောက်နဲ့လည်း ပြန်မလာချင်ဘူးလေ၊ အခု အချစ်လာတော့ ကိုယ်က တပတ်လောက်ခွင့်ယူမယ် အချစ်က တလလောက်နေပြီးမှ ပြန်၊ ဟုတ်လား.. စင်္ကာပူ က တကယ်တော့ နှစ်ရက်လောက်လည်ပြီးရင် သွားစရာမရှိတော့ပြီ၊ မျိုးဆွေတယောက်ကတော့ ငတ်သမျှ ကို အတိုးချစားလေတော့သည်။ အိဖြူလည်း အကြိုက်တွေ့ နေရသည်။
ကိုမျိုးဆွေတယောက် စလုံးမှာ နေတာ ကြာတော့ လိင်ကိစ္စ မှာလည်း တော်တော်လေး တိုးတက်လာတာကို တွေ့ရသည်။ အင်တာနက်ထဲ တချိန်လုံးသွားနေလို့လားမသိ။ တခါတလေ အိဖြူနှင့် အချစ်စခန်းဖွင့်ပြီးရင်တောင် ခနတဖြုတ်ကွန်ပြူတာရှေ့သွားထိုင်ပြီး ကီးဘုတ် တဂျောက်ဂျောက်နဲ့ ရိုက်နေတတ်သည်။ အိဖြူကတော့ မစပ်စုချင်သလိုပင်၊သိပ်လည်းစိတ်တော့မဝင်စား။ သူ ရာသီလာနောက်ကျသည့်ကိစ္စလေး အစဉ်ပြေသွားတာကို ပင် စိတ်ချမ်းသာနေသည်။ တညတော့ ထုံးစံအတိုင်း သူနှင့်ကိုမျိုးဆွေတို့ အချစ်စခန်းဖွင့်ပြီး ပန်းတိုင်ရောက်သွားတော့ ရေဆေးသန့်စင်ပြီးသူက ကုတင်ပေါ်တက် စောင်အောက်ဝင်တုန်း ကိုမျိုးဆွေက ကွန်ပြူတာရှေ့မှာ တဂျောက်ဂျောက်လုပ်နေသည်။ ခနနေတော့ ကိုမျိုးဆွေ အိမ်သာထဲ ဝင်သွားတော့ ကွန်ပြူတာ ဝင်းဒိုးကို သေးအောင်လုပ်ထားခဲ့သည်။ အိဖြူက အသာထပြီး ဝင်းဒိုးကို ကြီးကြည့်လိုက်သည်။
ဗမာစာလုံးတွေ အတန်းလိုက်အတန်းလိုက်တက်တက်လာတာတွေ့ရသည်၊ အင်း ချပ်ဆိုတာပဲနေမှာပဲ၊ ကြည့်ရတာ လူတွေ နဲ့စကားပြောနေပုံပဲ။ နာမည်တွေကလည်း ဘာနာမည်တွေလည်းမသိဘူး၊ တခုက တရုပ်ဖုန်းနာမည်။ ညီဟွဟွေ ဆိုလား၊ စီးခရက်ဘွိုင်းတဲ့၊ နောက်တယောက်က မေချစ်သူမောင် ဆိုလား၊ဟင် ကောင်မလေးများလား၊ မောင်ဆိုတော့ ယောက်ျားလေးနေမှာပေါ့။ ဟင်၊ ယောက်ျားတွေနဲ့ ဘာလို့ ကိုမျိုးဆွေက ချပ်လုပ်နေတာလည်း။ အိဖြူကြည့်နေတုန်းစာတန်းလေးတွေတက်လာသည်။ ..ကိုအိုဗာရှိသေးလား…. ..ကိုအိုဗာ အမြန်လာပါ..ကျနော်လိုင်းမကျခင်.. အင်း ဘာတွေလည်းမသိပါဘူး၊ အိဖြူ ဝင်းဒိုးကို ခုနက ကိုမျိုးဆွေထားခဲ့သလို ပြန်ထားလိုက်သည်။ နောက်တော့ ကုတင်ပေါ်ပြန်လှဲကာ စောင်ခေါင်းမြီးခြုံအိပ်နေလိုက်တော့သည်။
အိဖြူ တို့ ဆီက ပြန်လာတော့ လမ်းမှာ နိုင်နိုင်တယောက်၊ ရထားပေါ်မှာ အိပ်စင်ပါသည့် အတန်းမှ စီးလာခဲ့သည်။ သူ့ နှင့်မျက်နှာချင်းဆိုင်မှာ အမျိုးသားကြီးတဦး၊ သူ့ဘေးမှာ က တက္ကသိုလ်ကျောင်း သားတဦးလိုက်ပါလာခဲ့ကြသည်။ ကောင်ကလေးမှာ မောင်စောကြည် ဟုခေါ်ပြီး စက်မှုတက္ကသိုလ်တက်နေ သူဖြစ်လေသည်။
အမျိုးသားကြီးကတော့ ပုတီးအလုံးကြီး များပါသော စိတ်ပုတီးကြီးကို သာ မျက်လုံးပိတ်ပြီး စိတ်နေ လေသည်။ မောင်စောကြည် နှင့် နိုင်နိုင် တို့ကတော့ ရထားထွက်ပြီး တနာရီလောက်မှာပင် ခင်မင်သွားကြတော့သည်။ နိုင်နိုင်က ဘူတာရုံတွေရောက်လျှင် စားစရာ တိုလီမှုတ်စလေး တွေကို ဝယ် မောင်စောကြည် ကို ပါ မျှကျွေး စကားတွေတပြောပြောနှင့်၊ လိုက်လာခဲ့ကြလေသည်။ ညနေစောင်းပြီးမှောင်လာတော့ အိပ်ဖို့ရာပြင်ကြရလေသည်။
အပေါ်ထပ်မှ ဆွဲချရသော အိပ်စင်ကို ဦးလေးကြီး အတွက်ပေးလိုက်ရပြီး သူတို့ထိုင်နေသော ခုံများကို ဆွဲဆန့်လိုက်သဖြင့် အိပ်ယာဖြစ်သွားသော နေရာတွင် နိုင်နိုင် နှင့် မောင်စောကြည်တို့ နေရာယူကြရသည်။ နိုင်နိုင်ကတော့ အတွေ့အကြုံရှိနေပြီး လိင်ကိစ္စ မှာ တက်ကြွသူ တဦးမို့၊ ယခုလို တစိမ်းကောင်လေး နှင့် ကပ်ရက် အိပ်ရမှာနှင့်။ ဖြစ်နိုင်ခြေ ရှိသော အကွက်တို့ကို မြင်မိပြီး ရင်ခုံလာရသည်။ သို့သော်လည်း သူ့လို အသက်ကြီးကြီး အိမ်ထောင်သည် မိန်းမ ကို မောင်စောကြည်လို တက္ကသိုလ် ကျောင်းသားလေးက စိတ်ဝင်စားပါ့မလားဟု တွေးရင်း ညနေစောင်းကထဲက မသိမသာ လေ့လာနေမိသည်။ မောင်စောကြည် ၏ တချက်တချက် ခိုးကြည့်သော မျက်လုံးတွေက သူ့ ရင်သား တွေ ပေါင်လုံးတွေစီ ရောက်ရောက်လာ တာကို တွေ့လိုက်ရတော့ ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည်ဟု တွေးထားလိုက်သည်။ သို့အတွက်ကြောင့်လည်း ညအိပ်ယာဝင်တော့ အောက်ခံမပါ ပဲ ထမိန်တထပ်ထည်း ဝတ်၊ အပေါ်ကလည်း တီရှပ်ကို အောက်က ဘရာဇိယာမခံပဲ ဝတ် ထားလိုက်သည်။
သို့သော်လည်း ရထား လှုပ်တော့ အရမ်းခုံနေမှာ စိုးသဖြင့် အပေါ်က ဆွယ်တာတထည်ထပ်ဝတ်ထားလိုက်ရသည်။ …ရထားက အရမ်းခုံ တာပဲနော်၊ ငါတော့ မိုးလင်းရင် အိပ်ယာပေါ်မှာတောင် ရှိပါတော့မလားမသိဘူး၊ အောက်ပြုကျပြီ ခစ်ခစ်… ..ဟာ အန်တီက လည်း ကျနော်က ပိုဆိုးသေးတယ်၊ အဆောင်အိပ်ခန်းထဲမှာ အိပ်ရင်တောင် မနက်ကျရင် ခေါင်းက ခြေရင်းဘက်ရောက်နေတတ်တာ၊ အဟီး..ကျနော် ခြေထောက်နဲ့ အန်တီ့ကို ကန်မိရင် ကန်တော့နော် အဟားးး ကြို ကန်တော့ထားတာ.. …အောင်မလေးကွယ် ငါကလည်း အိပ်လိုက်ရင် တုံး ကနဲပဲ၊ ဆင်နင်းသွားရင်တောင် နိုးချင်မှ နိုးမှာ၊ မင်းကန်တာလောက်ကတော့ အပျော့ပေါ့… …ဟားဟား..အဲဒါကတော့ ကျနော့်အတိုင်းပဲ..အဟီး… ကောင်လေးက လည်း စကားခေါ်ထားတဲ့ပုံက မဆိုးပါလား၊ ငလည်လေးပဲ လို့ နိုင်နိုင့်စိတ်ထဲ တွေးနေမိသည်။
တကယ်အိပ်ယာဝင်ကြတော့ တယောက်နှင့်တယောက်က တတောင်လောက်တော့ ကွာဝေးပါသေးသည်။ သို့သော်လည်း ရထားကပဲ တဝုန်းဝုန်းခုံလို့လား မောင်စောကြည်ကပဲ တမင်ရွေ့လာတာလားမသိ တနာရီလောက်မှာ သူတို့ နှစ်ဦး ကိုယ်ချင်းကပ်လို့ ခြားထဲမှာ စောင်နှစ်ခုသာ ခြားတော့သည်။ နိုင်နိုင်က မောင်စောကြည်ဘက်ကို ကျောပေးကာ ကွေးကွေးလေးအိပ်နေလိုက်သည်။ သူ့တင်ပါးပေါ် မောင်စောကြည်လက်ဖဝါးတွေ ရောက်လာတာ သိလိုက်ပြီး ရင်ထဲမှာ ပျော်သွားသည်၊ အဟိ လာပြီ လာပြီ ပေါ့။ မောင်စောကြည်က လည်း လူသာငယ်သည်၊ ပညာက ခေသူမဟုတ် ဆိုသူပေတည်း။ လူပျို ပေါက်စဖြစ်ကထည်းက သူတို့ အိမ်နီးချင်း မုဆိုးမ တယောက်၏ ပညာပေးမှုကြောင့် သာအိ တစိုစို ဖြစ်နေခဲ့ရပြီး၊ အမျိုးသမီးကြီးတွေ ကို စိတ်ပိုလာနေခဲ့ရသူဖြစ်ရုံသာမက လက်တွေ့ အတွေ့အကြုံကလည်း မနည်းတော့ပြီ။
သူ၏ အတွေ့အကြုံများကို ပါးစပ်အဟောင်းသားနှင့် သွားရည်တမျှားမျှား ကျအောင် အဆောင်က သူငယ်ချင်းများရှေ့တွင် ဖေါက်သည်ချတတ် သည်မှာလည်း သူ့ဝါသနာ။ နိုင်နိုင့်ကို မြင်ကထဲက ဖြစ်နိုင်ခြေ ရှိသည်ဆိုတာ သူတွက်ထားပြီးသား၊ ယောက်ျားက ဗိုလ်မူး ရှေ့တန်းမှာ အနေများသည်ဆိုတော့ ပိုသေခြာသည်။ တောင်းတနေမှာပဲ။ ဒါပေမဲ့ အဲဒါကလည်း အန္တရာယ် များသည်။ အသွားမတော်တလုပ်ဆိုသလို၊ ဒုက္ခ ရောက်မှာလည်းစိုးသည်။ ထုံးစံအတိုင်း စကြည့်လို့ အခြေအနေမကောင်းရင် ရှေ့ဆက်မတိုးနဲ့ပေါ့။ ဒါက မောင်စောကြည်ရဲ့ အထာ။
မောင်စောကြည်လက်ဖဝါးက စောင်အောက်က အသာလျိုဝင်ပြီး နိုင်နိုင့် တင်ပါးလုံးလုံးလေးပေါ်တင်လိုက်ပြီး မသိမသာ ပွတ်ပေးနေတာကို ငြိမ်ခံနေကထဲက မောင်စောကြည်က မီးစိမ်းကို တွေ့နေပြီ၊ သူ့လက်ဖဝါးတွေကို တင်ပါးပေါ်မှ အရှေ့ဘက် ဘိုက်သားလေးပေါ်ရွှေ့လိုက်သည်။ နိုင်နိုင့်ဖင်လေးပိုကောက်လာသည်၊ သူ၏ မာတောင်နေသော ကောင်ကြီးနှင့် ထောက်မိနေပြီ။ မောင်စောကြည်က နိုင်နိုင့်ဗိုက်သားလေးတွေကို တီရှပ်အောက်မှ ပွတ်နေရင်း အပေါ်ဖက်သို့တက်လာတော့။ ဘရာဇီယာဝတ်မထားသော နို့ကြီးတွေကို သွားစမ်းမိသည်။
ဟိုက် ထင်တာထက်တောင် ဟော့နေပါလား၊ မောင်စောကြည် ပေါ်တင်ပဲ ကြမ်းတော့သည်။ သူ့လက်ဖဝါးတွေနှင့် နို့ကြီးတွေကို ဆုပ်နှယ်၊ ထောင်မတ်နေသော နို့သီးခေါင်းလေးတွေကို လှိမ့်ချေ ပွတ်သတ် လုပ်ပေးနေလိုက်သည်။ နောက် သူတို့ ခြုံနေသော စောင်နှစ်ထည်ကို တထည်ထည်း နှစ်ထပ်ဖြစ်သွားအောင်လုပ်လိုက်သည်။ သူ့ပုဆိုးကတော့ ခါးမှာ ကွင်းလုံးတက်နေပြီ နိုင်နိုင့် ထမိန်ကိုသာ နိုင်နိုင့်တင်ပါးကျော်အောင် ဆွဲလှန်လိုက်သည်။ အေးစက်ပေမဲ့ အိနေသည့် နိုင်နိုင့် ဖင်လုံးကြီးကြားသို့ မောင်စောကြည်၏ ပူနွေးနွေး ဒုတ်ကြီး လျှိုဝင်သွားသည်။
ဟင့်..အင်းးးးး..အင်း…. နိုင်နိုင့်ဆီက ငြီးသံလေးထွက်လာခဲ့သည်။ မောင်စောကြည်က သူ့ဒူးခေါင်းတဘက်ကို နိုင်နိုင့်ပေါင်လုံးနှစ်ခုကြားကို ထိုးထည့်လိုက်တော့ အဆင်ပြေစေရန်နိုင်နိုင်က လည်း သူ့ခြေထောက်တဖက်ကို အသာ မြှောက်ပေးလိုက်သည်။ မောင်စောကြည်က ကိုယ်လုံးကို အောက်အနည်းငယ်လျှောချပြီး ဖင်ကို ကော့လိုက်တော့ သူ့လီးထိပ်ကြီးက နိုင်နိုင် ၏ အရည်ရွဲနေပြီဖြစ်သော စောက်ဖုတ်ဝသို့ လာထိတော့သည်။ နိုင်နိုင်က အနောက်ကို ပိုကော့ပေး၊ မောင်စောကြည်ကလည်း အပေါ်ကို ကော့ထိုးလိုက်တော့ မောင်စောကြည်လီးကြီးက နွေးထွေးနူးညံ့ လှသော နိုင်နိုင့်စောက်ခေါင်းထဲ တိုးဝင်သွားတော့သည်။
နှစ်ယောက်စလုံးက အတွေ့အကြုံရှိကြသူများမို့ ခနလေး ဖြင့် သူတို့ နှစ်ယောက်မှာ တပေါင်ကျော်ပုံစံဖြင့် လိုးနေကြလေပြီ၊ နိုင်နိုင်က သူ့လက်ကို နောက်ပြစ်ပြီး မောင်စောကြည်၏ ဖင်ကို အတင်းဆွဲပြီး သူ့ကိုယ်ထဲ မောင်စောကြည်လီးကြီး ဝင်နိုင်သမျှဝင်အောင် လုပ်ပေးလေသည်။ ထိုပုံစံအတိုင်းလုပ်နေရင်းမှ မောင်စောကြည်က အားမရလာတော့ သူ့လီးကြီးကို ပြန်ချွတ်ပြီး နိုင်နိုင့်ကို ပက်လက်လှန်ခိုင်းကာ ပေါင်နှစ်လုံးကြားဝင်၊ လှေကြီးထိုးပုံနှင့်လုပ်တော့သည်၊ ရထား ခုံဆောင့်နေတာကလည်း သူတို့ အတွက် အလွန်အဆင်ပြေနေတော့သည်။ နိုင်နိုင့်နူတ်ခမ်းဖူးဖူးတွေကို မောင်စောကြည်က ငုံစုပ်တော့ နိုင်နိုင်က လည်း သူ့လျှာကလေး မောင်စောကြည်ပါးစပ်ထဲ ပြန်ထိုးထည့်ပေးလိုက်သည်။
အရှိန်တွေရလာကြတော့ သူတို့ နှစ်ယောက် စလုံး အငမ်းမရ တယောက်ကို တယောက် ဆွဲဖက်လိုးနေကြရင်း ကာမ အရသာအထွတ်အထိပ်ကို ပထမဆုံးရောက်သွားကြရတော့သည်။ …အား…ကောင်းလိုက်တာ အန်တီရယ်…. ..ဟင်း..မင်း လူဆိုးလေးနော်..သူများမှာ ယောက်ျားရှိပါတယ် ဆိုတာကိုတောင် အတင်းတက်လုပ်တယ်၊ ခါထဲ.. ..အဟိ..အန်တီက လည်း မကြိုက်တာကြနေတာပဲ၊ ဟီးဟီး… ခနလေးပါပဲ၊ နောက်တချီ ပြန်စကြပြန်တော့သည်။ နိုင်နိုင် ဘူတာကြီးမှာ မခွဲချင်ခွဲချင်နှင့် မောင်စောကြည်လေး နဲ့ ခွဲလာခဲ့ရသည်။
ဖုန်းနံပါတ်တွေ ဖလှယ်၊ ပြီး နောက် အခွင့်အရေးရလျှင် ဆုံကြစို့ဟု၊ ပြောလာခဲ့ကြသည်။ သူတို့နေသော အရာရှိရိပ်သာ သို့ရောက်တော့ တညလုံး ရထားကလည်းခုံ၊ မောင်စောကြည်နဲ့ လည်းကဲထားသဖြင့် ကိုယ်တွေလက်တွေနာ၊ အိပ်ချင်လာသဖြင့် အဝတ်တောင်မလှဲနိုင်ပဲ အိပ်ပျော်သွားရသည်။ တရေးနိုးလာတော့ အိမ်မှာလည်း တယောက်ထဲ ဆိုတော့ ရင်ထဲ ဟာတာတာဖြင့် ပျင်း သလိုလို ၊ ရှော့ပင်ထွက်ရမှာတောင် စိတ်မပါတော့သဖြင့်အိပ်ယာထဲ လှဲနေတုန်း၊ ..ကလင်း… ဖုန်းကမြည်လာလို့ကောက်ကိုင်လိုက်တော့။ ..နိုင်လေးလား… ..ဟင် ဖေကြီးလား ခုဘယ်မှာလည်း.. …ဖေကြီး တို့အသိအိမ်တအိမ်မှာ မြို့ကို ရောက်တယ်၊ သမီးတို့ဆီရောက်တော့ ခရီးထွက်သွားတယ်တဲ့ ဒီနေ့လောက်ပြန်ရောက်မလားမသိဘူး ဆိုတာနဲ့ ဖေကြီးအသိတယောက်အိမ်သွားတည်းနေတာ..
အင် ဒါဆိုရင် အတော်ပဲ မီးဆီမှာလာတည်းတော့ ဒီမှာတယောက်ထည်းပျင်းနေတာ … ..အော် မောင်အောင်နိုင် ကရောဘယ်သွားလို့လဲ.. ..သူက အထူးစစ်ဆင်ရေးရှိလို့လေ၊ ဖေကြီးရဲ့ ခုမီးက အိဖြူတို့ဆီသွားလည်ပြီးပြန်လာတာ၊ ခုလာခဲ့လိပ်စာပြောလိုက် မီးကားလွတ်လိုက်မယ်..မေမေရော နေကောင်းလား… သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးခရီးထွက်ဖို့ မဖြစ်နိုင် အိမ်မှာတယောက်ယောက်ကျန်မှ ရမည်ဆိုတာ နိုင်နိုင်က သိထားသည်။ မကြာခင်မှာပင် သူ့ကို အကြိုလွှတ်လိုက်သော ကားဖြင့် ဦးချစ်ဆွေ ရောက်ချလာသည်။ ဦးချစ်ဆွေ အထုပ်အပိုးတွေကို ဒရိုင်ဗာ တပ်သားလေးက ကူသယ် အခန်းတွင်း ချပေးပြီး ပြန်ထွက်သွားသည်။
နိုင်နိုင်က တံခါးမ ကိုပိတ်ပြီး လော့ချနေချိန်မှာပင် ဦးချစ်ဆွေက နိုင်နိုင့်အနောက်မှ သိုင်းဖက် ပြီး ဂုတ်လေးကို ငုံနမ်းလိုက်လေသည်။ ..နိုင်လေးက ပိုပြီးလှလာ တောင့်လာလိုက်တာကွာ….ချစ်စရာကြီး…. ..ဟွန့် ဖေကြီးကလည်း မာမာတောင်တောင် ပဲမဟုတ်လား ခစ်ခစ်… နိုင်နိုင်က သူ့ဖင်ကြီးကို လာထောက်နေသည့် ဦးချစ်ဆွေ၏ လီးမာမာကြီးကို ပုဆိုးပေါ်မှ ပင်လှမ်းဆုပ်ကိုင် ရင်းပွတ်ပေးလိုက်လေသည်။ နိုင်နိုင်က တံခါးပိတ်အပြီး ဦးချစ်ဆွေနှင့် မျက်နှာချင်းဆိုင် လှည့်လိုက်သည့်အချိန်မှာတော့ ဦးချစ်ဆွေက သူ့ပုဆိုးကို ဖြည်ချလိုက်လို့ ကြမ်းပေါ်မှာ ကွင်းလိုက်ပုံနေလေပြီ။
သူ့ကောင်ကြီးက တော့ သူ့ဆီးခုံမှ လေးဆယ့်ငါးဒီဂရီ ထောင်မတ်လို့ နိုင်နိုင့်ရင်ဘတ်ကို အမြှောက်နှင့် ချိန်ထားသလိုပင်။ ..ဟွန့်ဖေကြီးကလည်း ရောက်တာနဲ့ တခါထဲ တန်းပြီးတော့….တန်းနေတာပဲ ခစ်ခစ်.. နိုင်နိုင်က လည်းပြောသာပြောနေတာပါ သူ့လက်တွေက အလိုလို သူနှင့် ရင်းနှီးပြီးသား ဦးချစ်ဆွေ၏ လိင်တန်ကြီးကို သူ့လက်ခလေးဖြင့် ဆုပ်ကိုင်ရင်း ရှေ့တိုးနောက်ငင်လုပ်ပေးရင်းက ဦးချစ်ဆွေရှေ့မှာ ဒူးထောက်ထိုင်ချလိုက်လေသည်။ နိုင်နိုင့်လျှာကလေးက ဦးချစ်ဆွေ၏ ဒစ်ဖျားကို အသာရက်လိုက်ပြီးမှ နူတ်ခမ်းလေးနှစ်လွှာကို ဟပေးလိုက်တော့ ဦးချစ်ဆွေက ရှေ့ကို ခြေတဖဝါးစာရွှေ့ပြီး နိုင်နိုင့် အာခံတွင်းထဲ ထိုးသွင်းလိုက်လေတော့သည်။
နွေးထွေး နုးညံ့သော နိုင်နိုင့်အာခံတွင်းလေးက ဦးချစ်ဆွေ၏ လိင်တန်ကြီးကို စုပ်ယူလိုက်သော အခါမှာတော့ ဦးချစ်ဆွေခမျာ ဒူးများပင် ချောင်ချင်သလိုဖြစ်သွားရသည်။ ဦးချစ်ဆွေမှာ မျက်လုံးကို စုံမှိတ်လို့ နိုင်နိုင့် ဆံပင်တွေကို ဆုပ်ကိုင်ကာ ဖင်ကြီးကော့ကာကော့ကာ ဖြင့် သူ့လိင်ချောင်းကြီးကို နိုင်နိုင့်ပါးစပ်တွင်းသို့ ထိုးသွင်းနေမိလေတော့သည်။ နိုင်နိုင်ကလည်း သူ့ဦးဦးချစ် အကြောင်းသိပြီးသားမို့ ဦးဦးချစ် အတန်ကြီးအာဂေါင်မထိုးမိစေရန် လိင်တန်အရင်းကို သူ့ကလေးနှင့် ဆုပ်ကိုင်ထားပြီး သူ့နူတ်ခမ်းထူထူ လေးကိုလည်းစေ့ပေးထားလိုက်လေသည်။ ဦးချစ်ဆွေကတော့ အောင်းထားရတာလည်းကြာ၊ စုတ်အားလည်းကောင်းလှသော နိုင်နိုင့်အိမ်ရှေ့တံခါးဝ အနီးမှာပင်၊ အမှုတ်ခံနေရတော့ ကြာကြာမထိန်းနိုင်၊ ခနလေးဖြင့် သုတ်ရည်တွေကို နိုင်နိုင့်လည်ချောင်းတွင်း တဒုတ်ဒုတ်ပန်းထုတ်ပစ်နေမိလေတော့သည်။
ကလင်းးးးးးးးးးးးးးး… စောစောစီးစီး ထမြည်လာသော တယ်လီဖုန်းကြောင့် အိပ်ယာမှ လန့်နိုးလာသော နိုင်နိုင်တယောက် ကယောင်ကတမ်းနှင့် လက်က ကုတင်ဘေးက စားပွဲလေးပေါ်လက်ကို ဆန့်တန်းလိုက်သည်။ သူလက်ထဲဖုံးရောက်လာမှ သတိရပြီး ကမန်းကတန်း စကားပြောခွက်နေရာကို လက်ဖဝါးလေးဖြင့်ဖုံးလိုက်မိသည်။ နောက် သူ့ဘေးမှာ အိပ်ပျော်နေသော ဦးဦးချစ်ကို လှမ်းကြည့်လိုက်တော့ သူလည်း ဖုံးသံကြောင့် နိုးသွားဟန်တူသည်၊ မျက်လုံးပွင့်လို့ နိုင်နိုင့်ကို ကြည့်နေသည်။ နိုင်နိုင်က အသံမထွက်နဲ့ ဟု သူပါးစပ်မှာ လက်ညိုးထောင်ပြလိုက် တော့ ခေါင်းငြိမ့်ပြသည်။
ဟယ်လို… ..အန်တီ နိုင်နိုင်ကျော့နွယ် လား… ..ဟဲ့မောင်စောကြည်၊ စောစောစီးစီးကွယ်၊ လန့်တောင်သွားတယ် ဖုံးသံက.. ..ဟင်မစောတော့ပါဘူးအန်တီရဲ့ အန်တီက အိပ်ယာမထသေးတာလား ဆောရီးပဲနော်.. ခုမှ နိုင်နိုင်လည်း နာရီကို လှမ်းကြည့်မိသည်၊ ဟောတော့ မွန်းတောင်တည့်တော့မယ်။ ခစ်၊ ညက ဦးဦးချစ်နဲ့ မတွေ့ရတာ ကြာလို့ ကဲလိုက်ကြတာ ၊ ဦးဦးချစ်ကလည်း အနားကို မပေးဘူးလေ၊ မနက် အာရုံတက်လောက်မှ အိပ်မောကျသွားတာကိုး။
အဲဒါကြောင့် မနိုးကြတာ၊ ခု ဖုံးလာမှ ပဲနိုးတော့တာကိုး။ ..အော်အေး ဟုတ်သားပဲ၊ ညက အိပ်ယာဝင်တာ နောက်ကျသွားလို့ မနိုးဘူးဖြစ်သွားတာ ခစ်ခစ်၊ ခုတော့ ထရတော့မှာပေါ့၊ ကဲပြော မောင်စောကြည် ဘာထူးလည်း.. နိုင်နိုင် က ကုတင်ခေါင်းရင်းကို ခပ်လျှောလျှောလေး ကျောမှီပြီး ဖုံးပြောနေသည်။ ညအိပ်ယာဝင်ကထည်းက ကိုယ်လုံးတီးမို့ နို့ကြီး နှစ်လုံးက ပြတင်းပေါက် မှန်ကို ဖြတ် ဝင်လာတဲ့ နေရောင် အောက်မှာ ဝင်းနေတယ်။ ဦးချစ်ဆွေက အသာအိပ်ယာပေါ်မှာ တတောင်ထောက်လို့ နိုင့်နိုင့် နို့သီးခေါင်းလေးတွေကို လာစို့သည်။ နိုင်နိုင်က ဖုံးပြောနေရင်းက ဦးချစ်ဆွေ လက်မောင်း ကို လက်သည်းနဲ့ ဆိပ်လိုက်ရင်း မျက်စောင်းလေးပါ တချက်ထိုးလိုက်သည်။ ခုထိမဝသေးဘူးလား ဆိုသည့်သဘော။
အန်တီလား၊ အင်း ဘာမှ လုပ်စရာမရှိပါဘူး ကွယ်၊ ခရီးပန်းလာလို့ အိမ်မှာ ပဲ နားနေတာ.. ဦးချစ်ဆွေလက်က နိုင်နိုင့်ပေါင်ကြားက အဖုတ်လေးဆီ ရောက်လာပြန်တယ်၊ အဖုတ်နူတ်ခမ်းသားလေးတွေ စောက်စေ့လေး တွေကို ဆွနေပြန်တယ်။ ..အင် အန်တီ့ဆီ လာလည်မို့..ဒီနေ့ကတော့… နိုင်နိုင်က အကြောင်းတခုခု ပြပြီးငြင်းမလို့ ကြံနေတုန်းသူ့ကို လက်နဲ့တို့လိုက်ပြီး လက်မထောင်ပြနေတဲ့ ဦးချစ်ဆွေကို တွေ့လိုက်လို့ ဖုန်းစကားပြောခွက်ကို သူ့လက်ဖဝါးနဲ့ ဖုန်းပြီး။ ..ဘာလည်း ဖေကြီး ဘာပြောမလို့လဲ.. ..ခေါ်လိုက် အိမ်ကို..ဖေကြီး ချောင်းချင်လို့.. ..အင် ဖေကြီးက လည်း .. နိုင်နိုင်က မျက်မှောင်လေးတချက်တွန့်ကာ ပြန်မေးလိုက်ရင်းမှ ၊ တွေးလိုက်မိပြီး ကြက်သည်းပါထသွားသည်။
တကယ်လားဖေကြီး.. ဦးချစ်ဆွေ ခေါင်းငြိမ့်ပြတာတောင် မစောင့်တော့၊ ..အေးလေ အန်တီတယောက်ထဲလည်းပျင်းနေတာနဲ့ အတော်ပါပဲ၊ ဘယ်အချိန်လောက်ရောက်မှာလည်း…. နိူင်နိုင် ဖုံးပြန်ချလိုက်တဲ့ အချိန်မှာတော့ ဦးချစ်ဆွေ ကလိထားလို့ သူ့စောက်ဖုတ်တခုလုံးလည်း ရွဲစိုနေပြီ။ နောက်ပြီး သူနဲ့ မောင်စောကြည်လုပ်တာကိုလည်း ဦးချစ်ဆွေ ချောင်းကြည့်နေမှာဆိုတော့ စိတ်လှုပ်ရှားမှုက အရမ်းဖြစ်နေသည်။ ဦးချစ်ဆွေကလည်း မနက်အိပ်ယာထ အားအပြည့်နဲ့မို့ နိုင်နိုင့်ပေါင်နှစ်လုံးကို ပုခုံးပေါ်တင်လို့ တဖောင်းဖောင်းချနေလိုက်သည်မှာ နောက်တနေ့ဆိုတာ မရှိတော့ဘူးလားဟုပင်ထင်ရလေတော့သည်။ ဦးချစ်ဆွေနှင့် နိုင်နိုင်မှာ တယောက်နှင့်တယောက် ဘာမှ လျို့ဝှက်ချက်မရှိကြပေ။
မနေ့ညက ဦးချစ်ဆွေနှင့် ချစ်ပွဲဝင်ရင်း နားနေရသော အချိန်တွေမှာ နိုင်နိုင်က သူခရီးသွား စွန့်စားခန်းများကို ပြောပြနေပေရာ၊ ကောင်းခန်း ရောက်လိုက် ဦးချစ်ဆွေက ထဆွဲလိုက်၊ တချီပြီးတာနဲ့ နောက်တခန်းပြော၊ ဦးချစ်ဆွေ စိတ်ထလာပြီး တချီဆွဲလိုက် ဖြစ်နေရသည်။ ထို့အတွက်ကြောင့်လည်း မောင်စောကြည် ဆိုတာ ဘယ်သူလည်း ဦးချစ်ဆွေက သိနှင့်ပြီးသားဖြစ်သည်။ အပြောနှင့်တောင် သူ စိတ်တက်ကြွရသဖြင့် တကယ်မြင်ချင်လာ မိနေတုန်း မောင်စောကြည် ဖုံးဆက်သည်ဆိုတော့ ဒါလိုချင်လို့ပဲ ဆိုတာ ဦးချစ်ဆွေ သိလိုက်သည်။ ဒါကြောင့်လည်း နိုင်နိုင့်ကို မီးစိမ်းပြလိုက်တာ။ နိုင်နိုင့် သူငယ်ချင်း အိဖြူ ဆိုတာကိုလည်း လုပ်ချင်နေမိသည်။ ဒါပေမဲ့ အဲဒါက အလှမ်းဝေးသည်လေ။
နိုင်နိုင်က သူတို့ အခန်း နှင့် ကပ်ရက် ဧည့်သည်ခန်းမှာ ဦးချစ်ဆွေကို ဝင်နေစေပြီး အပြင်က သော့ခတ်ထားလိုက်သည်။ ထိုအခန်းမှနေ၍ သူတို့ အခန်းကို ချောင်းဖို့ အပေါက်တွေရှာရ၊ ချဲ့ရနှင့် ဦးချစ်ဆွေ တယောက် အလုပ်ရှုတ်သွားရသည်။ နေ့ခင်း နှစ်နာရီလောက်ကျတော့ မောင်စောကြည်တယောက် ပေါက်ချလာတော့သည်။ နိုင်နိုင်နှင့် မောင်စောကြည်တို့ အိမ်ရှေ့ခန်းမှာ စကားတွေ ပြောနေကြပြီး အိပ်ခန်းထဲ ရောက်မလာသေးသဖြင့် ဦးချစ်ဆွေတယောက် နည်းနည်းတင်းလာမိသည်။ သူက စောင့်နေရတဲ့သူမို့ပါ။ တကယ်က ဘယ်လောက်မှ မကြာ။ နိုင်နိုင် တံခါးဖွင့်ပေးလိုက်တာနှင့် မောင်စောကြည်တယောက်အိမ်ထဲ ဝင်လာရင်း ဟိုကြည့်ဒီကြည့်လည်းလုပ် နိုင်နိုင့်ကိုလည်း ကြည့်ရင်း မျက်လုံးတွေက တခုခု သိချင်နေသလိုလို။ နိုင်နိုင်က အထာပေါက်ပြီးသား မောင်စောကြည် ၏ ဂဏှာမငြိမ်ပုံ ကို ပြုံးကြည့်နေပြီးမှ။
အန်တီ တယောက်ထဲပါကွယ့် ဘယ်သူမှ မရှိပါဘူး ။အန်တီ့ အမျိုးသားက ရှေ့တန်းမှာလေ၊ အထူးစစ်ဆင်ရေးဆိုလား သွားနေလို့.. ..အဟီး..အန်တီက အရမ်းချော၊အရမ်းလှတာပဲနော်..သေခြာကြည့်လေ ပိုချောလေပဲ.. ..အောင်မလေး မြှောက်မနေနဲ့ ကိုယ်တော်ချော ဘာစားမလဲပြော ကော်ဖီသောက်မလား… ..စားလာခဲ့ပြီ အန်တီရဲ့ ကျနော်ဆာနေတာ က ဒီပြင့်ဟာ.. ..အောင်မလေး .ဘာများ ဆာနေရတာလဲ.. ..ဟီးဟီးသိရဲ့သားနဲ့ဗျာ..ဒါနဲ့ အန်တီအန်တီနဲ့ လုပ်နေတာ အဲလောက်လည်းမကြီးသေးပဲနဲ့ဟာကို.. ..အဲဒါ ဆိုလည်းမမ ပြောင်းခေါ် ကဲ..ခစ်ခစ်.. ..မမ.. ကိုနမ်းချင်တယ်… ..ဟင် ဧည့်သည်က လည်း ထိုင်တောင်မထိုင်ရသေးဘူး .. ထနေပြီ အဟိ.. ..မမ ရယ် မနောက်ပါနဲ့ တကယ်ပြောတာပါ.. ..အို့.. ..ပြွတ်စ်.. မောင်စောကြည်က လည်း လက်သွက် ခြေသွက် မီးစိမ်းမြင်တာနဲ့ စဆွဲပြီ။
နိုင်နိုင့်ကိုယ်လုံးလေးကို အတင်းဆွဲဖက်ပြီး မျက်နှာအနှံ့ ဖက်နမ်းတော့သည်။ ..အို အိမ်ရှေ့ကြီးမှာ ကွာ.. အခန်းထဲသွားမှ ဦးဦးချစ် မြင်ရမှာမို့ နိုင်နိုင်က နည်းနည်းမူလိုက်သည်။ ..ဒါဆိုလည်း မမ အခန်းထဲ သွားမယ်လေ.. ..အောင်မယ် သူက ပိုင်စိုးပိုင်နင်းနဲ့ ဘယ်သူက အခန်းထဲ သွားမယ်ပြောလို့လည်း.. နောက်တော့လည်း အခန်းထည်း ရောက်လာကြတာပဲပေါ့။ ဦးဦးချစ်မှာတော့ စိတ်ထဲမှာ နှမြောသလို မနာလိုသလိုလို တော့ဖြစ်မိသည်။ ဒါပေမဲ့ နိုင်နိုင်က သူ့မယားမှ မဟုတ်တာလေ။ နဂိုထဲက မှ သူလည်း သူများမယားကို ဆွဲနေတာ ဆိုတော့။ ဒါပေမဲ့ သူက နိုင်နိုင့်ကို ယောက်ျားမယူခင်ကထည်းက ဆွဲခဲ့ရတာမဟုတ်လား၊ အဟီးး။ ဒါတောင်မှ သူလက်နှေးလို့ ဒုတိယလူ ဖြစ်သွားရတာ။ ဦးချစ်ဆွေ တယောက် အတွေးနဲ့ကို သူ့ကောင်ကြီးက တောင့်တင်းနေပြီး ထိပ်ဖျားက ပုဆိုးကို ပွတ်နေတာ နာသလိုရှိလာသဖြင့် ပုဆိုးကို ကွင်းလုံးချွတ်ချထားလိုက်တော့သည်။
နိုင်နိုင်တို့ နှစ်ယောက်ရွှေ့လျှားနေရာကို မြင်ကွင်းကောင်း သည့်အပေါက်လှည့်ပတ်ကာ ချောင်းနေလေတော့သည်။ နိုင်နိုင် မှာ ဒီတခါတော့ တော်တော့်ကို အရည်စိုရွဲနေရလေသည်။ မနေ့တနေ့က မှ သိသော ကောလိပ်ကျောင်းသား ကောင်လေးတယောက်ကို ကိုယ့်အိမ်ပေါ်က လင်မယားအိပ်သည့်ကုတင်ကြီးပေါ်မှာ ကိုယ့် ချစ်ပထွေး ဦးဦးချစ်ရှေ့ အလိုးခံ ရမှာက နေ့တိုင်းကြုံရမဲ့ အတွေ့အကြုံမျိုးမှ မဟုတ်တာကို။ မောင်စောကြည်က သူနှင့် နူတ်ခမ်းချင်းစုပ်နမ်းနေရင်း လက်တွေက နိုင်နိုင့်တကိုယ်လုံးကို သမနေသည်။ နိုင်နိုင် ကအိမ်နေရင်းပေမဲ့ မောင်စောကြည်လာမယ် ဆိုတော့၊ မြူဆွယ်မဲ့ပုံမပေါက်မောင်၊ အပျံစား အသားကောင်းကောင်း ရင်ဖုံးအင်္ကျီနှင့် အချိတ်ထမိန် မရမ်းစေ့ရောင် ဝမ်းဆက် ကို ပွဲနေပွဲထိုင် သွားမလို ဝတ်ထားသည်။
မောင်စောကြည် မျက်လုံးထဲ မှာ အရမ်းလှနေပေမဲ့ သူက အတွင်းပစ္စည်းတွေကို လင်းလင်းချင်းချင်း အလင်းရောင် အောက်မှာ ကြည့်ချင်နေပြီ ဆိုတော့ အမြန်ချွတ်ပြစ်နေတော့သည်။ အတွင်းကလည်း အသားရောင် ဘရာဇီယာ အပျော့၊ အသားရောင် ဖင်ကြားညှပ်ပင်တီ တို့ကို ဝတ်ထားပေရာ မောင်စောကြည် တယောက် သရည်တမျှားမျှား ကို ကျသွားရသည်။ မောင်စောကြည်က နိုင်နိုင့်ကို ကုတင်စောင်းတွင်ထိုင်ခိုင်းပြီး နိုင်နိုင့်ဖင်ကြားညှပ်ဘောင်းဘီကို ဆွဲချွတ် ချလိုက်သည်။
နောက်မှ ပေါင်နှစ်လုံးကြား ခေါင်းဝင်ကာ ကမူးရူးထိုး နမ်းရှုံ့ တော့၏။ နိုင်နိုင့် အဖုတ်တခုလုံးအရည်တွေနဲ့ ရွှဲစိုနေတာတွေ့လိုက်ရတော့ သူ့ကို စောင့်နေရင်း ဒီကောင်မကြီး စိတ်အရမ်းထနေတာဖြစ်မယ်ဟု တွေးရင်း ဝမ်းသာအားရ ဖြစ်သွားခဲ့ရသည်။ သူ့လျှာကြီးဖြင့် တပြတ်ပြတ်မြည်အောင်ရက်ပေးလေတော့သည်။ မောင်စောကြည်၏ နွေးထွေးသောလျှာကြီးမှာ နိုင်နိုင့်အဖုတ်နူတ်ခမ်းသားလေးတွေ စောက်စေ့ကလေးတွေကို ထိုးဆွ ရက်ပေးနေတော့ နိုင်နိုင့်ခမျှာ တဖက်ခန်းက ချောင်းနေသော ဦးဦးချစ် ကိုပင်ခေတ္တမျှ မေ့သွားခဲ့ရသည်။ မျက်လုံးကို စုံမှိတ်ကာ စောကြည် ဦးခေါင်းကို သူ့လက်နှစ်ဖက်ဖြင့် ကိုင်ထားလိုက်မိလေတော့သည်။
မောင်စောကြည်ဘာဂျာမှုတ်တာ ကောင်းလွန်းသဖြင့် နိုင်နိုင့်ခမျာ မွေ့ယာပေါ် ပက်လက်လှန်ကျသွားခဲ့ရလေသည်။ မောင်စောကြည်က လည်း သူ့သွားရည်များနှင့် နိုင်နိုင့် စောက်ရည်ကြည်များကို သူ့လက်ခလည်မှာလူးပြီး နိုင်နိုင့်ခရေပွင့်လေးကို လက်တဆစ်ခန့် ထိုးကစားလေရာ နိုင်နိုင်တယောက် ခနလေးဖြင့် ကာမ အရသာအထွတ်အထိတ်ကို ရောက်သွားရလေတော့သည်။ နိုင်နိုင်တယောက် ကိုယ်လုံးလေး တောင့်တင်းပြီးမှ တကိုယ်လုံးပျော့ခွေသွားတာတွေ့ရတော့ တချီပြီးသွားမှန်း မောင်စောကြည်သိလိုက်သည်။ သူလည်း ပါးစပ်ညှောင်းဇက်ညှောင်းပြီမို့ အမောဖြေသည့်အနေဖြင့်၊ အိပ်ယာပေါ် နိုင်နိုင့်နဘေးဝင်ကာ ပက်လက်လှဲနေလိုက်သည်။ သူ့ပုဆိုးကိုလည်း ကန်ချွတ်ထားခဲ့ပြီမို့ သူ့ကောင်ကြီးက အလံတိုင်ကြီးလို မတ်ထောင်လျှက်ရှိနေပေသည်။ ..ကဲ ငါ့မောင်နားအုန်း အမပြုစုအုန်းမယ်..
နိုင်နိုင် က အိပ်ယာပေါ်ထထိုင်လိုက်ပြီး မောင်စောကြည်၏ အလံတိုင်ကြီးကို ကုန်းကာ ငုံစုပ်လိုက်သည်။ နောက်တော့ သူ့ခေါင်းကို နိမ့်ကာမြင့်ကာဖြင့်၊ မောင်စောကြည်လိင်ချောင်းကြီးကို သူ့ပါးစပ်ဖြင့်လုပ်ပေးနေတော့သည်။ လုပ်ပေးနေရင်းလည်း ဦးဦးချစ် ကြည့်နေမည်ဖြစ်သော နံရံဘက်ကို လည်း လှမ်းလှမ်းကြည့်ပြီး မျက်ခုံးပင့်ပင့်ပြနေပေသည်။ ဦးဦးချစ်ချစ်တယောက်လည်း သူ့ပြောင်ကြီး သူကိုင်ကာ၊ ဆုပ်လိုက် ပွတ်တိုက်လိုက်ဖြင့် တကုန်းကုန်းချောင်းနေလေသည်။ မောင်စောကြည်မှာ အရင်းတင်းနေပြီမို့ ရေရှည်မထိန်းထားနိုင်ရှာပေ၊သို့သော်သူကလည်း ပထမဆုံးအချီကို ပါးစပ်ထဲမထုတ်ချင်ပေ။ ..အား..အမ ..ခန ကျနော် ထွက်သွားလိမ့်မယ်ခနလေး.. နိုင်နိုင်က မောင်စောကြည်လီးကြီးကို သူ့ပါးစပ်မှ ချွတ်လိုက်ပြီး၊ ..ပါးစပ်ထဲ ပြီးချင်ပြီးလိုက်လေ.. ရပါတယ်ကွယ့်… ..ဟင့်အင်း..ကျနော်က မမ စောက်ဖုတ်ကိုပဲ ပထမဆုံးလုပ်ချင်တာ..အဟီး.. ..ကဲပါ ကိုယ်တော်ချောလေးသဘော.. မောင်စောကြည် တယောက် ဘာဆေးတွေများစားလာသလည်းမသိ။
နိုင်နိုင်တယောက်တော့ ကားဆင်းသွားရသည်။ လုပ်လိုက်တာလည်း ပုံစံမျိုးစုံ အပေါက်လည်းကုန်၊ နိုင်နိုင့်မွေ့ယာခင်းတခုလုံးလည်းပေပွ။ မောင်စောကြည်ပြန်လို့ တံခါးဝကို နိုင်နိုင် လိုက်ပို့တော့တောင် နိုင်နိုင် တယောက် နုံးချည့်နေပြီ။ မောင်စောကြည်အိမ်ပြင်ထွက်သွားလို့ လမ်းထိပ်တောင်မရောက်သေး၊ သရဲမရဲ စီးနေသော ဦးချစ်ဆွေက ရေဆေးတောင်မစောင့်၊ အသားကုန်ဗျင်းတော့သည်။ နိုင်နိုင့်အတွက် တပတ်စာဖူလုံသွားသည်လို့သာပြောရတော့မည်။ နောက်နေ့ ဦးချစ်ဆွေ ပြန်သွားပြီး နှစ်ရက်လောက်မှာ နိုင်နိုင့်ယောက်ျား ဗိုလ်မူးအောင်နိုင်ပြန်ရောက်လာသည်။ နိုင်နိုင်လည်း အသားပြန်သေစ ဟိုက ငတ်ပြတ်ပြီး ပြန်လာတဲ့ကောင်က ထပ်ပြီး ဗျင်းပြန်တော့ ပြိုင်းသွားရပြန်ပါသည်။
နောက် နှစ်ပတ်လောက်နေတော့ သူ့ယောက်ျားခရီးပြန်ထွက်ရသည်၊ ဒီတခေါက်က တခြားကိစ္စ။ သူ့ယောက်ျားခရီးထွက်သွားပြီး နောက်တရက်နှစ်ရက်မှာ လူက မအီမသာဖြစ်၊ မနက်အိပ်ယာထ အံချင်သလိုဘာလိုလို ဖြစ်တော့ ဆရာဝန်သွားပြသည်။ ဆရာဝန်က သူ့သူငယ်ချင်း မေနန်းခေါင် ၏ ခဲအို ဒေါက်တာနောင်ရဲ ဖြစ်သည်။ သူ့ကို ကိုယ်ဝန်ရှိနေပြီလို့ထင်သည်ဟု ပြောသည်။ နောက်ဆိုင်လားမဆိုင်လားမသိ ဟိုဟာကို သေခြာစစ်ဆေးပြီးမှ ပြောလို့ရမည်ဆိုပြီး အဖုတ်ကို လှန်ကြည့်သည်၊ နောက် သူ့ လက်အိပ်စွတ်ထားသော လက်ချောင်းကြီးနှင့် ဟိုဖြဲဒီဖြဲကြည့်သေးသည်။ ဟွန့် အမျိုးသား တွေ အိုဂျီဘီဝိုင် လုပ်နေကြတာ သူသိပ်မသင်္ကာ၊ မိန်းမ လူနာလာတိုင်း ဟိုဟာဖြဲကြည့်ခွင့် လိုင်စင်ရနေကြသည်။
တော်တော်ဝါသနာကြီးသည့်သူတွေပဲဖြစ်မည်ဟု သူတွေးနေမိသည်။ မေနန်းခေါင်က တော့ ပြောပါတယ်၊ ငါ့အမ ယောက်ျားက ရိုးပါတယ်တဲ့။ ငါ့တုန်းကတောင် မီးမမှန်တာ သူကြည့်ပေးတာပဲတဲ့။ အင်း။ ထားလိုက်ပါတော့လေ။ ဒါပေမဲ့ နိုင်နိုင်စိတ်ပူနေတာက သူ့ယောက်ျား နှင့်သူ ဆက်ဆံဖြစ်တာက လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပတ်လောက်ကမှ ဆိုတော့ အခုနေ သူကိုယ်ဝန်ရှိတယ် သွားပြောရင်၊ သူယောက်ျားက ပြဿနာရှာတော့မည်။ မေနန်းခေါင် ကိုကပ်ပြီး ပြောကြည့်သည်။ သူကိုယ်ဝန်ရှိတယ် ဆိုတာကို ရက်ရွေ့ပြီးပြောပေးလို့ရမလားပေါ့၊ သူစိုးရိမ်မိတာကိုလည်းပေါ်တင်ပဲပြောလိုက်သည်။
မေနန်းခေါင်က ဘာမှ စိတ်မပူနဲ့ သူ့ခဲအိုသူပိုင်ကြောင်း၊ နင်ကြိုက်တဲ့နေ့ကို ပြောအဲဒီနေ့မှာ ကိုယ်ဝန်ရှိတယ်လို့ သူ့ကို ပြောခိုင်းပေးမည်ဖြစ်ကြောင်းပြောလို့ စိတ်နည်းနည်းအေးသွားရလေသည်။ မေနန်းခေါင်တယောက် သူ့ခဲအိုကို တော်တော်ပိုင်ပါလားလို့ စိတ်ထဲမှာလည်း တမျိုးတော့ဖြစ်မိသည်။ ဒါပေမဲ့ အဲဒါ ငါ့အလုပ်မဟုတ်ဘူးလေဟု သာ နိုင်နိုင်တယောက်တွေးလိုက်မိပါတော့သည်။ …အဲဒါပါပဲ အိဖြူရယ်၊ ငါတော့ ပြောရခက်နေပြီ အဲဒီတုန်းက သေခြာလည်းမသိပါဘူး။ ကိုယ်ဝန်ရှိပြီ ဆိုတော့မှ ငါသွားစဉ်းစားလိုက်မိတာ။ အဲဒီအတောအတွင်းမှာ နင့်ယောက္ခထီးကြီးရယ်၊ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားလေး တယောက်ရယ်၊ ငါ့ပထွေး ရယ်၊ ငါ့ယောက်ျားရယ်၊ အဲဒီလေးယောက်နဲ့ သွားခဲ့ဘူးတယ်။
မောင်စောကြည်နဲ့ ဦးဦးချစ်ကတော့ ခွဲလို့ရမယ်မထင်ဘူး၊ တယောက်ကနေ့ တယောက်ညလိုဖြစ်နေတာ၊ ခစ်ခစ်.. ..စောက်ကောင်မစုတ် အရေးထဲ ရီနေသေးတယ်၊ ငါ့မှာဟယ် သားအဖနှစ်ယောက်နဲ့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်၊ ဘယ်သူ့ဟာမှန်းသေခြာမသိဘူး၊ တကယ်တော့ ငါ့ သမီးက အရေးမကြီးဘူး ဘယ်သူ့ခလေးဖြစ်ဖြစ် ဒီသွေးပဲ နင့်ခလေးကို ပဲ စစ်ဖို့လိုမယ်ဟ… ..အင်း စစ်ဆိုရင်လည်း နင့်ယောက္ခမကြီးကိုပဲ သွေးစစ်မှ ရတော့မှာပဲ။ မောင်စောကြည်ကလည်း ဘယ်နားသွားရှာရမယ်မှန်းမသိတော့ဘူး၊ ငါ့ပထွေးကလည်း ဆုံးသွားပြီလွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်နှစ်လောက်ကပဲ… ..အင်း ဒါဆိုရင် ဘယ်လိုလုပ်မလည်း… ..နင့်ယောက္ခထီးကြီး ဆီက နေနင်သွေးစစ်ချင်လို့ဆိုပြီးယူလို့မရဘူးလားဟ..မထူးပါဘူးဟာ ငါလာခဲ့မယ်၊ ငါ့သား ကိုပါ တခါထဲ သွေးစစ်ပြီး ဒီအန်အေ တက်စ်လုပ်ကြည့်မှ ရမှာပေါ့.. ..
အင်း.. ငါပြောရင်တော့ ရမှာပါ..ဒါပေမဲ့ ခု သူမရှိဘူး၊ အခု စလုံးမှာ ငါ့ယောက်ျား ဆီလိုက်သွားတယ် ကျန်းမာရေး စစ်မလို့တဲ့ လေ.. ဟောတော့ အရေးထဲမှာဟယ်..တိုက်ဆိုင်လိုက်တာ.. ဒါဆိုဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဟဲ့.. .. ငါ့ ယောက္ခမ ကြီးကို မေးကြည့်လိုက်ရင် ကောင်းမလား သူ့ဆီက အကြံညဏ်လေးဘာလေးရအောင်.. ..အင် ဖြစ်ပါ့မလား နင့်ယောက္ခမကြီးက ရိပ်မိသွားမှာပေါ့.. ..အေးဟယ် နင့်ကို ငါမပြောဖြစ်တာတွေရှိသေးတယ်.. ..ဘာလည်း ပြောစမ်းပါအုန်းကောင်မရယ် နင်ကလည်း လျို့ဝှက်လိုက်တာ တခါထဲ.. ..ငါနဲ့ ယောက္ခထီးကြီးတို့ ဖြစ်တာကို ယောက္ခမကြီး မိသွားတယ်.. ..။
ဟဲတော့..ဘုရားရေ..အင်း ဒါပေမဲ့ နင်အခုမှ ငါ့ကို ပြောပုံထောက်ရင် နင်တို့ ပြဿနာ အကြီးအကျယ်မတက်လိုက်ဘူး မဟုတ်လား… ..အင်းဟဲ့ ပထမတော့ ငါ လည်း သေတော့မတတ်ပေါ့လန့်သွားတာ.. ..ဟဲ့ ဒါနဲ့ နေပါအုန်း နင်က အဲဒီတုန်းက နင့်ယောက်ျားဆီ မသွားခင် နင်တို့ကို မိသွားတာလား.. ..မဟုတ်ဘူးဟဲ့ ပြန်လာမှ..အဟီးး.. ..အော်ကောင်မ တော်တော်ထ… ပြန်လာတော့ ဆက်ဖြစ်သေးတယ်ပေါ့… ..ခစ်ခစ်..နင်ကလည်းဟာ သိရဲ့သားနဲ့ နင်က ငါ့ထက်တောင်ဆိုးသေးတာကို.. ..အေးပါအေးပါ ဆက်ပြောစမ်းပါအုန်း သွားရည်ကျစရာလေးတွေကို..ခစ်ခစ်.. ..အေး. ငါပြန်လာပြီးတော့ ငါလည်း စိတ်နည်းနည်းအေးသွားတာပေါ့ဟ၊ အဲဒီအချိန်မှာပဲ ဖေကြီးက ပြန်လာနူးတယ်ကွာ..ငါလည်း နဂိုထဲက စိတ်ပါပါ ဆိုတော့ ဖြစ်သွားတာပေါ့ဟာ..နောက်တော့ တဖြည်းဖြည်း အတင့်ရဲလာကြပြီး တချို့ ဟာတွေ လစ်ဟာသွားကြတာ တနေ့တော့ တန်းတိုးတော့တာပဲ၊ ပိုဆိုးတာက ငါက ကိုယ်ဝန်ကြီး တော်တော်ရင့်နေပြီ.. …ဟဲတော့ ကောင်မစုတ် ကဲလိုက်တာ..
ခွိခွိ.. …ယောက္ခမ ကြီးက တော်တော် ပွက်တာပေါ့၊ ငါ့ကိုတော့ မဟုတ်ဘူး သူ့ယောက်ျားကို .. ခလေးထိခိုက်မှာစိုးလို့တဲ့ ၊ သူ့မြေး ကလေးကိုတဲ့၊ ဒီလောက်တောင်နှာပွစရာ ရှားလားပေါ့ကွာ..ဟိုဟော်တယ်က ကောင်မတွေ သွားလုပ်ပါလား ဘာညာနဲ့၊ ငါလည်းရှက်လိုက်တာကွာ လဲသေချင်တော့တယ် အဲဒီနေရာမှာ.. ….ခစ်ခစ်…ခစ်ခစ်… ..ငါလည်းတော်တော်အံသြသွားတယ်က ယောက္ခမကြီးက သူ့ယောက်ျား ဖောက်ပြန်တာရော ငါ့ကိုရော ဘာမှ မပြောပဲနဲ့ သူ့မြေးလေး ထိခိုက်မှာစိုးလို့ ဒေါပွတာကို ငါနောက်မှ တွေးမိတယ်… အဟီး.. ..ကောင်မ နင် ငါ့ကို မလျိုနဲ့တော့ နင်ခလေးမွေးပြီးတော့ရော နင့်ယောက္ခထီးကြီးနဲ့ ဆက်ဖြစ်တယ် မဟုတ်လား… ..အင်း .. ငါ့သမီးလေး နို့တိုက်တော့ ၊
ပထမ ငါ့နို့ချောင်းက ပိတ်နေတယ်ကွာ၊ သမီးလေး စို့လို့မရဘူး အဲဒါနဲ့ ယောက္ခထီးကြီးက စို့ပေးရင်း နဲ့ ခိခိ..တော်ပြီကွာ ရှက်လာပြီ၊ နင်က ငါ့ကို တမျိုးထင်တော့မှာပဲ… ..အင်း နင့်ဟာက ငါတောင်အားကျလာပြီ၊ ခစ်ခစ် အနားမှာ တယောက်မရှိ တယောက်ရှိဆိုတာလိုပဲ ဟွန်း..အေး နင့် ယောက္ခမ ကြီးဆီကို နည်းနည်း အကြံတောင်းကြည့်ပါလား ဘာလုပ်ရမလဲ၊ ဘယ်လိုပြောကြရမလည်းဆိုတာ၊ သူက လူကြီးဆိုတော့ အတွေ့အကြုံပိုရှိမှာပေါ့… ..အေးအေး ငါညနေကျရင်ဖုန်းဆက်မယ်.. ။
နင်သာ လာဖို့ပြင်ထားလိုက်လက်မှတ်တွေဘာတွေ ဘုတ်ခ် လုပ်ထားတော့… ..အေးပါ.. အေးပါ… …ကလင်..ကလင်… …ဟယ်လို… …မိနိုင်လား…. ..အေးအိဖြူ ဘာထူးလဲ… ..နင်လက်မှတ်ဝယ်ပြီးပလား…မဝယ်ရသေးရင် မလာနဲ့တော့… ..ဟေ…ဘယ်လိုဖြစ်ရပြန်ပြီလဲ ဟ…ဖုန်းပဲဆက်ထားတာ ပြန်ပြောလိုက်ရင်ရတယ် မယူတော့ဘူးလို့… ..အဲဒါဆိုလည်းဖုန်းဆက်လိုက်တော့ ငါတို့ကိစ္စ ရှင်းသွားပြီ… ..ဟဲ့ ပြောစမ်းပါအုန်း ဟ.. ရှင်းရှင်းလင်းလင်း.. ..ဒီလိုဟဲ့ .. ကိုမျိုးဆွေက ငါ့ယောက္ခထီး နဲ့ ရတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ ငါ့ယောက္ခမကြီးက ပြောတယ်၊ အဟီးး ဘယ်သူ့မှ မပြောဖို့လည်းငါ့ကို နူတ်ပိတ်တယ် အဟီး။ ငါ့ယောက္ခမကြီး ဒေါ်နီလာက တခြားကောင်နဲ့ ဖြစ်ပြီးရထားတာတဲ့။ ဦးအောင်အောင်ဆွေက မျိုးမအောင်ဘူးတဲ့။
ခိခိ။ တကယ်တော့ ဦးအောင်အောင်ဆွေကလည်းသိတယ်တဲ့ဟဲ့။ ခိခိ။ ငါက တကယ်တော့ အအေးမိပြီး ဟိုလာလာတာ နောက်ကျ တာကို ဆရာဝန်နဲ့ မစစ်ပဲ ကြောက်လန့်ပြီး ငါ့ယောက်ျားဆီကို ထွက်သွားလိုက်တာ၊ ဟိုမှာကျမှ တကယ် ဗိုက်ကြီးသွားတာဟ။ အခုမှ ငါလည်း ယောက္ခမကြီးပြောမှ ရက်တွေ ပြန်တွက်ကြည့်မိတာ။ ငါ့ယောက္ခထီးကြီးကလည်း သူ့တို့ လျို့ဝှက်ချက်ကို ငါမသိစေချင်တော့ မသိချင်ဟန်ဆောင်ပြီး ငါ့ကို ကိုမျိုးဆွေ ဆီပို့လိုက်တာ၊ ခစ်ခစ်။ ကဲ အဲတော့ ငါတို့ ကလေးနှစ်ယောက် က ဘာမှ မဆိုင်တော့ဘူး။ နင်ပဲ သဘောတူသလား ဒါပဲပြော.. ..ခစ်ခစ်.. ကောင်မရယ် နင်နဲ့ငါက ဘာပြောစရာရှိလို့လဲ၊ ခစ်ခစ်.၊ အော် ငါတို့လည်တယ် ဆိုတာ နင့်ယောက္ခမကြီး ခြေဖျားတောင်မမှီပါလားဟယ်၊ ခစ်ခစ်။ ငါတို့က တောင် ငါတို့ ယောက်ျားတွေ မသိအောင် ဖုံးနေရသေးတယ်။ နင့်ယောက္ခမကြီးကတော့ သူ့ယောက်ျားကတောင် လိုက်ဖုံးနေရတာပါလား ခစ်ခစ်… ပြီးပါပြီ။
Categorized as အငျးဆကျ Tagged ဒုတိယလူ